(No. 39, June 30, 2020)
၁။ ကျောက်မဲတွင် RCSS နှင့် တပ်မတော် တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံ ၃၀ဝ ကျော် ဘေးလွတ်ရာ တိမ်းရှောင်
၂။ မြန်မာ အစိုးရတပ် နှင့် KIA တိုက်ပွဲ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားလာ
၃။ ကျောက်တန်း နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်မည့် ထုတ်ပြန်ချက် ပြန်ရုပ်သိမ်း
၄။ စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် အရပ်သားတဦးရိုက်နှက်ခံရ ဒဏ်ရာပြင်းထန်
၅။ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့် မရောက်သေးဘူးလို့ က.လ.လ.တ ပြော
၆။ ရှမ်းမြောက်က KBZ ဘဏ်ခွဲတချို့အတွက် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူကြောင်း SSPP/ SSA ပြော
၇။ တိုင်းရင်းသူများ မုဒိန်းမှုကို စစ်လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုခံနေရဟု WLB ပြော
၈။ ရသေ့တောင်က တပ်မိသားစုဝင် လူငယ် ၃ ဦးကို AA ဖမ်းဆီးထား
၉။ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ UNDP ကို UNA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံ
၁၀။ ဖားကန့်လုပ်ကွက်များ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ သုံးလ ပိတ်သိမ်းရန်နှင့် ခိုးကျင်း မတူးဖော်ရန် အချက် ၁၀ ချက် ညွှန်ကြား
၁၁။ ဖာပွန်ဒေသတွင် ဖျက်ဆီးခံရသည့် KNU ၏ Covid စစ်ဆေးရေးဂိတ်နေရာတွင် အသစ်ပြန်ဆောက်ပြီး ထပ်ဖွင့်
၁၂။ စစ်တပ်က၊ တောင်သူတွေကို ပစ်ဒဏ်ထပ်မံချမှတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ချက်တက်တဲ့အပေါ် ဖြေလျော့ပေးဖို့ တောင်းဆို
၁၃။ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် တထပ်တည်းကျစေမည်ဟု UEC ဥက္ကဋ္ဌပြော
၁၄။ အစိုးရသင်ရိုးညွန်းတမ်းတွင် ကချင်လူမျိုးများ၏အခေါ်ဝေါ်မှားယွင်းနေမှုကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုသွားမည်
၁၅။ ပလက်ဝမြို့မှ တခြားမြို့သို့ ဆက်သွယ်သော လမ်းကြောင်းများစပွင့်
၁၆။ ချင်းပြည်နယ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ ၃၃ ဦးအနက် တီးတိန်မြို့ ဒိန်ပီးကျေးရွာ၌ Facility Quarantine ဝင်နေသူတစ်ဦး သေဆုံး
၁၇။ ရေး – ထားဝယ်သွား ကားလမ်းပေါ်၌ ယာဉ်တိုက်မှု ၃ နေရာ ဖြစ်ပွား
၁၈။ မိုးနဲမြို့ကို ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြထားသော်လည်း သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသဖြင့် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုများ နေ့စဉ်ဖြစ်လာ
၁၉။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် Code of Conduct တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအပါအဝင် ပါတီအချို့လက်မှတ်မထိုး
၂၀။ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားသည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအား သေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့ရှိ
၂၁။ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်း သံရုံးအဖွဲ့အစည်းများထုတ်ပြန်
၂၂။ မွန်ပြည်နယ်တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်သူ ၃၀ဝ ခန့် ရှိလာ၊ ကိုဗစ်နည်းတူ မပေါ့ဆကြရန် သတိပေး
၂၃။ ရသေ့တောင်မြို့မရဲစခန်းမှ အချုပ်သား ၃ ဦး ထွက်ပြေး
၂၄။ ကရင်ဒုံးအကကို UNESCO အသိအမှတ်ပြု စာရင်းတင်သွင်းမည်
၂၆။ အမ်းမြို့နယ်တွင် ရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ ၂ဆကျော် မြင့်တက်လာ
၂၇။ မိုးကောင်းမြို့ နန့်ရင်း ရပ်ကွက်တွင် ရေမြောင်းတူးဖော်ရာမှ ကျောက်စိမ်းအပိုင်းအစများတွေ့ရှိသဖြင့် ရှာဖွေသူများ
၂၈။ တာချီလိတ်တွင် ငွေကျပ် ၂၇ ဘီလီယံနီးပါးတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိ
၂၉။ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ထပ်မံတွေ့ရှိ၊ တရားခံပြေးကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဟု ဆို
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ် ပန်လော့ကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာ ဇွန် ၂၈ မနက်ကနေ ဒီနေ့မနက်အထိ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ကြား ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့လို့ ရွာသား ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ၊ ၃၀ဝ ကျော် ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။
ကျောက်မဲမြို့နယ်တောင်ဘက် ၈ မိုင်လောက်ကွာ ပန်လော့အုပ်စု အက်ကီး၊ နမ့်ဖတ် ပြိန်းနိမ်၊ ကျေးရွာအနီးတဝိုက်မှာ မနေ့ က ပစ်ခတ်မှုတွေရှိပြီး ဒီနေ့မနက်မှာလည်း ပန်ခဲန်ရွာနားမှာ ထပ်ပြီးပစ်ခတ်ကြလို့ ရွာသား ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ရွာသူ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရတာကြောင့် နောင်ချို ဂုတ်ထိပ်ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ ကျောက်မဲမြို့နယ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းထွန်းဝင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။“ကနေ့မနက် ကျနော်တို့ ပါတီ ဝင်နဲ့ ကော်တိုင်းရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့တွေ ပန်လော့ဘုန်းကြီးကျောင်းက စစ်ပြေးရှောင်တွေဆီရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး အယောက် ၂၀ဝ ကျော်ရှိမယ်။ သူတို့ လိုအပ်ချက်တွေ အရင်သွားကြည့်တာပါ။ အဓိကလိုတာကတော့ စားနပ်ရိက္ခာပေါ့ နော်။ ဒီတသုတ်က မနေ့မနက်က တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ ပြေးလာတာ၊ ကနေ့မနက်မှာကျတော့ ဟိုင်းကွီ၊ ပန်ကျင်ရွာဘက်မှာ ထပ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ လက်နက်ကြီးကျည်သင့်လို့ ပန်ကျင်ရွာသား ၁ ယောက်သေဆုံးပြီး ရွာသူ ၁ ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ သူ့ကို နောင်ချိုဂုတ်ထိပ်ဆေးရုံ ပို့ထားပြီး ရွာသားပေါင်း ၁၀ဝ ကျော်က တော့ နောင်ချိုဂုတ်ထိပ် အောင်ဓမ္မာရုံဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ သွားစုနေကြပါတယ်ခင်ဗျ။”ဒါ့အပြင် မနေ့က ဟိုင်းကွီရွာသား ၄ ယောက်နဲ့ မော်တော်ကား ၁ စီးကို မြန်မာ့ တပ်မတော်ဘက်က ချောဆွဲသွားကြောင်း၊ အဲဒီကိစ္စကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ကျောက်မဲ စကခ ဆီ ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့လို့ ပြန်လွတ်လာပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျောက်မဲမြို့၊ နမ့်ခုံးရှမ်းများပရဟိတအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းကူးကလည်း တိုက်ပွဲရှောင်တွေဟာ ပန်လော့ရွာအပြင် နမ့်ဖတ် ကျောင်းတိုက်မှာလည်း ၄၀ ကျော်ရှိသေးတယ်လို့ ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို မသိရကြောင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနေ့က RCSS တပ်က ဟိုင်းကွီရွာဘက်မှာ မူးယစ်ဆေးတွေ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပြီး အခမ်းအနားလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်နေ့မနက်မှာ တပ်မတော်ယာဉ်တန်း အစီး ၂၀ ကျော် တက်သွားတာတွေ့ပြီး နှစ်ဘက်ရင်ဆိုင် ပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျောက်မဲဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီဗွီဘီက RCSS တာဝန်ရှိသူတွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ မရသေးပါဘူး။
ပြည်သူလူထုဟာ လတ်တလော ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကြောင့် အလုပ်အကိုင်ကို ပုံမှန်မလုပ်နိုင်လို့ စား ဝတ်နေရေးကြပ်တည်းနေတဲ့ကြား အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ရပြန်တော့ စစ်ရှောင်သူအတွက်ရော စစ်ရှောင်ကူညီလက်ခံထားတဲ့ ရွာ တွေအတွက်ပါ ပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်စေလို့ တိုက်ပွဲဖြစ်စေမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေ တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ရှားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုကြောင်း နမ့်ခုံးရှမ်းများပရဟိတအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းကူးကပြောသွားပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/396
နှစ်ဖက် bilateral အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနေဆဲကာလမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးမှု မရှိသလေက်ဖြစ်နေသော ကချင်ပြည် နယ်မှာ မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကြား ဇွန်လ (၂၉)ရက်၊ တနင်္လာနေ့ က ကချင်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာသည်ဟုသိရသည်။
KIA တပ်မဟာ (၈) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၅) နယ်မြေအတွင်း KIA စခန်းများရှိရာသို့ တပ်မတော်စစ်ကြောင်း နှစ် ကြောင်း ထိုးစစ်ဆင်လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် တနင်္လာနေ့ နံနက်ပိုင်း မိနစ် ၃၀ ခန့်ကြာ La Mai Yang တွင် ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO က ဆိုသည်။ “တပ်မတော် စစ်ကြောင်းတွေ ဝင်လာတော့ တိုက်ပွဲ အချိန် တို ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ KIA ဘက်က မိုင်း ၂ ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ် လောက်ဖောက်ခွဲတာမျိုး၊ လက်နယ်ငယ်တွေနဲ့ အနည်းငယ် ပစ်ခတ် တာမျိုးလောက်ပဲ ပြုလုပ်ပြီး စခန်းကို ဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်” ဟု KIA အရာရှိ တစ်ဦးပြောပါသည်။
KIA တပ်ရင်း (၅) Ga Hkyeng Bum နယ်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော တပ်မတော် ခြေမြန်တပ်ရင်း (၃၈၉) နှင့် ၎င်းတပ်ဖွဲ့၏ စစ်ကူအဖြစ် ဝင်လာသော တပ်မတော် ခြေလျင်တပ်ရင်း (၂၃၇) တို့ကို KIA အဖွဲ့ ခုခံတိုက်ခိုက်ရာမှ နံနက် (၁၀)နာရီခွဲ မှ (၁၁)နာရီကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု KIO ၏ The Kachin Net သတင်းတွင် ကချင်ဘာသာလို တနင်္လာနေ့ ဖော်ပြထား သည်။ ဇွန်လ (၂၂)ရက်နေ့ကလည်း လွယ်ဂျယ်မြို့အနီး တရုတ်- မြန်မာနယ်စပ် လမ်းမပေါ်ရှိ KIO COVID-19 ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို လွယ်ဂျယ်မှ တပ်မတော် စစ်ကြောင်း ဝင်လာပြီး ဖယ်ရှားဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းနေ့ အဆိုပါ မြန်မာစစ်တပ် နှင့် KIA တပ်ရင်း (၁) တပ်ဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်လို့နီးပါး စစ်ရေး တင်းမာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း KIA စခန်းများသည် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများ၏ လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခြင်း ခံနေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် တပ်မတော် တပ်မ (၈၈) နှင့် တပ်မ (၉၉) ပူးပေါင်း စစ်ကြောင်းများ နှင့် KIA တပ်ဖွဲ့ကြား မူဆယ်မြို့နယ် Htan Hpa Bum (ထန်းဖာဘွမ်) ဇွန်လ (၆-၇)ရက်များတွင်သော်လည်းကောင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် Kaleng (ကာလိုင်) ဒေသတွင် ဇွန်လ (၁၆)မှ (၂၁)ရက်ထိ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ တားဆီးရေး လုပ်ဆောင်နေသည့်ကာလမှာ တပ်မတော်က ၎င်းတို့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟု သတ်မှတ်သည့် ရခိုင် AA အဖွဲ့နှင့်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲမှလွဲပြီး ကျန် တိုင်းရင်းသား တော်လှန် ရေးအဖွဲ့များ နယ်မြေ၊ ဒေသအားလုံးမှာ မေလ (၁၀)မှ သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်ထိ စစ်ပွဲရပ်လိုက်ကြောင်း မေလ (၉)ရက်နေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း တပ်မတော်၏ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ‘နယ်မြေရှင်းလင်းရေး” လုပ်ဆောင် စဉ် KIA အဖွဲ့နှင့် ‘ထိတွေ့တိုက်ပွဲ’ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်သည် မဟုတ်မှန်ဘဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ‘ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခြင်း’ ဖြစ်ကြောင်း လိုင်ဇာမှ KIO သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး အင်ဖန် နော်ဘို က ကချင် သတင်းဌာန KNG ကို ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews.com /2020/06/30/%e1%80%99%e1%80%bc%
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်တန်းနယ်မြေကို နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရန် ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသန်းက လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသန်းက ကျောက်တန်းနယ်မြေအတွင်းရှိ AA ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည့် ကျေးရွာများကို မိမိလှုပ်ရှား စစ်ကြောင်းများဖြင့် နယ်မြေရှင်းလင်းခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်စဉ် ကျေးရွာသားများအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရရှိစေရေး ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်ခြင်းမပြုဘဲ ခေတ္တရှောင်တိမ်းနေထိုင်ကြရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့က ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။ ၎င်းအမိန့် ညွှန်ကြားချက်ကို ရုပ်သိမ်းကြောင်းစာအား ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ပြီး ယခင်ထုတ်ပြန်ချက်အား ယခုစာက လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်တွင် ကျောက်တန်းကျေးရွာအနီးတဝိုက်ကိုသာ ဖယ်ရှားပေးရန်သာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော် လည်း ကျေးရွာပေါင်း လေးဆယ်ကျော်ကို ထုတ်ပြန်စာများ ဖြန့်ဝေလိုက်သည့်အတွက် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသန်းက နိရဉ္စရာသတင်းဌာနအား ပြောသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသန်းက “ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတာဒီလို။ မြို့နယ်ကနေ ကျေးရွာလေးဆယ့်နှစ်ရွာ တောင်ထုတ် ပစ်လိုက်တာ။ အမှန်ကတော့ ကျောက်တန်းနားလေးမှာ လေးငါးရွာပဲရှိတာလေ။ လေးငါးရွာလောက်ပဲခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုအများ ကြီးထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီမျိုးကြောင့်မို့ အဲဒီစာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ အဲဒီလေးငါးရွာကတော့ ရန်သူနဲ့ တိုက်နေတာ လေ ဘယ်လို့လုပ်ရုပ်သိမ်းလို့ရမလဲ”ဟုပြောသည်။ ယင်းကြောင့် ကျောက်တန်းကျေးရွာအရှေ့ဖက်အနီးတဝိုက် ကျေးရွာ သားများသာ ဖယ်ရှားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသန်းက ဆက်ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့က ကျောက်တန်းနယ်မြေအား နယ်မြေရှင်းလင်းမည်ဖြစ်သဖြင့် ဖယ်ရှားပေးရန် ရသေ့တောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ နယ်လုံဝန်ကြီး၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ရွာ ၄ဝ ကျော်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း စာထုတ်ပြန်မှု အပေါ် သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံ သံရုံး များမှလည်း အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပင်ကြောင်း ဇွန် ၂၇ ရက်နေ့က စုပေါင်း ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ https:// www.bnionline.net/mm/news-73898
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် ရွာသားများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေစဉ်ရွာတွင် ကျန်ရစ်သည့် အရပ်သားတဦး ရိုက်နှက်ခံရသဖြင့် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
ယမန်နေ့က ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အက်ကြီးကျေးရွာ မှ ဒေသခံများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရာ အသက် ၆၀ အရွယ် ဦးအိုက်မောင် တဦးတည်းသာ ကျေးရွာထဲတွင် ကျန်ရှိစဉ် ရိုက်နှက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ပြည်နယ် အမှတ် (၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းထွန်းဝင်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ “မနေ့က ကျေးရွာကလူတွေ အားလုံးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတယ်။ ဦးအိုက်မောင် တယောက်တည်းကျန်ခဲ့တယ်။ တပ်မတော်က ဦးအိုက်မောင်ကို ခေါ်ပြီး ရိုက်နှက်ထားတယ်။ ဒီနေ့မှ ပြန်လွှတ်လာပေးတယ်”ဟု စိုင်းထွန်းဝင်း ကဆိုသည်။ တပ်မတော်က ဦးအိုက်မောင် အား ရိုက်နှက်ထားသည့် ဒဏ်ရာသည် ပြင်းထန်ကြောင်း၊ လက်ရှိမှာ ကျောက်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေ ရကြောင်းလည်း စိုင်းထွန်းဝင်း က ပြောသည်။ ထို့ပြင် ယနေ့ မနက်ပိုင်းတွင်လည်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ဟိုင်းကွီကျေးရွာ အုပ်စု ပန်ကျန်ရွာတွင်လည်း တပ်မတော်မှ ပစ်သည့်လက်နက်ကျသဖြင့် အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး ကာ အမျိုးသမီး တဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
RCSS/SSA နှင့် အစိုးရ တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း စစ်ရှောင် ၅၀ဝ ကျော် ထိရှိလာကြောင်း၊ ထိုစစ်ရှောင်များအတွက်လည်း အစားအသောက်လိုအပ်နေကြောင်း စိုင်းထွန်းဝင်း က ထပ်လောင်းပြော သည်။ တိုက်ပွဲကြောင့် ကျောက်မဲမြို့နယ် နောင်ပိန်းကျေးရွာအတွင်းရှိ အောင်ဓမ္မာရုံတွင် စစ်ရှောင် ၃၃၀ ကျော် နှင့် ပန်လော့ ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စစ်ရှောင် ၂၀ဝ ကျော်တို့ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိ ကျောက်မဲ မြို့နယ်အတွင်း စစ်ရေးတင်းမာမှုများဆက်လက်တည်ရှိနေသဖြင့် ဒေသခံများ၏ လုံခြုံရေးသည် စိုးရိမ်နေရကြောင်းလည်း ကျောက်မဲဒေသခံများပြောပြချက် အရသိရသည်။
ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ကျောက်မဲမြို့နယ် ဟိုင်းကွီးကျေးရွာသား ၂ ဦးကို တပ်မတော်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်း၊ ဇွန် ၂၈ ရက် တွင်လည်း ကျောက်မဲမြို့နယ် အတွင်းရှိ လမ်းခုလပ်တခုတွင် ဒေသခံ ၂ ဦးကို တပ်မတော်မှလမ်းပြအဖြစ် ခေါ်ဆောင်သွား မှုများရှိခဲ့ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပြောပြချက် အရသိရသည်။ ထိုသူ ၄ ဦးသည် ယနေ့ မွန်းလွှဲပိုင်းတွင် တပ်မတော်မှပြန်လည် လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းလည်း စိုင်းထွန်းဝင်းက ပြောပြသည်။ https://burmese.shannews.org /archives/17310
လက်ရှိ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်မှာရှိနေမှာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့်မရောက်သေးဘူးလို့ ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (က.လ.လ.တ) အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ ဦးမာကုအီ ချစ်ထွန်းက ၎င်းတို့ အဖွဲ့ရဲ့ ၄၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှာ ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ကို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းပြီလားမေးလိုက်ရင်တော့ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကျနော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေက ငြိမ်းချမ်းတယ်လိုထင်တယ်။ ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်တာက မငြိမ်းချမ်းဘူး လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီကနေ့ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်း လေးငါးဖွဲ့ KNPP ကအစ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ ငြိမ်းချမ်း ရေးလို့ သူတို့ (ပြည်သူ) ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အမြင်ကတော့ တာတစ်စုံတစ်ရာ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့်ထိ မရောက်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ခံစားနေရတယ်” လို့ ဦးမာကုအီ ချစ်ထွန်းက ပြောပါတယ်။ (က.လ.လ.တ) အဖွဲ့ရဲ့ ၄၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ဖရူဆိုမြို့နယ် ကေကောအုပ်စု ပရယ်ဒိုကျေးရွာမှာ အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၎င်း အခန်းအနားမှာ ပြည်သူအပါအဝင် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) နှင့် ကရင်နီအမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (KNPDP) တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်ကွဲလွဲခဲ့ရာမှ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) ကနေ ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ KNPP အဖွဲ့အစည်းအပြင် ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ တခြား ညီအစ်ကိုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့လည်း ပြန်လည်သင့်မြတ်နေခြင်းဟာလည်း အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဦးမာကုအီ ချစ်ထွန်း ကပြောပါတယ်။ က.လ.လ.တ ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံပြီး ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီကို ချီတက်သောတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါ တယ်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)ကနေ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုရယူခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် မြို့နယ် ၈ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ https:// www.bnionline.net/mm/news-73906
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတချို့မှာ SSPP/ SSA က ငွေကြေးတောင်းခံတဲ့ စာထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ SSPP ကတော့ နောက်နောင် ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့နဲ့ ဘဏ် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
ကျောက်မဲ၊ နောင်ချို့နဲ့ သီပေါက ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတွေဆီကနေ SSPP ဌာနေတပ်သားတွေက ငွေတောင်းဖို့ အကြောင်းကြား စာ ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စအတွက် SSPP/ SSA ပြောခွင့်ရသူ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းဆုက RFA ကနေ အခုလို ရှင်းပြခဲ့ တာပါ။ SSPP အနေနဲ့ အောက်ခြေတပ်သားတွေကို ဘဏ်တွေမှာ ငွေကောက်ခံခိုင်းတာမရှိဘဲ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လို အပ်မှသာ ဗဟိုဌာနချုပ်ကနေ တိုက်ရိုက်အကူအညီ တောင်းခံတာမျိုးပဲရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ငွေကြေးကိစ္စ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ လာရောက်ရန် ဆိုပြီး အောက်ခြေတပ်သားတွေက SSPP တံဆိပ်ပါတဲ့ ဆင့်ခေါ်စာ ပို့ခဲ့တာကို ဗဟိုတာဝန်ရှိသူ တွေက သိရှိခဲ့တဲ့အတွက် အချိန်မီတားမြစ်ခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီမြို့နယ် သုံးခုက ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ သုံးခုကတော့ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ကစပြီး ယာယီပိတ်ထားလိုက်ပြီး လက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာလအတွင်း ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေနည်းလို့ ယာယီပိတ်ထားတာသာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျောက်မဲမြို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲမှူးကြီး ဗညားဦးကတော့ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေမှာ ထူးခြားသတင်းတွေရှိရင် ရဲတပ်ဖွဲ့ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ပေးတာရှိပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အားနည်းတာကြောင့် အခြားအချိန်တွေမှာ အချိန်ပြည့် စောင့်ပေးနိုင်တာမျိုးတော့ မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ကျောက်မဲဒေသခံ ကိုသားဇော်ကတော့ ဘဏ်တွေပိတ်ထားလို့ ဒေသခံတွေအတွက် ငွေကြေးလွှဲ ပြောင်းထုတ်ယူရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ SSPP အဖွဲ့ကတော့ သူတို့အဖွဲ့ လှုပ်ရှားရာဒေသတွေမှာ နှစ်စဉ် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အခွန်တောင်းခံလေ့ရှိပြီး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုသာ ရန်ပုံငွေပုံစံမျိုး ထည့်ခိုင်းပြီး အိမ်ပေါက်စေ့ ကောက်ခံတာမရှိဘူးလို့ SSPP က ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းဆုက ပြောပါတယ်။
SSPP အဖွဲ့ဟာ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် ဝမ်ဟိုင်းကျေးရွာမှာ ဌာနချုပ် ရှိတာပါ။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ကျေးသီး၊ မိုင်းနောင်၊ မိုင်းရှုးမြို့နယ်တွေမှာ အဓိကလှုပ်ရှားပြီး ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာတော့ နောင်ချို၊ ကျောက်မဲ၊ သီပေါ၊ နမ္မတူ၊ နမ့်လန်၊ သိန်နီ၊ ကွတ်ခိုင်၊ မူဆယ်၊ တန့်ယန်း စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ အဓိလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေးအတွက် လားရှိုးအပါအဝင် မြို့နယ်အချို့မှာ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ဖွင့်ထားပါတယ်။ စစ်အင်အား တစ်သောင်း ကျော်ရှိတဲ့ SSPP အနေနဲ့ အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်ရပ်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမယ့် NCA မှာတော့ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/news/sspp-will-do-to-secure-kbz-in-north shan-06282020055727.html
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုဖြစ်စဉ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးများမှာ မုဒိန်းမှုကို ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် စစ်လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုခံ နေရသည်ဟု အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်-မြန်မာနိုင်ငံ (WLB) ပြောသည်။
ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညှင်းပမ်းနှိပ်ခံရသူများကို ကူညီထောက်ပံ့ရေးနေ့၏ အွန်လိုင်း စကားဝိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်- မြန်မာနိုင်ငံ (WLB) တွဲဖက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၂ လွေးပိုးငယ် က ပြောဆို လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။“ဒီ မုဒိန်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ တိုင်းရင်းသား ဒေသ မှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဘာကြောင့် ကျမက စစ်ပွဲရဲ့ လက်နက်တစ်ခု အဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ ပြောသလဲဆိုရင် အမျိုးသမီး အများစုသည် လက်နက်ကိုင်ပြီးမှ တော်လှန်တာ တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ ဒီတိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ မုဒိန်းမှုတွေ အကျင့်ခံရတယ်။ အုပ်စုလိုက် မုဒိန်းကျင့်ခြင်းတွေကိုလည်း ခံရတယ်။”ထို့အပြင် စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများကိုလည်း အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် ခံနေရသည်ဟု လွေးပိုးငယ်က ဆက်ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံနေရသည့် ဖြစ်ရပ်သည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများအပြင် အခြား သောဒေသခံများမှာလည်း လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနှင့်မတူကွဲပြားသည့် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုအမျိုးမျိုးကို ခံနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်များသည် ယခင် အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဆက်ဆက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ သည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ရက် ND-Burma မှ ကိုအောင်ဇော်ဦးက အဆိုပါ အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းတွင် ပြောဆိုခဲ့ သည်။ ကိုအောင်ဇော်ဦးက “ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုတွေက အဓိက ပြည်သူတွေကို ဦးတည်ပြီးတော့ ဖြစ်တာ။ ခံရတဲ့လူ အများ ဆုံးကလည်း ပြည်သူတွေ အဓိက ဘယ်နေရာတွေမှာအဖြစ်များလဲဆိုတော့ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ တိုင်းရင်းသားဒေသတောင်မှ စစ်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ များပါတယ်။ အဲဒါကို တွေ့နေရတယ်။ နဂိုတုန်းက ကရင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ကရင်က ငြိမ်းချမ်းရေး ယူတော့ ကရင်မှာ လျော့လာတယ်။ နောက်ကချင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ကချင်က ငြိမ်းချမ်းရေးယူတော့ လျော့လာတယ်။ နောက်တိုက်ပွဲတွေ ထပ်ဖြစ်တယ် ထပ်ဖြစ်လာတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အဖြစ်များဆုံး က ရှမ်းမြောက် နှင့် ရခိုင် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်မှာ ပိုများလာတယ်။” ဟုပြောသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညှင်းပမ်းနှိပ်ခံရသူများကို ကူညီထောက် ပံ့ရေးနေ့တွင် လူ့မှုအသင်းအဖွဲ့များဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံ WLB ၊ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း ကွန်ရက် မြန်မာနိုင်ငံ ND-Burma၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောင်ရေးအသင်း AAPP ၊ ဝိမုတ္တိအမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း VWO နှင့် အာရှတရားမျှတမှုနှင့် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအဖွဲ့ AJAR တို့က ပူးတွဲ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရသူ များကို ကူညီထောက်ပံ့ရေးနေ့တွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၅ ဖွဲ့က တိုင်းရင်းသားဒေသတွင် တိုးချဲ့ထားသော တပ်မတော်၏ တပ်ရင်းများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ရပ်တန့်ရန်၊ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှု ညှဉ်းပန်းနှိမ့်စက်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်သူများကို အစိုးရမှ ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေး အရေး ယူဆောင်ရွက် ပေးရန် အစိုးရအား တောင်းဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ကုလသမဂ္ဂစာချုပ် UNCAT အား လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုရန်နှင့် ဥပဒေအဖြစ် ပြဌာန်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု ကျူးလွန်ခံရသူ များနှင့် အခြားနည်းဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူများအတွက် အစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လည်ကုစားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေး အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် စသည့်အချက်များအပါအဝင် အချက် ၈ ချက်ကို လူမှုအ သင်း အဖွဲ့အစည်း ၅ ဖွဲ့က ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ဖြင့် အစိုးရအား တောင်းဆိုထားသည်။ https://www.bnionline.net/mm/
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်းက တပ်မတော် မိသားစုဝင် လူငယ် ၃ ဦးကို ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း က ရက္ခိုင့်စစ်တပ် (AA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း တပ်မတော်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဖမ်းဆီးသွားသည့် တပ်မိသားစုဝင် လူငယ် ၃ ဦးနှင့်ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက လိုက်လံပြီး ရှာဖွေနေကြောင်းလည်း တပ်မတော် သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းညီက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းညီက “ဖမ်းသွား တဲ့ တပ်မိသားစုဝင် ၃ ဦးကို အဲဒီကတည်းက ကျနော်တို့ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေက ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ရေးအတွက် လိုက်လံပြီး ရှာဖွေနေတာရှိတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေ ကိုတော့မသိရသေးဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းမှ အသုံးပြုသော အစ္စရေးနိုင်ငံလုပ် စစ်မြေပြင်သုံး Skylark l-LEX အမျိုးအစား မောင်းသူမဲ့ ကင်းထောက် လေယာဉ်ငယ် ၁ စီးအား ဇွန်လ ၂၄ ရက် နေ့ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း AA အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ယင်းအပြင် ထိုမောင်းသူမဲ့ ကင်းထောက် လေယာဉ်အားလာရောက်ရှာဖွေသူ ရသေ့တောင် အခြေစိုက် ခမရ ( ၅၃၆ ) တပ်ရင်းမှ တပ်မိသားစုဝင် လူငယ် ၃ ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်း AA ထုတ် ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။ ရသေ့တောင် အခြေစိုက် ခမရ ( ၅၃၆ ) တပ်ရင်းမှ ဖမ်းဆီးရမိသည့် တပ်မိသားစုဝင် လူငယ် ၃ ဦးမှာ တပ်ကြပ်ကြီး အေးကျော် ၏သား အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် မောင်ကျော်သူရ၊ တပ်ကြပ် လှရွှေ၏သား အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မောင်နေဆန်းဦး၊ တပ်ကြပ်ကြီး စံသိန်း ၏သား အသက် ၂၀ အရွယ် မောင်မျိုးဟိန်းစံ တို့ဖြစ်ကြောင်း AA ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြ ထားသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးထားသည့် တပ်မိသားစုဝင် လူငယ် ၃ ဦးကို ပြန်လွတ်၊ မလွတ်ဆို သည်ကို AA အနေဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း တိုက်ပွဲအတွင်းက ဖမ်းဆီးသွားသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ မိသားစုများကိုတော့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြန်လွတ် ပေးလေ့ရှိသည်။ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်းက ပြားချောင်းကြီး တံတားအနီးတွင် တပ်မတော်နှင့် AA အဖွဲ့တို့ နှစ်ဘက် ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနီးရှိ ရွှေပါရမီကျောင်း စစ်ရှောင်စခန်းအနီးသို့ လက်နက် ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲသည့်အတွက် စစ်ရှောင်စခန်းတွင် ဝင်ရောက်ခိုလှုံနေသူ အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် ဦးမောင်အေးညွန့် မှာ ပြင်းထန် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။ https://burma.irr awaddy.com/news/2020/06/26/225338.html
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ United Nationalities Democracy Party –UNDP ကို စည်းလုံး ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများမဟာမိတ် UNA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ပြုထားကြောင်း ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့စွဲဖြင့် စာ ပေး ပို့ခဲ့သည်ဟု UNA အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးကျော်ထံမှ သိရသည်။“ဒီနေ့ကတော့ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာ တဲ့ အဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးကတော့ UNDP ဝင်တာကို သူတို့ထောက်ခံတယ်လေ အတည်ပြုတယ် အဲတာကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ အတည်ပြုကြောင့်အနေဖြင့် ဒီနေ့ကြေညာပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဝင်ဖို့လျှောက်ထားတာက ၆ လရှိပြီ၊ ”ဟု ဦးမျိုးကျော် ကပြောသည်။ UNA အနေဖြင့် မိမိတို့၏ မူကိုလက်ခံ သဘောကျသည့် မည်သည့်တိုင်းရင်းသားမဆို အဖွဲ့ဝင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လက်ခံပါက အတည်ပြုပေးရသည်ဟု ဦးမျိုးကျော်က ပြောသည်။
ထို့အတူ UNA အနေဖြင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း မိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်တူညီသောကြောင့် ဝင်ခွင့် လျှောက်ခဲ့သည်ဟု UNDP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်အုန်းလှက ပြောသည်။ နော်အုန်းလှက “ကျွန်မတို့က နဂိုက တည်းက UNDP က တခြားအဖွဲ့အစည်းမှာလည်း မိတ်ဖက်ဖြစ်တယ် UNA က ဟိုအရင်ကတည်းကလည်း အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်း ကျွန်မတို့ ပါတီထောင်တဲ့အခါကျတော့ UNA ရဲ့ မူတွေနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ မူတွေက တူတူဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုကို တူတူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ လျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် အဲတာကြောင့်မို့လည်း သူတို့လက်ခံတာ ရရှိခဲ့တာပေါ့နော့”ဟု ပြောသည်။ UNDP ပါတီအနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည့် အတွက် UNA ၏ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်စရာမလိုဘဲ ပြည်မရှိ ပါတီအချို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်သွားမည်ဟု UNDP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်အုန်းလှက ပြောသည်။
စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းပြည် ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ၊ ကချင်အမျိုးသား ကွန်ဂ ရက်ပါတီ၊ ကရင်အမျိုးသားပါတီ၊ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ၊ မြို အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီပါတီ၊ ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ၊ လူဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ် ရေးပါတီနှင့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီအပြင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၇၀ ခန့်ရှိသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/06/27/%e1%80%8 a%e1%80%ae%e1%80%8a%e1%80%bd%e1%
၁၀။ ဖားကန့်လုပ်ကွက်များ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ သုံးလ ပိတ်သိမ်းရန်နှင့် ခိုးကျင်း မတူးဖော်ရန် အပါအဝင် အချက် ၁၀ ချက် ညွှန်ကြား ထား
ဖားကန့်လုပ်ကွက်များ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ သုံးလ ပိတ်သိမ်းရန်နှင့် ခိုးကျင်း မတူးဖော်ရန် အပါအဝင် အချက် ၁၀ ချက် ညွှန်ကြား ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဖားကန့်ဒေသတွင် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိအခြေ အနေအရ နွံကန်ကျိုးပေါက်ခြင်း၊ မြေပြိုမှုကြောင့် လူသေဆုံးမှုများ၊ စက်ယန္တရားနှင့် လူနေအိမ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ် နေသဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီက တင်ပြချက်အရ သုံးလအတွင်း လုပ်ငန်းများ လုံးဝရပ်နားထားရန်၊ အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအမံ ဆောင်ရွက်ထား ရန် ညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ ဇွန်လ ၂၆ ရက် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကျောက်မျက် တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ယာယီရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုမ္ပဏီများသည် လုပ်ငန်းရပ်နားစဉ် ကာလအတွင်း မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် အချက် ၁၀ ချက်ကိုလည်း လိုက်နာရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်များ တွင် (က) လုပ်ငန်းရပ်နားစဉ် ခေါင်း ပေါင်းမြေစာ (အပေါ်ယံမြေလွှာ) ဖယ်ရှားခြင်း၊ ကျောက်စိမ်းရိုင်းပါ မြေစာပုံတွင် ကျောက်ရှာခြင်း၊ ရေပန်းထိုးရှာခြင်းများ မပြု လုပ်ရန်၊ (ခ) ကျောက်စိမ်းရိုင်းပါ မြေစာပုံအား ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်း မပြီးသေးပါက ခိုင်ခံသော ခြံစည်းရိုးများဖြင့် လုံခြုံစွာထား ရန်၊ (ဂ) ယာယီရပ်နားခြင်းမပြုမီ ကျောက်စိမ်းရိုင်းတုံးများကို တန်ဖိုးဖြတ် ရတာခွန်ဆောင်၍ နေပြည်တော်သို့ သယ်ဆောင် ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကျောက်စိမ်းရိုင်း၊ အရေအတွက် အလေးချိန် (ခန့်မှန်း) ကို လုံးခင်း-ဖားကန့် တူးဖော်ရေး ဌာနသို့ ကြိုတင်ပေးပို့တင်ပြရန် (ဃ) စက်ယန္တရားများ ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်း ထားရန်၊ လုံးခင်း-ဖားကန့် တူးဖော်ရေးဌာနသို့ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ စာရင်းပေးပို့ရန် (င) ယန္တရားပြင်ဆင်ရေး ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်း လုပ်ဆောင်ရန် (စ) စက်ယန္တရားများ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သွားလာခြင်းမပြုရန် (ဆ) ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း သိမ်းဆည်းရန် (ဇ)လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းကို ဇူလိုင် ၁ ရက်မတိုင်မီ လုံးခင်း-ဖားကန့် တူးဖော်ရေးဌာနသို့ ပေးပို့ရန် (ဈ) လုံခြုံရေး ချိုးဖောက်ခံရမှု၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ် ရှိလာပါက သတင်းပို့နိုင်ရေးအတွက် သတင်းပို့စနစ်များ တင်ပြရန် (ည) သက်တမ်းကုန် လုပ်ကွက်များကို တရားမဝင် ဝင်ရောက်တူး ဖော်ခြင်း မပြုရန် (ခိုးကျင်း မတူးကြရန်) စသည့် အချက် ၁၀ ချက်ကို တိကျစွာ လိုက်နာရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖားကန့်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင့်စိုးက “ ထုတ်ပြန်ချက်တော့ လွှတ်တော်ကနေ ညှိနှိုင်းစည်းဝေးပြီး ရပ်နားဖို့ ဆုံးဖြတ်တာပေါ့။ မြေပြိုဘေး၊ ရေကန်တွေပေါက်ကြတဲ့ဘေးတွေ ရှိတာကြောင့် လူတွေသေလို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခု လူသေမှုဖြစ်စဉ်တွေက ခိုးကျင်းတူးတဲ့ အခြေအနေမှာ ဖြစ်နေကြတာ။ တရားဝင်လုပ်ငန်းခွင့်မှာတွေ မဟုတ်ကြဘူး။ ဒီဘေး အန္တရယ်ဖြစ်စဉ်တွေက ရှိနိုင်သေးတယ်။ တချို့ခိုးကျင်းတွေကြတော့ စက်ယန္တရား ကြီးကြီးမားမားတွေ သုံးတော့ ဒါတွေကို တားမြစ်ချင်တဲ့ သဘောတွေကြောင့် ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီမှာက ခိုးကျင်းကိစ္စတွေကလည်း ပလူပျံနေ တာကို”ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် အကျိုးတူလုပ်ကွက် လေးခု၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ကွက် ၆၃၆ ကွက်ရှိပြီး အများစုမှာ ခိုးတူးနေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိ ရသည်။ ဖားကန့်ဒေသတွင် မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ရောက်ရှိလာသည့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား သုံးသိန်းဝန်းကျင် အမြဲရှိနေပြီး ကျောက်စိမ်း လုပ်ကွက်များတွင် တရားမဝင် တနိုင်တစ်ပိုင် တူးဖော်ခြင်း၊ မြေစာပုံများတွင် ရေမဆေးရှာခြင်း၊ ကျောက်စိမ်း တူးဖော်နေဆဲ လုပ်ကွက်များတွင် ကျောက်စိမ်းရှာဖွေခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေပြီး မြေပြိုမှုကြောင့် လစဉ် မြေပြိုသေဆုံးမှုများ ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးတွင်းကာလတွင် ကျင်းဟောင်းနွံကန်များ ပေါက်ကျမှုကြောင်း လူပေါင်း ဆယ်ချီ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ပြည်ထောင်စု သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန်လ ၁ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်အထိ ရပ်နားကြရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ https://news-eleven. com/article/180367
KNU –ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ မူတြော် (ဖာပွန်)ခရိုင် (တပ်မဟာ ၅) ဒွယ်လိုးမြို့နယ်၊ လေးဖိုးထကျေး ရွာအုပ်စုရှိ ဝါသိုး ခိုကျေးရွာတွင် တပ်မတော်မှ ဖျက်ဆီးလိုက်သည့် Covid-19 ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်နေရာ တွင် KNU ဘက်က တစ်ဖန်ဂိတ်ပြန်ဆောက်၍ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဖာပွန်-ကမမောင်း ကြားရှိ ဝါသိုးခိုကျေးရွာ၌ Covid -19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် KNU မူတြော် ခရိုင်မှ ဖွင့်လှစ်ထား သည့် Screening Point (ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်)ကို ပြီးခဲ့သည့် မေလက တပ်မတော်ဘက်မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခု နှစ်ဖက်နားလည်မှုအရ ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများ က ပြောသည်။ သို့သော် အဆိုပါ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့ တစ်ရက်သာ ပြန်လည်ဖွင့်ရပြီး တပ်မတော်ဘက်မှ လမ်းကြောင်းရှိ သည်ဟု လာရောက်အသိပေးလာသည့်အတွက် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ယာယီပိတ်လိုက် ရသည်ဟု နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့ (BPHWT) ဖာပွန်ဒေသ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါဂိတ်ကို ကရင်ကျန်မာရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန- KDHW နှင့် BPHWT တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကျန်းမာရေး စစ်ရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ကာ ဝင်ထွက်သွားလာနေသည့် ဒေသခံလူထုများကို ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်ခိုင်းခြင်း၊ Covid-19 ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှောင်ရန် ၊ ဆောင်ရန်များအတွက် ကရင်ဘာသာစကား ဖြင့် ရှင်းပြပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်ဟု သိရ သည်။
ဝါသိုးခိုကျေးရွာနှင့် ဖားလို့လမ်းခွရှိ KNU၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှစ်ခုကို ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၆ ရက်နေ့ တွင် တပ်မတော်က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အတွက် KNU ၏ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် -KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် တပ်မတော်တို့ကြား နှစ်ဖက်တင်းမာမှုဖြစ်ပြီး ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုပစ်ခတ်မှု များကြောင့် ဒေသခံရွာသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိခဲ့သလို ရာနှင့်ချီသည့် ဒေသခံရွာသားများလည်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%96%e1% 80%ac%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80
၁၂။ စစ်တပ်ကနေတောင်သူတွေကို ပစ်ဒဏ်ထပ်မံချမှတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ချက်တက်တဲ့အပေါ် ဖြေလျော့ပေးဖို့ တောင်သူများ တောင်းဆို
စစ်တပ်ကနေ တောင်သူတွေအပေါ် ပစ်ဒဏ်ထပ်မံချမှတ်ပေးဖို့ ကယားပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်ရုံးသို့ ပြင်ဆင်ချက တက် တဲ့အပေါ်မှာ ပြန်လည်ဖြေလျော့ပေးဖို့ စဉ်းစားပေးစေချင်တယ်လို့ တောင်သူတွေက တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ကရင်နီပြည် တောင်သူလယ်သမားသမ္မဂမှ ကိုဒီးဒီက “အထူးသဖြင့် ခုချိန်မှာ စိုက်ပျိုးရာသီဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော ကိုယ့်စားဝတ်နေရေး အတွက်လုံးပန်းနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုစိတ်ဒုက္ခ ကိုယ်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့အရာကို ထပ်လုပ်တယ်ဆိုတာက လုံးဝမတရားဘူး လို့ပဲ ကျတော်ပြောချင်တာပေါ့နော။ တောင်သူတွေဖက်ကတော့ ခံရမယ့်ဖက်ကပဲပေါ့နော ဆိုတော့ အစိုးရကော တပ်မတော် ဖက်ကကောပေါ့နော ဒါတွေကို ပြန်လည်ပြီးတော့မှ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
အမြောက်တပ် ၃၅၆ နဲ့ ခြေမြန်တပ်ရင်း ၂၅၀ တို့မှ လွိုင်ကော်မြို့နယ် ဒေါမူကလား၊ မြေနီကုန်း၊ သုံးမိုင်ပကြဲမှ တောင်သူ (၁၉) ဦးနှင့် ကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကို ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လအတွင်းက လွိုင်ကော်မြို့နယ်တရားရုံးက ဒဏ်ငွေနဲ့ ထောင်ဒဏ်အသီးသီး ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လွိုင်ကော်မြို့နယ် တရားရုံးကနေ တောင်သူတွေကို ပစ်ဒဏ်ချမှတ်တာနည်းလို့ဆိုပြီး စစ်တပ်ကမကျေနပ်တဲ့အတွက် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးကို ပြင်ဆင် ချက်တက်ပြီး ပစ်ဒဏ်ထပ်တိုးပေးဖို့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်ရုံးကနေ တောင်သူတွေကို လက်မှတ် လာရောက်ရေးထိုးဖို့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေထဲက အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ချမှတ်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းဖျက်စီးမှု ပုဒ်မ၆(၁) အမှု အတွက် ထောင်ဒဏ် ၆ လ သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ ၂ သောင်း ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊ ပုဒ်မ ၄၄၇ အတွက် ဒဏ်ငွေ ၂ သောင်း သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၁၅ ရက်နဲ့ ကျန်ပုဒ်မ အမှုအတွက် ငွေဒဏ်ကျပ် ၂ သောင်း ပေးဆောင်ဖို့ ချမှတ်ခဲ့ပြီး တောင်သူတွေက ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ခဲ့ပြီး အမှုပြီးမြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ ၂၂ ဦးထဲမှာ တောင်သူအရေးလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီး တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ထဲပါတဲ့ ကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားသမ္မဂမှ ဘွဲမှူးက ပြင်ဆင်မှုတက်တာ တရားမျှတမှုမရှိဘဲ မတရားဖိနှိပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမြောက်တပ် ၃၅၆ နဲ့ ခြေမြန်တပ်ရင်း ၂၅၀ တို့မှ အရာရှိတွေက အဲဒီ အမှုကိုပြင်ဆင်မှု တက်ရောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်ဝင်းကို ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)မှ ဆက်သွယ် မေးမြန်ရာမှာတော့ ၎င်းအနေနဲ့မသိကြောင်း လွိုင်ကော်မှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးမေးရန်သာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်ဒေသကွပ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ် (ဒကစ) ကို ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြန်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်း နှင့်သာဆိုင်တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ သိမ်းယူမြေထဲက ပိုနေတဲ့မြေပေါ်မှာ ဒေသခံတွေ နှစ်စဉ်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရာမှ ပြီးခဲ့ တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ တောင်ယာမြေပေါ်မှာ တပ်ကဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်ခွင့်မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး သိမ်းဆည်းထားတဲ့ တောင်ယာမြေပေါ်မှာ အမှတ်အသားမှတ်တိုင်စိုက်ကာ ခြံစည်းရိုးတံတိုင်းပြုလုပ်လာခဲ့အတွက် ဒေသခံတောင်သူတွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြပြီး တပ်မှတောင်သူအရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်သူ သုံးဦးအပါအဝင် တောင်သူ ၁၉ ဦး ကို တရားစွဲဆိုခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm /news- 73864
နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် တထပ်တည်းဖြစ် စေရန် အာမခံကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ပြောကြားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ၌ ဇွန်လ ၂၇ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် UEC နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက နိုင်ငံရေးပါတီ များအား ပြောကြားလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် တထပ် တည်းကျမကျ ဆရာတို့သိပြီးသား။ ကျနော်မပြောဘူး။ ဒီနှစ်မှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အာမခံတယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ပြည်သူ့တွေရဲ့တကယ့်ဆန္ဒနဲ့ ကျနော်တို့မှတ်ကျောက်တင်တာနဲ့တကယ့်ကိုတထပ်တည်းကျရမယ်”ဟု၎င်းကပြောဆိုသည်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ အများယုံကြည်မှုရှိစေခြင်း၊ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တထပ်တည်း ကျစေခြင်းဆိုသည့် စံနှုန်း ၅ ချက်နှင့်အညီ ကျင်းပသွားမည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောဆို သည်။ ဆက်လက်၍ ဦးလှသိန်းက “အမှားအယွင်းမပါစေရဘူး။ ဘက်လိုက်မှု မပါစေရဘူး။ ကျနော်တို့ ဒီစံ ၅ ချက်နဲ့ ကိုက်ညီအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဆရာတို့ ကျနော်တို့အပေါ်မှာ ကျေနပ်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီ ၅ ချက်ကို အာမခံပြီးလုပ် မှာပါ”ဟု ပြောကြားသည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၉၇ ပါတီ ရှိနေသည်ဖြစ်ရာ အဘယ်ကြောင့် ဤမျှအထိ နိုင်ငံရေးပါတီများ များပြားနေရသည်ကို နိုင်ငံရေးပါတီများက ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်ဟုလည်း ၎င်းက တိုက်တွန်းပြောဆို သည်။ နိုင်ငံရေး အယူအဆအမျိုးမျိုးဖြင့် ကွဲပြားစွာဆောင်ရွက်နေပါက အဆင်ပြေမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလက လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ယခင်ကော်မရှင်၏ လုပ်ဆောင်မှုများထက် နောက်ကျမှုမရှိသေးကြောင်း ဦးလှသိန်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကမူ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဖွင့် ပြောစကားသည် အားရကျေနပ်ဖွယ်မရှိကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။“ကော်မရှင်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြားမှာ ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ပြီး ရှေ့ကို Working Plan ဘယ်လိုသွားမလဲ စဉ်းစားနေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကြားလိုက်ရတာက ခင်ဗျားတို့က ကျုပ်ကို မယုံဘူးပြောတယ်။ ကျုပ်ကို ယုံရမယ်။ ကျုပ်က မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတာ။ ရှေ့ကော်မရှင်တုန်းက ဘယ်လို မဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တာ ဒါတွေပြောနေတယ်။ အမှန်တော့ ဒါတွေမလိုဘူးလေ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ နိုင်ငံရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ပါက အဝေဖန်ခံရတတ်ပြီး ဝေဖန်ခံရမှုကို လက်မခံဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီများအား အပြစ်ပြောနေခြင်းသည် သဘာဝမကျဟုလည်း ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်က မှတ်ချက်ပေးသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ကိုစိုင်းရဲကျော်စွာမြင့် ကမူ လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးခဲ့သော ယခင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ရာတွင် နည်းပါး သည်ကို တွေ့ရကြောင်းဆိုသည်။ UEC ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာရင်းများအရ တည်ဆဲမှတ်ပုံ တင်ထားသည့် ပါတီ ၉၇ ပါတီ ရှိပြီး ပြည်ထောင်စု တဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့် နိုင်ငံရေးပပါတီ ၇၉ ပါတီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် တခုတည်းတွင်သာ စည်းရုံးမည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၈ ပါတီ၊ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ပါတီ ရှိသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/27/225410.html
အစိုးရအခြေခံပညာရေး သတ္တမတန်း ပထဝီဘာသာရပ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်တွင် ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များ၏ အမည်နာမ ကို မှားယွင်းဖော်ပြထားမှုကို အမှားပြင်ဆင်ပေးရန်အတွက် ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်အသီးသီးမှ စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များက တောင်းဆိုသွားမည်ဟု သိရသည်။“ဒီပတ်အတွင်း စာတင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ မျိုးနွယ်စုဝင်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့တင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် မျိုးနွယ်စုဝင်တစ်ခုစီဘဲ တင်မလားဆိုတာတော့ အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။” လော်ဝေါ်စာပေယဉ်ကျေးမူ ဗဟို ကော်မတီမှ ဦးဒေါင်ဟောင်းက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲတဲ့အဖွဲ့မှာတော့ ကချင် ၆ မျိုးနဲ့ ရှမ်း ၅ မျိုးပါတယ်။ အဓိကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး သုံးမယ့် ကျောင်းသင်ခန်းစာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲတော့ မပါဘူး။ ကျနော်တို့က ဒေသ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲရတာပါ။ ခု ဒီလို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ အမှားတွေထည့်သွင်းရေးဆွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမျာ အားလုံးကလည်း ကချင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမူ ဗဟိုကိုဘဲပြေးမြင်ကြတယ်။ မျိုးနွယ်စုဝင်တိုင်းမှာစာပေယဉ်ကျေးမူဆိုပြီးတော့ သပ်သပ်စီ ခွဲထားတာ တော့ မဟုတ်ဘူး။ စာပေနဲ့ပတ်သက်လာရင် မျိုးနွယ်စုဝင်အသီးသီး စာပေယဉ်ကျေးမူအဖွဲ့မှ လိုအပ်သလို ယာယီကော်မတီ ဖွဲ့ပြီး ဖြေရှင်းကြတာဖြစ်တယ်။ ခုလည်း အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲဖို့ မျိုးနွယ်စုဝင်များ ကိုယ် စားတစ်မျိုးနွယ်က တစ်ဦးစီပါဝင်ပြီး သင်ရိုးညွှန်တမ်းရေးဆွဲတဲ့ထဲမှာပါဝင်ရတာဖြစ်တယ်။” ဟု လော်ဝေါ်စာပေယဉ် ကျေးမူ ဗဟိုကော်မတီမှ သိရသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာ သုံးရန်တွက် ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များ၏ အမည်နာမထည့်သွင်း ရေးဆွဲ ထားသည့် သတ္တမတန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွက်မူ ၎င်းတို့စာပေအဖွဲ့အား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မူ တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်လူမျိုးများ၏ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ပါဝင်သော မျိုးနွယ်စုအမည်များ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှားယွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကချင်လူမျိုးရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့် လာရောက်တိုင်ပင် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိခဲ့သည့် အတွက် ၎င်းတို့တွင် တာဝန်မရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကချင်လူမျိုးများယဉ်ကျေးမှု ဗဟို (WHG) ကလည်း ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ တွင် ကြေငြာချက်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။“သတ္တမတန်းရဲ့ ပထဝီဘာသာရပ်ရဲ့ ကချင်လူမျိုးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ မျိုးနွယ် ၁၂ မျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာတွေ့ပါတယ်။ စာလုံးသတ်ပုံမှားတယ် ရေးသားထားမှုတွေ အမည်နာမခေါ်ဆိုမူ တွေအားလုံးမှားနေတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမူကွန်ယက်တွေမျာတော့ (WHG) မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုတာတွေတွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ရိုးညွှန်တမ်းဆွဲတဲ့ဟာတွေအားလုံးက ကျနော်တို့ (WHG) နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ပါ တယ်။” ဟု WHG ဥက္ကဌ အသစ်ဆရာကြီး ဦးလနူးက ပြောသည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကချင်လူမျိုးများဟူသည့် ခေါင်းစဉ် အောက်တွင် ဂျိန်းဖေါ့(Jinghpaw)၊ အဇီး(Atsi)၊ လရှီ(Lashi)၊ မရူ(Maru)၊ ယောရင်(Lisaw)၊ နုံ(ခနုံ-ရဝမ်) Nung (Hkanung-Rawang) စသည့် အမည်နာမအား တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် Grade-7 သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ကချင်မျိုးနွယ်စုများကို တဂုံ၊ ဒလောင်၊ ဂေါရီ၊ ခခူး၊ ဒုရင်း၊ အကီး စသဖြင့် လွဲမှားစွာ ဖော်ပြ ထားသည်။
“ဒီသတ္တမတန်းသင်ရိုးမှာ တိုင်းရင်းသာတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြပေးတာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တည်ရှိမူနဲ့ သူတို့ အကြောင်းအရာတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းကနေ ကျောင်းသူ/သားတွေကို သိစေချင်လို့ ဖော်ပြချင်လို့ အဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ ကျမတို့လက်ခံပါတယ်။ ဒီမှာရေးထားတဲ့အသုံးနူန်းကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ မှားယွင်းမူများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် စတင်အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ် သော တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင်လည်း ယခုမှားယွင်းမှုကို အဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း ၎င်းက ဆက် ပြောသည်။ လက်ရှိဝေဖန်မှုများပြားနေသော သတ္တမတန်း ပထဝီဘာသာရပ်တွင် ကချင်လူမျိုးများ၏ အခေါ်အဝေါ် မှားယွင်း စွာဖော်ပြ ထားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်လာခြင်းမရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်လူမျိုးများ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမူဗဟို (WHG) မှလည်း အမှားပြင်ဆင်ပေးရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စာဆက်တင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (WHG) ဥပဒေအကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews .com/2020/06/26/%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲအခြေနေကြောင့် လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခဲ့သော နေရာအချို့ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ပြန် လည်ပွင့်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “ပလက်ဝလမ်းကြောင်း သွားလို့ရနေပြီ ဒါပေမဲ့ ကားလမ်းကို အပြည့်ဝတော့ သုံးလို့မရသေးဘူး တံတားက ပြီးနေပေမယ့်တံတားကို သုံးလို့မရသေးဘူး ရေလမ်းနဲ့ ကုန်းလမ်းမျှပြီး သုံးလို့ရတဲ့ အနေထားမှာရှိတယ် ရိက္ခာ ပစ္စည်းတွေလည်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ပို့နိုင်နေတဲ့ အနေထားမှာရှိတယ်”ဟုပြောသည်။ ပလက်ဝမြို့မှ အခြားမြို့များကို ဆက် သွယ်သော လမ်းများဖွင့်ပြီဖြစ်သော်လည်း အသွားလာ လုံခြုံမှုပိုင်းတွင် စိုးရိမ်ရသော အနေထားတွင်သာ ရှိသေးကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နေ ဒေသခံတစ်ဦးက “ပလက်ဝနဲ့ ကျောက်တော် လမ်းကတော့ မဖွင့်သေးဘူး ဆမီးနဲ့ ပလက်ဝ လမ်းကတော့ ကားနဲ့ သွားလာလို့ရပြီ ဆိုင်ကယ်နဲ့တော့ ခွင့်မပြုသေးဘူး ချောချောမောမောနဲ့ သွားလို့ရတဲ့ အနေထားတော့ မဟုတ်သေး ပေမယ့်အခြေနေကြည့်ပြီး သွားလာလို့တော့ ရနေပြီ”ဟုပြောသည်။ လက်ရှိ ပလက်ဝမြို့ပေါ်တွင် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည် နှစ်ထောင်ဝန်းကျင် ရှိနေပြီး လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲများကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုများကိုလည်း ကြုံတွေ့ရ ကြောင်း သိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာပါက တိုက်ပွဲကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသော အိမ်များ ကျောင်းများကို ပြည်နယ် အစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရပိုအဆင်ပြေမည်ဟု ချင်းပြည်နယ် အစိုးရထံမှ သိရသည်။ ပလက်ဝမြို့ အနီးဝန်းကျင်ရှိ AA အဖွဲ့တပ်စွဲထားသည့်တောင်ကုန်းများကို တပ်မတော်မှ မေလ ၃၁ မနက်ပိုင်းတွင် သိမ်းပိုက နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာထားသည်။ https://www.bnionline. net/mm/news-73865
ချင်းပြည်နယ်တွင် ရိဒ်နယ်စပ်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှပြန်လာသူ ၃၃ ဦး အနက်တီးတိန်မြို့ ဒိန်ပီးကျေးရွာတွင် Facility Quarantine ဝင်နေသူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ချင်းပြည်နယ်သို့ နောက်ထပ် ဝင်ရောက်မည့် သူ ၂၅ ဦးကိုလည်း ရိဒ်နယ်စပ်မှ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ချင်းပြည်နယ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက် က ပြောကြားသည်။
“အိန္ဒိယကပြန်လာပြီး Facility Quarantine ဝင်နေတဲ့သူတစ်ဦး သေတယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ သူ့ကို မနေ့ကပဲ ချက်ချင်း မြှုပ်လိုက်တယ်။ မမြှုပ်ခင် Swab ယူလိုက်တယ်။ သူ့ကို နှာခေါင်း၊ အာခေါင်တို့ဖတ်လည်း ယူလိုက်ပြီး စစ်ဆေးဖို့အတွက် ပို့လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ သူက အိန္ဒိယက ပြန်လာတာပါ။ ကျွန်တော်တို့က ၃၃ ယောက် ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ ပြည်ထောင်စု ကို တင်ပြတယ်။ ခွင့်ပြုတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ၁၆ ယောက်ကို တီးတိန်မှာထားတယ်။ နောက်ထပ် ဒုတိယလာတဲ့ ၁၇ ယောက်ကို ဖလမ်း မှာထားတယ်။ အဲဒီဟာက Quarantine ၂၁ ရက်ထားတာပေါ့။ အဲဒီထဲကနေ ဖြစ်တာပါ။ အခုတော့ ၂၅ ယောက်ကို လက်ခံဖို့ ပို့ထားသေးတယ်။ ရိခေါ်ရ်ဒါမှာ လက်ခံဖို့ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းတော့ ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီ ၂၅ ယောက် ပေါ့ နော်။ သူတို့ဘက်မှာ ပိတ်မိနေတာ အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့လည်းအခက်အခဲရှိတော့ပြန်လာချင်တယ်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အခု Quarantine တဲ့သူ ( အိန္ဒိယက ပြန်လာသူ) တွေကို Swab ယူပြီး စစ်ဆေးဖို့ ပို့တယ်။ အဲဒီမှာ ရောဂါပိုးတွေ့ရင် ကုသတဲ့ အပိုင်းလုပ်မှာပေါ့။ ရောဂါပိုး မတွေ့ဘူးဆိုရင် ပြန်လွှတ်ပါတယ်။ ပေါ့စတစ်လူနာက တီးတိန် မှာ တော့ ကျန်ပါသေးတယ်” ဟု ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအမျိုးသားသည် ဒိန်ပီးကျေး ရွာတွင် ဇွန် ၁၀ ရက်က Facility Quarantine ဝင်ရောက်ပြီး ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် ကိုယ်ပူ ချိန်မြင့်တက်လာသည့်အတွက် တီးတိန်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ကာ ဇွန် ၂၆ ရက် နံနက်တွင် သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ် သည်ဟု တီးတိန်မြို့ Covid-19 Emergency Committee Volunteer အဖွဲ့မှ ကိုမုန်နိုးက ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/180460
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့ ရေး – ထားဝယ်ကားလမ်းမှာ ဇွန် ၂၈ ရက်နေ့ တညတည်း မော်တော်ယာဉ်တိုက်မှု ၃ နေရာ ဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေ ရှိတယ်လို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက ပြောပါတယ်။
ရေး-ထားဝယ်သွားကားလမ်း တနင်္သာရီလမ်းမကြီးရှိ တပ္ပလင် နှစ်ဆူမီးပွိုင့်နေရာမှာ ယာဉ်ကြောလမ်းပြ ဘလောက်တုံး များ ကြွေမွပျက်စီးတဲ့အထိ အမည်မသိယာဉ်တစီးက တိုက်ပြီး မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားကာ ယာဉ်မောင်းကို စုံစမ်းနေတယ်လို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက ပြောပါတယ်။ ရေး-ထားဝယ်ကား အဏ္ဏဝါတံတား ရေချောင်းဘေးကိုလည်း လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်တစီး ထိုးကျ ပြီး ယာဉ်မောင်းက တိမ်းရှောင်သွားခဲ့တာကြောင့် လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်ကို ရေးမြို့မရဲစခန်းမှာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်-ရေးပြေးဆွဲနေတဲ့ အောင်ကျော်မိုး ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်နဲ့ ကံကောင်းခြင်းရတနာထပ်သားစက်ရုံရဲ့ ယာဉ်တို့ အဏ္ဏဝါ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း အနီးနားမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယာဉ်နောက်လိုက် ၁ ဦးနဲ့ အထပ်သား စက်ရုံ အဝယ်တော်ကားမှ လိုက်ပါလာသူ ၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူ ရေးမြို့မရဲစခန်းမှ ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်တဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကို ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်လို့ သိရပါတယ်။ http: //burglish.my-mm.org/latest/tru nk/web/fontconv.htm
၁၈။ မိုးနဲမြို့ကို ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြထားသော်လည်း သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသဖြင့် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုများ နေ့စဉ်ဖြစ်လာ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုးနဲမြို့ကို ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံတင်ပြခဲ့သော်လည်း သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသဖြင့် နေ့စဉ်ပျက်စီးယိုယွင်းမှုများဖြစ်လာကြောင်း သိရသည်။
“ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့တော့ ပြောပြသေးတယ်။ မိုးနဲမှာ တန်ဖိုးရှိတာရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ပစ္စည်းတွေပဲ။ လောလော လတ် လတ် နမ့်ဟူးရေထွက်ပေါ့နော်။ အခု ရေထွက်ကလည်း ဒေါက်တာ ညီညီအောင် ကတိကဝတ်ပေးထားတာ အခုထိ အကောင်အထည်မပေါ်ဘူး။ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလေ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဖြေထားတဲ့ကိစ္စလေ။ နမ့်ဟူးရေထွက်မှာ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်း ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ ကိစ္စလည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဘာမှမလုပ်သေးဘူး။ စီမံချက်တွေလည်း ဆွဲထားတာတစ်နှစ်ရှိနေပြီ။ မိုးနဲမြို့ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မြို့ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရေး၊ တစ်မြို့လုံးကိုပေါ့။ အရင်ကဟာပဲ ဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က ပြန်ဖြေထားတာ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့။ ရှေးဟောင်းသုတေသန ကနေ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်တင်ခိုင်းတယ်။ ကျွန်တော်က ပြန်မတင်တော့ဘူး။ လွှတ်တော် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ မေးခွန်းဆိုတာ တစ်ကြိမ်ပဲတင်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်သတ်မှတ်ဖို့ နေရာကိုဆက်လုပ်သွားဖို့ပေါ့။ ဒီလိုသတ်မှတ်မှပဲ မိုးနဲမြို့မှာရှိနေတဲ့ သမိုင်းဝင် ပစ္စည်းတွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ ဘတ်ဂျက်ထည့် လျာဖို့လုပ်နိုင်မှာ။ ဒီတစ်ခေါက် ဝန်ကြီးချုပ်ကို ဒါကြောင့်ပြောတာ၊ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဒုသမ္မတ ထံတင်ထားတဲ့စာက ခုချိန်ထိအကြောင်းမပြန်သေးဘူး။ နှုတ်နဲ့ ထပ်ဆင့်ပြောတာပေါ့ဗျာ။ ပျက်စီးမှုက နေ့တိုင်းလိုလို ပျက်စီးမှုရှိလာတယ်။ သဘာဝဘေးကြောင့်လည်း လူတွေကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့။ သမိုင်းဝင်တွေက လုပ်ယူ လို့လည်း မရဘူးပေါ့ နော်” ဟု မိုးနဲမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းမွန်းလိန်က ပြောကြားသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ မွေတော်၊ ဦးသီလကျောင်း၊ ဆင်တောင်၊ တာခေါင်စသည့်လေးနေရာကို ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ လွိုင်လျန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် နောက်ထပ်တစ်နေရာတို့ကို သတ်မှတ်နိုင်ရန် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် မိုးနဲမြို့နယ် အတွင်းရှိ စေတီ ကြီးလေးဆူအပါအဝင် မြို့တွင်းရှိ စေတီငယ်များကိုသာ ရှာဖွေထိန်းသိမ်းနိုင်သေးပြီး မြို့ ပြင်နေရာများတွင် ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားသော စေတီတော်များစွာရှိခဲ့ကြောင်း မိုးနဲမြို့ ဝိဇ္ဇာရိယ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း မှ ဦးဆောင်ဆရာတော် သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တော်ရ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန မာဃိန္ဒထံမှသိ ရသည်။ https://news-eleven.c om/article/180474
၁၉။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် Code of Conduct တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့လက်မှတ် မထိုး
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် Code of Conduct ၌ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံ အသုံးမပြုရန်ဆိုသည့်အချက်ကို သဘောတူညီ ချက်မရ၍ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့လက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ USDP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ သူ ဒေါက်တာ နန္ဒာလှမြင့်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Melia ဟိုတယ်၌ ဇွန် ၂၆ ရက်က ကျင်းပ ခဲ့ရာ နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၇ ရှိသည့်အနက် ၈၃ ပါတီတက်ရောက်ကာ ၆၄ ပါတီ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ “အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ရဲ့ပုံကို ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အသုံးမပြုဖို့ဆိုပြီးတော့မှ Code of Conduct မှာ ထည့်ပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ တောင်းဆိုထားတာရှိတယ် ဒါပေမဲ့ အဲနေ့က COC လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာ ဝေတဲ့အခါကျတော့ အဲအချက်မပါလာဘူး နိုင်ငံရေးပါတီအများစု တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်မပါ လာဘူး အဲဒီအတွက် လက်မှတ် မရေးထိုးဘူးပေါ့ဗျာ” ဟု ဒေါက်တာ နန္ဒာလှမြင့်က ဆိုသည်။
သို့ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံကိစ္စကို မိမိတို့ MUP ပါတီအနေဖြင့် မသိရှိထားကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်ရေးဆွဲသည့် အဖွဲ့ ကလည်း မိမိတို့သိရှိအောင် မပြောပြနိုင်ခဲ့ကြောင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် နိုင်ရဲဇော်က ပြော သည်။ နိုင်ရဲဇော်က “ဒီဟာအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ပါတီက မသိထားခဲ့ဘူး၊ ရေးဆွဲတဲ့အဖွဲ့ကလည်း ပါတီကို မပြောပြနိုင်ခဲ့ ဘူး၊ ဒီပြဿနာတွေ မသိထားခဲ့တာအခါ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာ ပြင်ဆင်စရာမရှိဘူးလို့ဘဲ ပြန်ကြားထား တာ၊ အဲဒီအချိန် အဲနေ့ကျမှ သိပြီးတော့မထိုးပါဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်နေရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကလေး ကလားဆန်တယ်လို့ ယူဆတယ်လေ”ဟု ပြောသည်။ ယင်းကဲ့သို့ တက်ရောက်လာသည့်ပါတီအများစု သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးကြရာတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP လည်း ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် Code of Conduct သည် ဥပဒေအရ ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် မလိုက်နာသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟု နိုင်ငံရေးပါတီများက လက်ခံထားသည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို လက်ရှိ နိုင်ငံရေး ၊ဥပဒေ၊ လူမူရေးအခင်းအကျင်းနှင့် လိုက်လျောညီစေရန် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားပြီး လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလကတည်းက နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးထံ အီးမေးလ်နှင့် စာတိုက်များမှ တဆင့်ပေးပို့၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/06/28 /%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့နယ်ရှိ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားသည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ၂ နှစ်ရက် နီးပါးအကြာတွင် တောင်စောင်း၏ ချောက်တစ်နေရာ၌ သေဆုံးလျက် ပြန်လည်တွေ့ရှိသည်ဟုသိရသည်။ အဆိုပါကျောင်းသူ ၏ ဆိုင်ကယ်သော့ပြန်တွေ့ရှိသည့် နေရာသဲလွန်စမှတစ်ဆင့်အောက်ဆင်း၍ ရှာဖွေကာ မောင်းသူ မဲ့ယာဉ်(ဒရုန်း) အကူ အညီနှင့် ယနေ့မနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်ခန့် အမြင့်ပေ ၂ ထောင်ကျော်ရှိသည့် ချောက်တစ်နေရာတွင် သေဆုံးလျက်ရှိသည့် ရုပ်အလောင်း (dead body) ကို ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံ ဖားအံခရိုင် မီးသတ်ဦးစီးရုံး လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးသန့်စင်ဝင်းက “တောင်ပေါ်က နေ ပြန်အဆင်း ခန့်မှန်းနာရီဝက်လောက် ဆင်းရတဲ့နေရာမှာ အစွန်အထွက် View Point လို နေရာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီနေရာ က တော်တော်သွားမှရောက်တာ။ ကြားမှာ ခြုံတစ်ခြုံနဲ့ကွယ်သေးတယ်။ ခြုံကိုပတ်သွားရတယ်။ မရောက်ဖူးတဲ့ လူဆိုရင် အဲဒီ နေရာကိုမသိဘူး။ အဲဒီပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျရင် အောက်ပေ ၂၀ လောက်မှာ ပြန့်တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီပြန့်ကနေတစ်ဆင့်မှ အောက်ကိုထပ်ပြီး ပြုတ်ကျတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ ဒီအပေါ်မှာတော့ စဉ်းစားတွေး တောစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်”ဟု ပြန်လည်တွေ့ရှိသည့်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူသည် ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၁နာရီကျော်တွင် ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်သို့ တစ်ဦးတည်း တက် ရောက်ခဲ့သလို ထိုနေ့ ညနေ ၅ နာရီကျော်အချိန်ခန့်တွင် တောင်ပေါ်ရှိ ဆရာတော်တစ်ပါးက ရင်ပြင်တော်၌ သူမကို တွေ့ရှိခဲ့ သေးသည်ဟု သိရသည်။ သူမ၏ ဆိုင်ကယ်သည် တောင်ခြေတွင်ကျန်ရှိခဲ့သလို ဖိနပ်ကိုလည်း အထက်ရေတံခွန် အနားရှိ တောင်တက်လမ်း တစ်နေရာတွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိသည့်အပြင် ဆိုင်ကယ်သော့ကိုလည်း အမြင့်ပေ ၂ ထောင်ခန့်ရှိသည့် နေရာတွင် တွေ့ရှိခဲ့သူများက တောင်ခြေ၌ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ သေဆုံးသွားခဲ့သည့် ကျောင်းသူလေး သည် မြ၀တီမြို့မှဖြစ်ပြီး ဖားအံမြို့ရှိ အဆောင်တစ်ခုတွင် နေထိုင်ရင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရောက်နေသူဖြစ်သည်ဟု ဖားအံတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆရာတစ်ဦး၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%87 %e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%80%e1%80%95%e1%
၂၁။ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့်လုံခြုံရေးများအတွက် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်း သံရုံးအဖွဲ့အစည်းများထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုတလျှောက်ရှိ မြန်မာတပ်မတော်၏ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုနှင့်
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများအပေါ် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း သံရုံးအဖွဲ့အ စည်းများက ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုတလျှောက် ရွာသားများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ ရခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်သူဦးရေကို သိသာထင်ရှားစွာ ပိုမိုများပြားလာစေပါလိမ့်မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဩစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ယူကေနှင့် အမေရိကန်သံရုံးများ စုပေါင်းထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက် တွင်ပါဝင်သည်။
အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်- ၁၉ နှင့်မုတ်သုန်ရာသီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများက တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း သင့်တော်သည့် အကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက် အတားအဆီးမရှိ သွား ရောက်နိုင်ရေးကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးစေလိုတဲ့သဘောထား သံရုံးအဖွဲ့အစည်းများတွင်ရှိနေကြသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကို မီးရှို့ခြင်း၊ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်း၊ ရွာသားများအားဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများရှိနေသောကြောင့် မိမိ နေရပ်ကိုစွန့်ခွာပြီး အခြားနေရာတွင် ခိုလှုံရန်မဖြစ်နိုင်သည့် ပြည်သူများကို ယင်းတို့နေထိုင်ရာဒေသများတွင်သာ နေထိုင် ခွင့်ပြုရန် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို တိုက်တွန်းထားသည်။
အရပ်သားများသည် ရခိုင်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခဒဏ်များကို ဆိုးရွားစွာ ဆက်လက်ခံစားနေကြရ သောကြောင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည် အရေးတကြီးလို အပ်နေပါသည်။ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာရန်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) ၏ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရန် မြန်မာတပ်မတော်တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟုလည်း ယင်းကြေညာချက်တွင်ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။ http://www.mizzimab urmese.com/article/71062
မွန်ပြည်နယ်မှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၃၀ဝ နီးပါးအထိ ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနည်းတူ မပေါ့ဆကြဖို့ မွန်ပြည်နယ် ကုသရေးနဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါတယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ ရေကြည်ရေသန့်မှာ ပေါက်ဖွားတဲ့ ခြင်ကျား ကိုက်ခံရတာကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတခု ဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ အခုနှစ် ဇွန်လ အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၃၀ဝ နီးပါးအထိ ရှိလာပြီး အဲဒီထဲမှာ ကလေးငယ် ၂ ဦး သေဆုံးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးလွန်းတုပ်ကွေး ရောဂါကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ နည်းတူ မပေါ့ကြဖို့ မွန်ပြည်နယ် ကုသရေးနဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကြည် က သတိပေး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ပြည်နယ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားမှုအရ မော်လမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ ပေါင်မြို့နယ်ဟာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ သေဆုံးမှုအနေနဲ့ ပေါင်မြို့နယ် တခုတည်းမှာပဲ ကလေးငယ် ၂ ဦး အထိ သေဆုံးထားပါတယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရာမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဖုံး၊ သွန်း၊ လဲ၊ စစ် ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ မွန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကလေး ငယ်တွေ ဖျားတာ၊ အန်တာအပြင် မှိန်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင် အမြန်းဆုံး ကျန်းမာရေးဌာနကို လာရောက် ပြသ ပေးကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၁၁၆၂ ဦး အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကလေးသူ ၄ ဦး သေဆုံးထားတာပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/396625
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့က မြို့မရဲစခန်းအချုပ်ကိုဖောက်ကာ အချုပ်သား ၃ ဦးထွက်ပြေးမှု ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၄ နာရီကျော်အချိန်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေချိန် ၎င်းအချုပ်သား (၃)ဦးသည် အချုပ်ခန်းရှိ ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာခန်းရှိ ခေါင်မိုးကို ဖောက်ပြီး ထွက်ပြေသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက DMG သို့ပြော သည်။“သူတို့ကတော့ ရက်အကြာကြီးကတည်းက ကြိုတင်လုပ်ထားပုံရတယ်။ ခေါင်မိုးကို ဖောက်ပြီးပြေးသွားတာ ဆိုတော့ လုံခြုံရေးက အပြင်က၊ အတွင်းကနေရှိနေတဲ့ကြားထဲက ထွက်ပြေးသွားတာ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ထိုသို့ထွက်ပြေးသွားသည့် အချုပ်သားများမှာ ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့နယ်ဘက်မှ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ တစ်ဦးနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှ ဖုန်းခိုးမှုဖြင့် အချုပ်ကျနေသူ နှစ်ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်ခင်စောဝေ က ရှင်းပြသည်။ ရသေ့တောင်မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ကြပ်ကြီးလှရွှေက အချုပ်သားများထွက်ပြေးသွား သည်ဆို သောဖြစ်စဉ်မှာ မှန်ကန်သော်လည်း အသေးစိတ်ကို ပြောခွင့်မရှိဟုဆိုသည်။ မြို့မရဲစခန်းသည် ရသေ့တောင်မြို့၊ ချောင်းဝ ရပ်ကွက်တွင်ရှိကာ မြို့အဝင်ချောင်းနှင့် နီးကပ်စွာရှိနေသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73876
ကရင်လူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် တစ်ခုဖြစ်သည့် ရိုးရာဒုံးအကကို ကုလသမဂ္ဂ၏ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (UNESCO) မှ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန်အတွက် စာရင်းတင်သွင်းသွားမည်ဟု သိရသည်။ UNESCO သို့ တင်သွင်းရန် ကရင်ပြည်နယ်မှ အဆိုပြုထားသည့် ကရင်ကောက်သစ်စားပွဲနှင့် ဒုံးအက ၂ ခုထဲမှ ဒုံးအက ကိုသာ ကနဦးတင်သွင်းသွားရန် ယနေ့(ဇွန် ၂၆ ရက်)၊ ဖားအံမြို့၊ ဇွဲကပင်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးအပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုဘိုဝေမောင်က “ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် UNESCO မှာ register လုပ်ဖို့ ပြည်နယ် နဲ့တိုင်းအသီးသီးက ခေါင်းစဉ်တွေကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုမှာတင်ပြီး ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကရင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ ဒုံးအကကို တင်သွင်းဖို့ ဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာ အဖြေတစ်ခုထွက်လာပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။ ထို့အပြင် ကရင်ဒုံးအကသည် နိုင်ငံတကာတွင်လည်း လူသိများသလို အများနှင့်မတူ Unique (ထူးခြား)ပြီး ကရင်အမျိုး သားများ၏ စိတ်ဓာတ်၊ ဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်များကို ထင်စပ်စေသောကြောင့် အာရုံစိုက်ကာ တင် သွင်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဦးဘိုဘိုဝေမောင်က ဆက်ပြောသည်။ ဒုံးအကဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်၊ ကကြိုးကကွက်၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ဂီတတူရိယာ ပစ္စည်း၊ အငွေ့အသက်များ အားလုံးကို အသေးစိတ် စနစ်တကျလေ့လာ မှတ်တမ်းတင် သုတေသနလုပ်နိုင်ရန် working committee (အလုပ်အဖွဲ့) ကို ယနေ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သော ပဏာမအစည်းအဝေးတွင် စတင် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီ လည်းဖြစ်သည်။
Working committee တွင် ပါဝင်သူ ဒုံးအကပညာရှင် စောမြင့်သူက “ဒုံးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှား လာခဲ့ ပေမယ့် ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးတစ်ခါမှ မကြုံ၊ မကြားခဲ့ဖူးဘူး။ အခုမှ ကျနော်တို့ရဲ့ ကရင် ရိုးရာဒုံးအကကို ကမ္ဘာ့ ရှေးဟောင်း အမွေ အနှစ်တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကရင်အတွက် သမိုင်းတစ်ခုကျန် ခဲ့မယ်။ အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိမယ်။” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
ပြည်နယ် ရှေးဟောင်း၊ သုတေသန ပြတိုက်မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးသို့ ကရင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် များကို ထိန်းသိမ်းနေသော ဆရာတော် သံဃာတော်များ၊ ပြည်နယ် စာပေ/ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဒုံးအကပညာရှင်၊ ဒုံးဆရာများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူများ စုစုပေါင်း ၄၀ ဦးကျော် တက်ရာက်ခဲ့သည်။ ကရင် ပြည်နယ်မှ ဒုံးအကကို တင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သလို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၊တိုင်းအသီးသီးမှရွေးချယ်လိုက်သည့် ခေါင်းစဉ် များထဲကမှ ခန့်မှန်းချေဆန် ကာတင်ခေါင်းစဉ် ၅ ခုခန့်အား မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် UNESCO သို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တင်သွင်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (UNESCO)မှ အမျိုးသားဒြပ်မဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အ မွေအနှစ်များကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည့် စာရင်းများထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသေးကြောင်း လည်းသိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e
၂၅။ အမ်းမြို့နယ်တွင် ရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ ၂ ဆကျော် မြင့်တက်လာ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့နယ်၌ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စစ်ဘေးရှောင်စခန်း ၂ ခုတွင် လူဦးရေ တစ်ထောင်ခန့်ရှိလာပြီး လက်ရှိ မိုးရာသီကြောင့် စားဝတ်နေရေးနှင့် နေထိုင်ရေးအခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း အမှတ်(၁)စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဦးသန်းချို က မဇ္ဈိမသတင်းဌာနသို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။“ဒီမှာရောက်နေတဲ့လူတွေ ပြောတာက နယ်မြေရှင်း လင်းရေးလုပ်မယ်။ နီးစပ်ရာ ရွာတွေမှစုပြီးနေကြပါပြောတယ်။ ဒါးလက်မှာ စားနပ်ရိပ်က္ခာပြတ်လတ်တာက ၃ လကျော်သွား ပါပြီ။ စားနပ်ရိပ်က္ခာကုန်တော့ မြို့ပေါ်ပဲတတ်လာကြတာ။ အမ်းမှာက စစ်ရှောင်စခန်း (၁) နဲ့ (၂) ရှိတယ်။ အဲတုန်းက လူဦးရေ က ၄၀ဝ ကျော်လောက်ပဲ ရှိတာ။ အခုက ၁၀ဝဝ ပြည့်တော့မယ်။ ထက်ဝက်ကျော်ကျော်လောက် မြင့်တတ်လာပါ တယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှပဲမြင့်တတ်လာတာပါ “ ဟု အမှတ်(၁)စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဦးသန်းချို က ပြောသည်။
တပ်မတော်မှစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်မည့် ကျေးရွာဘက်သည် လုံခြုံရေးအရ စိုးရိမ်ရသည့်အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ပင် သွားလာ၍မရကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ထုမေက ပြောသည်။“ ဒါးလက်အုပ်စုဘက်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင် သွားလို့မရတာ ၁ နှစ် နီးပါးရှိနေပါပြီ၊ ဒါးလက်ဘက် က လုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေ အနေရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်တောင်သွားလို့မရတဲ့ အခြေအနေပါ။ အစားသောက်၊ ရိက္ခာလမ်းကြောင်းတွေ ဖြတ် တောက်ထားတဲ့အတွက် အစားသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ဘေးရှောင်ဒေသနဲ့ ဒါးလက်အထက်ဘက်က ရွာတွေမှာ ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု တော့ရှိတယ် “ ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ထုမေက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင်လည်း အမ်းမြို့နယ်တွင်ရှိသည့် ပဲပဒုံကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကို ရွာပေါင်း ၁၂ ရွာ၊ အိမ်ထောင်စု ၁၁၉ စု တို့ နေရပ် စွန့်ခွာလာကြကြောင်း သိရှိရသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/71100
၂၆။ မိုးကောင်းမြို့ နန့်ရင်း ရပ်ကွက်တွင် လမ်း၊ တံတား ရေမြောင်းတူးဖော်ရာမှ ကျောက်စိမ်း အပိုင်းအစများ တွေ့ရှိသဖြင့် ရှာဖွေသူများပြားနေ
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့တွင် လမ်း၊ တံတား ရေမြောင်းတူးဖော်ရာမှ ကျောက်စိမ်း အပိုင်းအစများတွေ့ရှိသဖြင့် ရှာဖွေသူ များနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့် လပိုင်းမှစတင်ကာ နန့်ရင်း ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဦးဖိုးစောလမ်းမှ ဆမားဒူဝါ ခွန်ဆိုင်းနော် လမ်းကြားရှိ တံတားနှစ်ခုနှင့် လမ်းဘေးရေမြောင်းလုပ်ကိုင်ရာမှ ကျောက်စိမ်းအပိုင်းအစများတွေ့ရှိမှုကြောင့် ရှာဖွေသူများလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
မိုးကောင်းမြို့မှ ဒေသခံ ဦးဆေရိန်ရိန်က “အရင်ခေတ်တွေကတည်းက ကျောက်စိမ်းရာဖြတ်ရုံးစိုက်တဲ့နေရာပေါ့။ အခု အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ရာပေါ့။ အရင်က ဖြတ်စက်မရှိတော့ ရိုက်ခွဲတာ၊ ဖြတ်ပိုင်းတွေကို အိမ်ရှေ့မြောင်းထဲပစ်တယ်။ ကျောက်စိမ်းအရိုင်း မကောင်းရင်လည်း အိမ်ရှေ့မှာ ဖွက်ကြရတာကို။ နန့်ရင်းနဲ့ အလယ်ရပ်ကွက်က ရေမြောင်းတွေက ဘယ် နေရာမဆို ကျောက်ထွက်တယ်။ အရင်က ပစ်ထားတာ အခုက သောင်းကျောက်၊ သိန်းကျောက် ဖြစ်တော့ လူတွေက ဝိုင်းရှာကြတာပေါ့။ မြေစာတောင် ဘက်ဟိုး တစ်ကော် သောင်းဂဏန်းဈေးပေါက်တယ်။ တန်ဖိုးကြီးတော့ မထွက်ပါဘူး။ သိန်းဂဏန်းပါပဲ။ လူတွေက ကျပ်တည်းတော့ လုပ်စားကြတာပေါ့” ဟု ပြောကြားသည်။
လမ်းဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ကျောက်စိမ်းအပိုင်းအစတွေ ထွက်တာပေါ့။ အရင်က စွန့်ထားတဲ့ဟာက အခုတန်ဖိုးအ သင့်အတင့်ရှိတာပေါ့။ လမ်းလုပ်ငန်းကိုတော့ အနှောင့်အယှက်တော့ ဖြစ်တာပေါ့။ လုပ်ငန်းလည်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းပြီးပါပြီ။ ခိုးပြီးလမ်းလုပ်ငန်းအရှေ့မှာ ကြိုတင်တူးတဲ့သူတွေရှိတာကြောင့် ရဲအစောင့်တွေလည်း ချထားပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/a rticle/180477
၂၇။ တာချီလိတ်တွင် ငွေကျပ် ၂၇ ဘီလီယံနီးပါးတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိ
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ရေပူစမ်းကျေးရွာ အနောက်မြောက်ဘက် မီတာ ၄၀ဝ၀ ခန့်အကွာမှာ ငွေကျပ် ၂၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံလောက် တန်ဖိုးရှိ ယစ်ဆေးဝါးနဲ့ လက်နက်၊ ခဲယမ်းတွေ သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီနေ့မနက် ၄ နာရီခွဲလောက်က သတင်းအရ ရေပူစမ်းကျေးရွာရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက်မီတာ ၄၀ဝ၀ ခန့်အကွာရှိ ဝါးရုံပင်အနီး ရှာဖွေစစ်ဆေးရာ မသင်္ကာဖွယ်ရာ မိုးကာပလတ်စတစ် အိတ်အစအား တွေ့ရှိပြီး တူးဖော်ရာ မှ ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာလို့ တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မြေကြီးအတွင်း မြှုပ်နှံထားတဲ့ ဆာလာအိတ် အလုံး ၆၀ အတွင်းမှာ ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ငွေကျပ် ၂၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ လောက် တန်ဖိုးရှိ WY စာတန်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြား ၆,၄၈၀,ဝ၀ဝ ပြားခန့်၊ စိတ်ကြွဆေးပြားအကြေ (ရေစိုပုံစံပျက်) ၁၁၄၈ ကီလိုဂရမ် ခန့်၊ AK မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ် ၁ လက်၊ ကျည်အိမ် ၁ ခုနဲ့ ကျည် ၂၅ တောင့်၊ ပွိုင့်-၂၂ သေနတ် ၂ လက်၊ ၂ လုံးပြူးသေနတ် ၁ လက်၊ ကျည် ၅ တောင့်၊ ၁ လုံးထိုး သေနတ် ၂ လက်တို့အား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သိမ်းဆည်းရမိ လက်နက်၊ ခဲယမ်းတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို သက်ဆိုင်ရာကို လွှဲပြောင်းအပ်နှံသွားမယ်လို့ တပ်မတော်က ထုတ်ပြန်ထား ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/396814
၂၈။ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ထပ်မံတွေ့ရှိ၊ တရားခံပြေးကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဟု ဆို
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ထိုင်းအာဏာပိုင်များမှ မူးယစ်ဆေးဝါး ဝင် ရောက်စစ်ဆေး ဖမ်းဆီးရမိမှုအပြီး ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စိတ်ကြွဆေးပြားများ ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရာ လက်သည် တရားခံ ပြေးကို လက်ရှိ အချိန်ထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်း စခန်းတာ ဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ ဇွန်လ ၂၃ ရက် နေ့က ထိုင်းစစ်တပ်၊ ရဲ နှင့် စခန်း လုံခြုံရေးများသည် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း၏ ဇုန် (B-5B) ရှိ အိမ်တစ်အိမ်ကို အနံ့ခံ ခွေး များဖြင့် ရှောင်တခင်ဝင်ရောက် စစ်ဆေးရာတွင် စိတ်ကြွဆေးပြား (၃, ၀၀၀) ကျော် ဖမ်းဆီးရ မိခဲ့ပြီးနောက် ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ၎င်းနေအိမ်၌ စိတ်ကြွဆေးပြားအလုံးရေ (၁,၆၀၀) ကျော် ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု စခန်း ဥက္ကဋ္ဌ စောအောနက်က ပြောသည်။
၎င်းက “ဖြစ်စဉ်က တရားခံရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကော အမျိုးသမီးနဲ့ သမီးကို ခေါ်စစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ထိုင်းစခန်းလုံခြုံရေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သူတို့ကို စခန်းမှာပေးမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ သူတို့အိမ်ကို သွားဖြို လိုက်တဲ့အခါမှာ ထပ်ပြီးတော့ အလုံးရေ (၁,၆၀၀)ကျော်လောက် သွားတွေ့တယ်လို့ သိရတယ်။ တရားခံ ပြေး ကိုတော့ အခုထိ မဖမ်းမိသေးဘူး။ ဘယ်နေရာ၊ ရောက်နေမှန်းလည်းမသိဘူး”ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
လက်ရှိ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သူ တရားခံပြေးမှာ အသက် ၂၇နှစ်အရွယ် စောအဲငဲဆိုသူဖြစ်ပြီး ယခု အချိန်ထိ ဖမ်းဆီးရမိ ခြင်းမရှိသေးဘဲ လတ်တလော အချိန်ကာလတွင်လည်း စခန်းတွင်း ဝင်ထွက်သွားလာမှုများကို တင်းကြပ်ထားကြောင်း စခန်းတွင်းနေထိုင်သူများက ဆိုသည်။ လူဦးရေ ၃ သောင်းကျော် နေထိုင်သည့် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ထိုင်းအာဏာ ပိုင်များမှ မူးယစ်ဆေးဝါး ဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုများ မကြာခဏ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ http://kicnews.org/2020 /06/%e1%80%99%e1%80%9a%e1 %8
၁။ ကြောကျမဲတှငျ RCSS နှငျ့ တပျမတျော တိုကျပှဲကွောငျ့ ဒသေခံ ၃၀ဝ ကြျော ဘေးလှတျရာ တိမျးရှောငျ
၂။ မွနျမာ အစိုးရတပျ နှငျ့ KIA တိုကျပှဲ ကခငျြပွညျနယျမှာ ပွနျလညျ ဖွဈပှားလာ
၃။ ကြောကျတနျး နယျမွရှေငျးလငျးရေးလုပျမညျ့ ထုတျပွနျခကျြ ပွနျရုပျသိမျး
၄။ စဈရေးတငျးမာမှုကွောငျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျ အရပျသားတဦးရိုကျနှကျခံရ ဒဏျရာပွငျးထနျ
၅။ စဈမှနျတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအဆငျ့ မရောကျသေးဘူးလို့ က.လ.လ.တ ပွော
၆။ ရှမျးမွောကျက KBZ ဘဏျခှဲတခြို့အတှကျ လုံခွုံရေးတာဝနျယူကွောငျး SSPP/ SSA ပွော
၇။ တိုငျးရငျးသူမြား မုဒိနျးမှုကို စဈလကျနကျအဖွဈ အသုံးပွုခံနရေဟု WLB ပွော
၈။ ရသတေ့ောငျက တပျမိသားစုဝငျ လူငယျ ၃ ဦးကို AA ဖမျးဆီးထား
၉။ ညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ UNDP ကို UNA အဖှဲ့ဝငျအဖွဈလကျခံ
၁၀။ ဖားကနျ့လုပျကှကျမြား ဇူလိုငျ ၁ ရကျမှ သုံးလ ပိတျသိမျးရနျနှငျ့ ခိုးကငျြး မတူးဖျောရနျ အခကျြ ၁၀ ခကျြ ညှနျကွား
၁၁။ ဖာပှနျဒသေတှငျ ဖကျြဆီးခံရသညျ့ KNU ၏ Covid စဈဆေးရေးဂိတျနရောတှငျ အသဈပွနျဆောကျပွီး ထပျဖှငျ့
၁၂။ စဈတပျက၊ တောငျသူတှကေို ပဈဒဏျထပျမံခမြှတျဖို့ ပွငျဆငျခကျြတကျတဲ့အပျေါ ဖွလြေော့ပေးဖို့ တောငျးဆို
၁၃။ ပွညျသူ့ဆန်ဒနှငျ့ ရှေးကောကျပှဲရလဒျ တထပျတညျးကစြမေညျဟု UEC ဥက်ကဋ်ဌပွော
၁၄။ အစိုးရသငျရိုးညှနျးတမျးတှငျ ကခငျြလူမြိုးမြား၏အချေါဝျေါမှားယှငျးနမှေုကို ပွငျဆငျပေးရနျ တောငျးဆိုသှားမညျ
၁၅။ ပလကျဝမွို့မှ တခွားမွို့သို့ ဆကျသှယျသော လမျးကွောငျးမြားစပှငျ့
၁၆။ ခငျြးပွညျနယျတှငျ အိန်ဒိယနျိုငျငံမှ ပွနျလညျရောကျရှိလာသူ ၃၃ ဦးအနကျ တီးတိနျမွို့ ဒိနျပီးကြေးရှာ၌ Facility Quarantine ဝငျနသေူတဈဦး သဆေုံး
၁၇။ ရေး – ထားဝယျသှား ကားလမျးပျေါ၌ ယာဉျတိုကျမှု ၃ နရော ဖွဈပှား
၁၈။ မိုးနဲမွို့ကို ရှေးဟောငျး ယဉျကြေးမှုမွို့တျောအဖွဈ သတျမှတျနိုငျရနျ ရှမျးပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျထံ တငျပွထားသျောလညျး သတျမှတျနိုငျခွငျးမရှိသေးသဖွငျ့ ပကျြစီးယိုယှငျးမှုမြား နစေ့ဉျဖွဈလာ
၁၉။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာကငျြ့ဝတျ Code of Conduct တှငျ ပွညျခိုငျဖွိုးအပါအဝငျ ပါတီအခြို့လကျမှတျမထိုး
၂၀။ ဇှဲကပငျတောငျပျေါတှငျ ပြောကျဆုံးသှားသညျ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသူအား သဆေုံးလကျြပွနျတှရှေိ့
၂၁။ လူသားခွငျးစာနာထောကျထားမှုနှငျ့ လုံခွုံရေးအတှကျ အလှနျအမငျးစိုးရိမျကွောငျး သံရုံးအဖှဲ့အစညျးမြားထုတျပွနျ
၂၂။ မှနျပွညျနယျတှငျ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါဖွဈသူ ၃၀ဝ ခနျ့ ရှိလာ၊ ကိုဗဈနညျးတူ မပေါ့ဆကွရနျ သတိပေး
၂၃။ ရသတေ့ောငျမွို့မရဲစခနျးမှ အခြုပျသား ၃ ဦး ထှကျပွေး
၂၄။ ကရငျဒုံးအကကို UNESCO အသိအမှတျပွု စာရငျးတငျသှငျးမညျ
၂၆။ အမျးမွို့နယျတှငျ ရကျပိုငျးအတှငျး စဈဘေးရှောငျလူဦးရေ ၂ဆကြျော မွငျ့တကျလာ
၂၇။ မိုးကောငျးမွို့ နနျ့ရငျး ရပျကှကျတှငျ ရမွေောငျးတူးဖျောရာမှ ကြောကျစိမျးအပိုငျးအစမြားတှရှေိ့သဖွငျ့ ရှာဖှသေူမြား
၂၈။ တာခြီလိတျတှငျ ငှကေပျြ ၂၇ ဘီလီယံနီးပါးတနျဖိုးရှိ မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့လကျနကျမြား သိမျးဆညျးရမိ
၂၉။ မယျလဒုက်ခသညျစခနျးတှငျ မူးယဈဆေးဝါး ထပျမံတှရှေိ့၊ တရားခံပွေးကို ဖမျးဆီးရမိခွငျးမရှိသေးဟု ဆို
ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး၊ ကြောကျမဲခရိုငျ၊ ကြောကျမဲမွို့နယျ ပနျလော့ကြေးရှာအုပျစုထဲမှာ ဇှနျ ၂၈ မနကျကနေ ဒီနမေ့နကျအထိ ရှမျးပွညျတပျမတျော RCSS နဲ့ မွနျမာ့တပျမတျောတို့ကွား ထိတှပေ့ဈခတျမှုဖွဈခဲ့လို့ ရှာသား ၁ ဦးသဆေုံး၊ ၁ ဦး ဒဏျရာရ၊ ၃၀ဝ ကြျော ဘေးလှတျရာ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေပါတယျ။
ကြောကျမဲမွို့နယျတောငျဘကျ ၈ မိုငျလောကျကှာ ပနျလော့အုပျစု အကျကီး၊ နမျ့ဖတျ ပွိနျးနိမျ၊ ကြေးရှာအနီးတဝိုကျမှာ မနေ့ က ပဈခတျမှုတှရှေိပွီး ဒီနမေ့နကျမှာလညျး ပနျခဲနျရှာနားမှာ ထပျပွီးပဈခတျကွလို့ ရှာသား ၁ ဦးသဆေုံးပွီး ရှာသူ ၁ ဦး ဒဏျရာရတာကွောငျ့ နောငျခြို ဂုတျထိပျဆေးရုံကို ပို့ဆောငျထားရတယျလို့ ကြောကျမဲမွို့နယျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမို ကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ စိုငျးထှနျးဝငျးက ဒီဗှီဘီကို ပွောပါတယျ။“ကနမေ့နကျ ကနြျောတို့ ပါတီ ဝငျနဲ့ ကျောတိုငျးရှမျးလူငယျအဖှဲ့တှေ ပနျလော့ဘုနျးကွီးကြောငျးက စဈပွေးရှောငျတှဆေီရောကျခဲ့ပါတယျ။ အားလုံး အယောကျ ၂၀ဝ ကြျောရှိမယျ။ သူတို့ လိုအပျခကျြတှေ အရငျသှားကွညျ့တာပါ။ အဓိကလိုတာကတော့ စားနပျရိက်ခာပေါ့ နျော။ ဒီတသုတျက မနမေ့နကျက တိုကျပှဲဖွဈလို့ ပွေးလာတာ၊ ကနမေ့နကျမှာကတြော့ ဟိုငျးကှီ၊ ပနျကငျြရှာဘကျမှာ ထပျဖွဈတယျ။ အဲဒီမှာ လကျနကျကွီးကညျြသငျ့လို့ ပနျကငျြရှာသား ၁ ယောကျသဆေုံးပွီး ရှာသူ ၁ ယောကျ ဒဏျရာရတယျ။ သူ့ကို နောငျခြိုဂုတျထိပျဆေးရုံ ပို့ထားပွီး ရှာသားပေါငျး ၁၀ဝ ကြျောက တော့ နောငျခြိုဂုတျထိပျ အောငျဓမ်မာရုံဘုနျးကွီး ကြောငျးမှာ သှားစုနကွေပါတယျခငျဗြ။”ဒါ့အပွငျ မနကေ့ ဟိုငျးကှီရှာသား ၄ ယောကျနဲ့ မျောတျောကား ၁ စီးကို မွနျမာ့ တပျမတျောဘကျက ခြောဆှဲသှားကွောငျး၊ အဲဒီကိစ်စကို လှတျတျောကိုယျစားလှယျက ကြောကျမဲ စကခ ဆီ ဆကျသှယျ ညှိနှိုငျးပေးခဲ့လို့ ပွနျလှတျလာပွီလို့ ဆိုပါတယျ။
ကြောကျမဲမွို့၊ နမျ့ခုံးရှမျးမြားပရဟိတအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိုငျးကူးကလညျး တိုကျပှဲရှောငျတှဟော ပနျလော့ရှာအပွငျ နမျ့ဖတျ ကြောငျးတိုကျမှာလညျး ၄၀ ကြျောရှိသေးတယျလို့ ဒီဗှီဘီကို ပွောပါတယျ။ တိုကျပှဲဖွဈရတဲ့အကွောငျးရငျးကို မသိရကွောငျး၊ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ ၂၆ ရကျနေ့ မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးနကေ့ RCSS တပျက ဟိုငျးကှီရှာဘကျမှာ မူးယဈဆေးတှေ မီးရှို့ ဖကျြဆီးပွီး အခမျးအနားလုပျခဲ့ကွောငျး၊ နောကျနမေ့နကျမှာ တပျမတျောယာဉျတနျး အစီး ၂၀ ကြျော တကျသှားတာတှပွေီ့း နှဈဘကျရငျဆိုငျ ပဈခတျတာဖွဈနိုငျတယျလို့ ကြောကျမဲဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဒီဗှီဘီက RCSS တာဝနျရှိသူတှကေို ဆကျသှယျမေးမွနျးလို့ မရသေးပါဘူး။
ပွညျသူလူထုဟာ လတျတလော ကိုဗဈ ၁၉ ကပျရောဂါကူးစကျမှုအန်တရာယျကွောငျ့ အလုပျအကိုငျကို ပုံမှနျမလုပျနိုငျလို့ စား ဝတျနရေေးကွပျတညျးနတေဲ့ကွား အခုလိုတိုကျပှဲဖွဈရပွနျတော့ စဈရှောငျသူအတှကျရော စဈရှောငျကူညီလကျခံထားတဲ့ ရှာ တှအေတှကျပါ ပိုပွီးအခကျအခဲဖွဈစလေို့ တိုကျပှဲဖွဈစမေယျ့ကိစ်စမြိုးတှေ တတျနိုငျသလောကျရှောငျရှားပေးဖို့ မတ်ေတာရပျခံ လိုကွောငျး နမျ့ခုံးရှမျးမြားပရဟိတအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိုငျးကူးကပွောသှားပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/396
နှဈဖကျ bilateral အပဈအခတျရပျစဲရေး ဆှေးနှေးနဆေဲကာလမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှါးမှု မရှိသလကျေဖွဈနသေော ကခငျြပွညျ နယျမှာ မွနျမာအစိုးရတပျနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA ကွား ဇှနျလ (၂၉)ရကျ၊ တနင်ျလာနေ့ က ကခငျြပွညျနယျ အလယျပိုငျးမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှားလာသညျဟုသိရသညျ။
KIA တပျမဟာ (၈) လကျအောကျခံ တပျရငျး (၅) နယျမွအေတှငျး KIA စခနျးမြားရှိရာသို့ တပျမတျောစဈကွောငျး နှဈ ကွောငျး ထိုးစဈဆငျလှုပျရှားခွငျးကွောငျ့ တနင်ျလာနေ့ နံနကျပိုငျး မိနဈ ၃၀ ခနျ့ကွာ La Mai Yang တှငျ ထိတှတေို့ကျပှဲ ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO က ဆိုသညျ။ “တပျမတျော စဈကွောငျးတှေ ဝငျလာတော့ တိုကျပှဲ အခြိနျ တို ဖွဈပှားခဲ့တယျ။ KIA ဘကျက မိုငျး ၂ ကွိမျ၊ ၃ ကွိမျ လောကျဖောကျခှဲတာမြိုး၊ လကျနယျငယျတှနေဲ့ အနညျးငယျ ပဈခတျ တာမြိုးလောကျပဲ ပွုလုပျပွီး စခနျးကို ဖယျပေးလိုကျပါတယျ” ဟု KIA အရာရှိ တဈဦးပွောပါသညျ။
KIA တပျရငျး (၅) Ga Hkyeng Bum နယျသို့ ထိုးစဈဆငျလာသော တပျမတျော ခွမွေနျတပျရငျး (၃၈၉) နှငျ့ ၎င်းငျးတပျဖှဲ့၏ စဈကူအဖွဈ ဝငျလာသော တပျမတျော ခွလေငျြတပျရငျး (၂၃၇) တို့ကို KIA အဖှဲ့ ခုခံတိုကျခိုကျရာမှ နံနကျ (၁၀)နာရီခှဲ မှ (၁၁)နာရီကွား တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့သညျဟု KIO ၏ The Kachin Net သတငျးတှငျ ကခငျြဘာသာလို တနင်ျလာနေ့ ဖျောပွထား သညျ။ ဇှနျလ (၂၂)ရကျနကေ့လညျး လှယျဂယျြမွို့အနီး တရုတျ- မွနျမာနယျစပျ လမျးမပျေါရှိ KIO COVID-19 ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျကို လှယျဂယျြမှ တပျမတျော စဈကွောငျး ဝငျလာပွီး ဖယျရှားဖကျြဆီးခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးနေ့ အဆိုပါ မွနျမာစဈတပျ နှငျ့ KIA တပျရငျး (၁) တပျဖှဲ့ကွား တိုကျပှဲဖွဈလို့နီးပါး စဈရေး တငျးမာခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး KIA စခနျးမြားသညျ တပျမတျော စဈကွောငျးမြား၏ လိုကျလံတိုကျခိုကျခွငျး ခံနရေပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ တပျမတျော တပျမ (၈၈) နှငျ့ တပျမ (၉၉) ပူးပေါငျး စဈကွောငျးမြား နှငျ့ KIA တပျဖှဲ့ကွား မူဆယျမွို့နယျ Htan Hpa Bum (ထနျးဖာဘှမျ) ဇှနျလ (၆-၇)ရကျမြားတှငျသျောလညျးကောငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျ Kaleng (ကာလိုငျ) ဒသေတှငျ ဇှနျလ (၁၆)မှ (၂၁)ရကျထိ တိုကျပှဲမြား ဖွဈပှားခဲ့သညျ။
နိုငျငံအတှငျး COVID-19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ကာကှယျ၊ ကုသ၊ တားဆီးရေး လုပျဆောငျနသေညျ့ကာလမှာ တပျမတျောက ၎င်းငျးတို့ အကွမျးဖကျအဖှဲ့ဟု သတျမှတျသညျ့ ရခိုငျ AA အဖှဲ့နှငျ့ဖွဈပှားနသေော စဈပှဲမှလှဲပွီး ကနျြ တိုငျးရငျးသား တျောလှနျ ရေးအဖှဲ့မြား နယျမွေ၊ ဒသေအားလုံးမှာ မလေ (၁၀)မှ သွဂုတျလ (၃၁)ရကျထိ စဈပှဲရပျလိုကျကွောငျး မလေ (၉)ရကျနေ့ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျး တပျမတျော၏ ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျးမှာ ‘နယျမွရှေငျးလငျးရေး” လုပျဆောငျ စဉျ KIA အဖှဲ့နှငျ့ ‘ထိတှတေို့ကျပှဲ’ ဖွဈကွောငျး ပွောကွားခကျြသညျ မဟုတျမှနျဘဲ ရညျရှယျခကျြရှိရှိဖွငျ့ ‘ထိုးစဈဆငျ တိုကျခိုကျခွငျး’ ဖွဈကွောငျး လိုငျဇာမှ KIO သတငျးနှငျ့ပွနျကွားရေးဌာန တာဝနျခံ ဗိုလျမှူးကွီး အငျဖနျ နျောဘို က ကခငျြ သတငျးဌာန KNG ကို ပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/30/%e1%80%99%e1%80%bc%
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျမွောကျပိုငျး၊ ကြောကျတနျးနယျမွကေို နယျမွရှေငျးလငျးရေးလုပျရနျ ထုတျပွနျခကျြကို ပွနျလညျရုပျသိမျးကွောငျး ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးမငျးသနျးက လကျမှတျ ရေးထိုးပွီး ဇှနျလ ၂၆ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးမငျးသနျးက ကြောကျတနျးနယျမွအေတှငျးရှိ AA ဝငျရောကျလှုပျရှားလကျြရှိသညျ့ ကြေးရှာမြားကို မိမိလှုပျရှား စဈကွောငျးမြားဖွငျ့ နယျမွရှေငျးလငျးခွငျး ဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး၊ ထိုသို့ဆောငျရှကျစဉျ ကြေးရှာသားမြားအား ထိခိုကျဒဏျရာ မရရှိစရေေး ကြေးရှာမြားတှငျ နထေိုငျခွငျးမပွုဘဲ ခတ်ေတရှောငျတိမျးနထေိုငျကွရနျ သကျဆိုငျရာ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးမြားကို ဇှနျလ ၂၄ ရကျနကေ့ ညှနျကွားခကျြ ထုတျပွနျ ခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးအမိနျ့ ညှနျကွားခကျြကို ရုပျသိမျးကွောငျးစာအား ဇှနျလ ၂၆ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျပွီး ယခငျထုတျပွနျခကျြအား ယခုစာက လှမျးမိုးပယျဖကျြကွောငျး ဖျောပွသညျ။
ထုတျပွနျခကျြထုတျပွနျသညျ့အခြိနျတှငျ ကြောကျတနျးကြေးရှာအနီးတဝိုကျကိုသာ ဖယျရှားပေးရနျသာ ထုတျပွနျခဲ့သျော လညျး ကြေးရှာပေါငျး လေးဆယျကြျောကို ထုတျပွနျစာမြား ဖွနျ့ဝလေိုကျသညျ့အတှကျ ပွနျလညျရုပျသိမျးလိုကျခွငျးဖွဈ ကွောငျး ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးမငျးသနျးက နိရဉ်စရာသတငျးဌာနအား ပွောသညျ။ ဗိုလျမှူးကွီးမငျးသနျးက “ပွနျရုပျသိမျးတယျဆိုတာဒီလို။ မွို့နယျကနေ ကြေးရှာလေးဆယျ့နှဈရှာ တောငျထုတျ ပဈလိုကျတာ။ အမှနျကတော့ ကြောကျတနျးနားလေးမှာ လေးငါးရှာပဲရှိတာလေ။ လေးငါးရှာလောကျပဲခိုငျးတဲ့ကိစ်စကိုအမြား ကွီးထုတျလိုကျတယျ။ အဲဒီမြိုးကွောငျ့မို့ အဲဒီစာကိုပွနျရုပျသိမျးလိုကျတယျ။ အဲဒီလေးငါးရှာကတော့ ရနျသူနဲ့ တိုကျနတော လေ ဘယျလို့လုပျရုပျသိမျးလို့ရမလဲ”ဟုပွောသညျ။ ယငျးကွောငျ့ ကြောကျတနျးကြေးရှာအရှဖေ့ကျအနီးတဝိုကျ ကြေးရှာ သားမြားသာ ဖယျရှားပေးရနျ လိုအပျကွောငျး ဗိုလျမှူးကွီးမငျးသနျးက ဆကျပွောသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ ရကျဇှနျလ ၂၄ ရကျနကေ့ ကြောကျတနျးနယျမွအေား နယျမွရှေငျးလငျးမညျဖွဈသဖွငျ့ ဖယျရှားပေးရနျ ရသတေ့ောငျမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမှ နယျလုံဝနျကွီး၏ ညှနျကွားခကျြဖွငျ့ ရှာ ၄ဝ ကြျောမှ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးမြားထံ ပေးပို့ခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျလုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီးဌာန နယျမွရှေငျးလငျးရေး ပွုလုပျမညျဖွဈကွောငျး စာထုတျပွနျမှု အပျေါ သွစတွေးလြ၊ အမရေိကနျ၊ ဗွိတိနျ၊ ကနဒေါ အပါအဝငျ အနောကျနိုငျငံ သံရုံး မြားမှလညျး အလှနျအမငျး စိုးရိမျပူပငျကွောငျး ဇှနျ ၂၇ ရကျနကေ့ စုပေါငျး ကွညောခကျြမြား ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ https:// www.bnionline.net/mm/news-73898
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး စဈရေးတငျးမာမှုကွောငျ့ ရှာသားမြားထှကျပွေးတိမျးရှောငျ နစေဉျရှာတှငျ ကနျြရဈသညျ့ အရပျသားတဦး ရိုကျနှကျခံရသဖွငျ့ ဒဏျရာအပွငျးအထနျ ရရှိကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
ယမနျနကေ့ ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျတပျမတျော (RCSS/SSA) နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားမှုကွောငျ့ အကျကွီးကြေးရှာ မှ ဒသေခံမြား ထှကျပွေးတိမျးရှောငျကွရာ အသကျ ၆၀ အရှယျ ဦးအိုကျမောငျ တဦးတညျးသာ ကြေးရှာထဲတှငျ ကနျြရှိစဉျ ရိုကျနှကျခံရခွငျးဖွဈကွောငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ ပွညျနယျ အမှတျ (၁) လှတျတျောကိုယျစားလှယျ စိုငျးထှနျးဝငျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ “မနကေ့ ကြေးရှာကလူတှေ အားလုံးထှကျပွေးတိမျးရှောငျကွတယျ။ ဦးအိုကျမောငျ တယောကျတညျးကနျြခဲ့တယျ။ တပျမတျောက ဦးအိုကျမောငျကို ချေါပွီး ရိုကျနှကျထားတယျ။ ဒီနမှေ့ ပွနျလှတျလာပေးတယျ”ဟု စိုငျးထှနျးဝငျး ကဆိုသညျ။ တပျမတျောက ဦးအိုကျမောငျ အား ရိုကျနှကျထားသညျ့ ဒဏျရာသညျ ပွငျးထနျကွောငျး၊ လကျရှိမှာ ကြောကျမဲပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ ဆေးကုသမှုခံယူနေ ရကွောငျးလညျး စိုငျးထှနျးဝငျး က ပွောသညျ။ ထို့ပွငျ ယနေ့ မနကျပိုငျးတှငျလညျး ကြောကျမဲမွို့နယျ ဟိုငျးကှီကြေးရှာ အုပျစု ပနျကနျြရှာတှငျလညျး တပျမတျောမှ ပဈသညျ့လကျနကျကသြဖွငျ့ အသကျ ၅၆ နှဈအရှယျ အမြိုးသားတဦး ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံး ကာ အမြိုးသမီး တဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျးလညျး သိရသညျ။
RCSS/SSA နှငျ့ အစိုးရ တပျမတျောတို့ တိုကျပှဲဆကျတိုကျဖွဈပှားမှုကွောငျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး စဈရှောငျ ၅၀ဝ ကြျော ထိရှိလာကွောငျး၊ ထိုစဈရှောငျမြားအတှကျလညျး အစားအသောကျလိုအပျနကွေောငျး စိုငျးထှနျးဝငျး က ထပျလောငျးပွော သညျတိုကျပှဲကွောငျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျ နောငျပိနျးကြေးရှာအတှငျးရှိ အောငျဓမ်မာရုံတှငျ စဈရှောငျ ၃၃၀ ကြျော နှငျ့ ပနျလော့ ကြေးရှာရှိ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ စဈရှောငျ ၂၀ဝ ကြျောတို့ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနရေကွောငျးသိရသညျ။ လကျရှိ ကြောကျမဲ မွို့နယျအတှငျး စဈရေးတငျးမာမှုမြားဆကျလကျတညျရှိနသေဖွငျ့ ဒသေခံမြား၏ လုံခွုံရေးသညျ စိုးရိမျနရေကွောငျးလညျး ကြောကျမဲဒသေခံမြားပွောပွခကျြ အရသိရသညျ။
ဇှနျ ၂၇ ရကျတှငျ ကြောကျမဲမွို့နယျ ဟိုငျးကှီးကြေးရှာသား ၂ ဦးကို တပျမတျောမှ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခွငျး၊ ဇှနျ ၂၈ ရကျ တှငျလညျး ကြောကျမဲမွို့နယျ အတှငျးရှိ လမျးခုလပျတခုတှငျ ဒသေခံ ၂ ဦးကို တပျမတျောမှလမျးပွအဖွဈ ချေါဆောငျသှား မှုမြားရှိခဲ့ကွောငျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားပွောပွခကျြ အရသိရသညျ။ ထိုသူ ၄ ဦးသညျ ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ တပျမတျောမှပွနျလညျ လှတျပေးလိုကျကွောငျးလညျး စိုငျးထှနျးဝငျးက ပွောပွသညျ။ https://burmese.shannews.org /archives/17310
လကျရှိ ကယား(ကရငျနီ)ပွညျနယျမှာရှိနမှော စဈမှနျတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအဆငျ့မရောကျသေးဘူးလို့ ကရငျနီလူမြိုးပေါငျးစုံ ပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျဦး (က.လ.လ.တ) အတှငျးရေးမှူးအဖှဲ့ ဦးမာကုအီ ခဈြထှနျးက ၎င်းငျးတို့ အဖှဲ့ရဲ့ ၄၂ နှဈမွောကျ မှေးနမှေ့ာ ကန်တာရဝတီတိုငျး(မျ)ကို ပွောပါတယျ။
“ကနြျောတို့ပွညျနယျငွိမျးခမျြးပွီလားမေးလိုကျရငျတော့ ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို ကနြျောတို့ကွညျ့ရမှာဖွဈတယျ။ ကနြျောတို့ ပွညျသူလူထုတှကေ ငွိမျးခမျြးတယျလိုထငျတယျ။ ကနြျောတို့ ညီအဈကိုအခငျြးခငျြး ရနျဖွဈတာက မငွိမျးခမျြးဘူး လို့ ချေါတယျ။ ဒီကနကေ့နြျောတို့အဖှဲ့အစညျး လေးငါးဖှဲ့ KNPP ကအစ အပဈအခတျရပျစဲရေးလုပျတဲ့အခါကတြော့ ငွိမျးခမျြး ရေးလို့ သူတို့ (ပွညျသူ) ခံစားရတယျ။ ဒါပမေယျ့ကနြျောတို့အမွငျကတော့ တာတဈစုံတဈရာ စဈမှနျတဲ့ငွိမျးခမျြးရေးအဆငျ့ထိ မရောကျဘူးဆိုတာ ကနြျောတို့ခံစားနရေတယျ” လို့ ဦးမာကုအီ ခဈြထှနျးက ပွောပါတယျ။ (က.လ.လ.တ) အဖှဲ့ရဲ့ ၄၂ နှဈပွညျ့ နှဈပတျလညျအခမျးအနားကို ဖရူဆိုမွို့နယျ ကကေောအုပျစု ပရယျဒိုကြေးရှာမှာ အကဉျြးခြုပျပွုလုပျခဲ့ကွတာဖွဈပွီး ၎င်းငျး အခနျးအနားမှာ ပွညျသူအပါအဝငျ ကရငျနီအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ (KNPP) နှငျ့ ကရငျနီအမြိုးသားငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (KNPDP) တို့လညျးတကျရောကျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံရေးအတှေးအမွငျကှဲလှဲခဲ့ရာမှ ကရငျနီအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ (KNPP) ကနေ ခှဲထှကျခဲ့တဲ့ အဖှဲ့အစညျးဖွဈပမေယျ့ လကျရှိအခွအေနမှောတော့ KNPP အဖှဲ့အစညျးအပွငျ ပွညျနယျထဲမှာရှိတဲ့ တခွား ညီအဈကိုလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျး တှနေဲ့လညျး ပွနျလညျသငျ့မွတျနခွေငျးဟာလညျး အောငျမွငျမှုတဈခုဖွဈတယျလို့ ဦးမာကုအီ ခဈြထှနျး ကပွောပါတယျ။ က.လ.လ.တ ၏ ရညျရှယျခကျြမှာ ဒီမိုကရစေီကိုအခွခေံပွီး ပွညျသူ့ဒီမိုကရစေီကို ခြီတကျသောတပျဖှဲ့ဖွဈတယျလို့ဆိုပါ တယျ။ ၁၉၇၈ ခုနှဈမှာ ကရငျနီအမြိုးသား တိုးတကျရေးပါတီ (KNPP)ကနေ ခှဲထှကျခဲ့ပွီး ၁၉၉၄ ခုနှဈမှာ မွနျမာစဈအစိုးရနှငျ့ အပဈခတျရပျစဲရေး သဘောတူညီမှုရယူခဲ့ပွီး ၂၀ဝ၉ ခုနှဈမှာ နယျခွားစောငျ့တပျအဖွဈ အသှငျပွောငျးလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ နယျခွားစောငျ့တပျအဖွဈ မွို့နယျ ၈ မွို့နယျတှငျ တာဝနျထမျး ဆောငျလကျြရှိတယျလို့သိရပါတယျ။ https:// www.bnionline.net /mm/news-73906
ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျးက ကမ်ဘောဇဘဏျခှဲတခြို့မှာ SSPP/ SSA က ငှကွေေးတောငျးခံတဲ့ စာထုတျထားတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှကွေောငျ့ ဘဏျဝနျထမျးတှေ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။ SSPP ကတော့ နောကျနောငျ ဒါမြိုးတှမေဖွဈစဖေို့နဲ့ ဘဏျ ဝနျထမျးတှရေဲ့ လုံခွုံရေးကို တာဝနျယူကွောငျး ပွောဆိုထားပါတယျ။
ကြောကျမဲ၊ နောငျခြို့နဲ့ သီပေါက ကမ်ဘောဇဘဏျခှဲတှဆေီကနေ SSPP ဌာနတေပျသားတှကေ ငှတေောငျးဖို့ အကွောငျးကွား စာ ဖွနျ့ဝခေဲ့တယျဆိုတဲ့ ကိစ်စအတှကျ SSPP/ SSA ပွောခှငျ့ရသူ ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး စိုငျးဆုက RFA ကနေ အခုလို ရှငျးပွခဲ့ တာပါ။ SSPP အနနေဲ့ အောကျခွတေပျသားတှကေို ဘဏျတှမှော ငှကေောကျခံခိုငျးတာမရှိဘဲ ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ လို အပျမှသာ ဗဟိုဌာနခြုပျကနေ တိုကျရိုကျအကူအညီ တောငျးခံတာမြိုးပဲရှိတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဇှနျလ ၈ ရကျနေ့ ရကျစှဲနဲ့ ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျးမှာရှိတဲ့ ကမ်ဘောဇဘဏျ တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ ငှကွေေးကိစ်စ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေးဖို့ လာရောကျရနျ ဆိုပွီး အောကျခွတေပျသားတှကေ SSPP တံဆိပျပါတဲ့ ဆငျ့ချေါစာ ပို့ခဲ့တာကို ဗဟိုတာဝနျရှိသူ တှကေ သိရှိခဲ့တဲ့အတှကျ အခြိနျမီတားမွဈခဲ့တာလို့ ပွောပါတယျ။ အဲဒီမွို့နယျ သုံးခုက ကမ်ဘောဇဘဏျခှဲ သုံးခုကတော့ ဇှနျလ ၂၂ ရကျနကေ့စပွီး ယာယီပိတျထားလိုကျပွီး လကျနကျကိုငျတှကွေောငျ့မဟုတျဘဲ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာလအတှငျး ဘဏျဝနျထမျးတှနေညျးလို့ ယာယီပိတျထားတာသာ ဖွဈတယျလို့ ကြောကျမဲမွို့ ကမ်ဘောဇဘဏျခှဲ တာဝနျရှိသူတဈဦးက RFA ကို ပွောပါတယျ။
ရှမျးပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့က ရဲမှူးကွီး ဗညားဦးကတော့ ပုဂ်ဂလိက ဘဏျတှမှော ထူးခွားသတငျးတှရှေိရငျ ရဲတပျဖှဲ့ လုံခွုံရေး ဆောငျရှကျပေးတာရှိပမေယျ့ ရဲတပျဖှဲ့ အငျအားနညျးတာကွောငျ့ အခွားအခြိနျတှမှော အခြိနျပွညျ့ စောငျ့ပေးနိုငျတာမြိုးတော့ မရှိဘူးလို့ပွောပါတယျ။ ကြောကျမဲဒသေခံ ကိုသားဇျောကတော့ ဘဏျတှပေိတျထားလို့ ဒသေခံတှအေတှကျ ငှကွေေးလှဲ ပွောငျးထုတျယူရာမှာ အခကျအခဲတှရှေိခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။ SSPP အဖှဲ့ကတော့ သူတို့အဖှဲ့ လှုပျရှားရာဒသေတှမှော နှဈစဉျ တဈနှဈတဈကွိမျ အခှနျတောငျးခံလရှေိ့ပွီး လုပျငနျးရှငျကွီးတှကေိုသာ ရနျပုံငှပေုံစံမြိုး ထညျ့ခိုငျးပွီး အိမျပေါကျစေ့ ကောကျခံတာမရှိဘူးလို့ SSPP က ဗိုလျမှူးကွီး စိုငျးဆုက ပွောပါတယျ။
SSPP အဖှဲ့ဟာ ရှမျးပွညျနယျ တောငျပိုငျး ကြေးသီးမွို့နယျ ဝမျဟိုငျးကြေးရှာမှာ ဌာနခြုပျ ရှိတာပါ။ ရှမျးပွညျနယျ တောငျပိုငျး ကြေးသီး၊ မိုငျးနောငျ၊ မိုငျးရှုးမွို့နယျတှမှော အဓိကလှုပျရှားပွီး ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျးမှာတော့ နောငျခြို၊ ကြောကျမဲ၊ သီပေါ၊ နမ်မတူ၊ နမျ့လနျ၊ သိနျနီ၊ ကှတျခိုငျ၊ မူဆယျ၊ တနျ့ယနျး စတဲ့မွို့နယျတှမှော အဓိလှုပျရှားတာဖွဈပါတယျ။ အစိုးရနဲ့ ဆကျဆံရေးအတှကျ လားရှိုးအပါအဝငျ မွို့နယျအခြို့မှာ ဆကျဆံရေးရုံးတှေ ဖှငျ့ထားပါတယျ။ စဈအငျအား တဈသောငျး ကြျောရှိတဲ့ SSPP အနနေဲ့ အစိုးရနဲ့ ပွညျနယျအဆငျ့၊ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ အပဈရပျစာခြုပျမှာ လကျမှတျရေးထိုးထားပမေယျ့ NCA မှာတော့ လကျမှတျရေးထိုးနိုငျခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/news/sspp-will-do-to-secure-kbz-in-north shan-06282020055727.html
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ပဋိပက်ခဖွဈပှားရာဒသေမြားတှငျ ညှဉျးပမျးနှိပျစကျမှုဖွဈစဉျမြား ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ဖွဈပှားလကျြရှိပွီး တိုငျးရငျးသူ အမြိုးသမီးမြားမှာ မုဒိနျးမှုကို ညှဉျးပမျးနှိပျစကျမှု ပုံစံတဈခုအဖွဈ စဈလကျနကျသဖှယျ အသုံးပွုခံ နရေသညျဟု အမြိုးသမီးမြားအဖှဲ့ခြုပျ-မွနျမာနိုငျငံ (WLB) ပွောသညျ။
ဇှနျလ ၂၆ ရကျနကေ့ ကရြောကျသညျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ညှငျးပမျးနှိပျခံရသူမြားကို ကူညီထောကျပံ့ရေးနေ့၏ အှနျလိုငျး စကားဝိုငျးတှငျ အမြိုးသမီးမြားအဖှဲ့ခြုပျ- မွနျမာနိုငျငံ (WLB) တှဲဖကျ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ၂ လှေးပိုးငယျ က ပွောဆို လိုကျခွငျးဖွဈသညျ။“ဒီ မုဒိနျးမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့မှ တိုငျးရငျးသား ဒသေ မှာ ဆိုလို့ရှိရငျ ဘာကွောငျ့ ကမြက စဈပှဲရဲ့ လကျနကျတဈခု အဖွဈအသုံးပွုတယျလို့ ပွောသလဲဆိုရငျ အမြိုးသမီး အမြားစုသညျ လကျနကျကိုငျပွီးမှ တျောလှနျတာ တော့ မဟုတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့တှေ ဒီတိုကျပှဲ ဖွဈနတေဲ့ ကာလအတှငျးမှာ မုဒိနျးမှုတှေ အကငျြ့ခံရတယျ။ အုပျစုလိုကျ မုဒိနျးကငျြ့ခွငျးတှကေိုလညျး ခံရတယျ။”ထို့အပွငျ စိတျပိုငျးနှငျ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ညှငျးပမျးနှိပျစကျမှုမြားကိုလညျး အမြိုးသမီး မြားအနဖွေငျ့ ခံနရေသညျဟု လှေးပိုးငယျက ဆကျပွောသညျ။ ယခုကဲ့သို့ အမြိုးသမီးမြား ညှငျးပမျးနှိပျစကျခံနရေသညျ့ ဖွဈရပျသညျ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခဖွဈပှားသညျ့ တိုငျးရငျးသားဒသေမြားတှငျ အမြားဆုံးဖွဈပွီး အမြိုးသမီးမြားအပွငျ အခွား သောဒသေခံမြားမှာလညျး လူအခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရမှုနှငျ့မတူကှဲပွားသညျ့ ညှငျးပမျးနှိပျစကျမှုအမြိုးမြိုးကို ခံနရေသညျဟု ဆိုသညျ။
အဆိုပါဖွဈရပျမြားသညျ ယခငျ အုပျခြုပျသူ အစိုးရအဆကျဆကျတှငျ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျတှငျ ဆကျလကျဖွဈပှားနေ သညျဟု လူ့အခှငျ့အရေး မှတျတမျးကှနျရကျ ND-Burma မှ ကိုအောငျဇျောဦးက အဆိုပါ အှနျလိုငျးစကားဝိုငျးတှငျ ပွောဆိုခဲ့ သညျ။ ကိုအောငျဇျောဦးက “ညှငျးပမျးနှိပျစကျမှုတှကေ အဓိက ပွညျသူတှကေို ဦးတညျပွီးတော့ ဖွဈတာ။ ခံရတဲ့လူ အမြား ဆုံးကလညျး ပွညျသူတှေ အဓိက ဘယျနရောတှမှောအဖွဈမြားလဲဆိုတော့ အထူးသဖွငျ့ တိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှော တိုငျးရငျးသားဒသေတောငျမှ စဈဖွဈတဲ့ တိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှော မြားပါတယျ။ အဲဒါကို တှနေ့ရေတယျ။ နဂိုတုနျးက ကရငျမှာ ဖွဈတယျ။ ကရငျက ငွိမျးခမျြးရေး ယူတော့ ကရငျမှာ လြော့လာတယျ။ နောကျကခငျြမှာ ဖွဈတယျ။ ကခငျြက ငွိမျးခမျြးရေးယူတော့ လြော့လာတယျ။ နောကျတိုကျပှဲတှေ ထပျဖွဈတယျ ထပျဖွဈလာတယျ။ အခုနောကျပိုငျး အဖွဈမြားဆုံး က ရှမျးမွောကျ နှငျ့ ရခိုငျ အခုနောကျပိုငျးမှာ ရခိုငျမှာ ပိုမြားလာတယျ။” ဟုပွောသညျ။
အပွညျပွညျဆိုငျရာ ညှငျးပမျးနှိပျခံရသူမြားကို ကူညီထောကျ ပံ့ရေးနတှေ့ငျ လူ့မှုအသငျးအဖှဲ့မြားဖွဈသညျ့ အမြိုးသမီးမြား အဖှဲ့ခြုပျ မွနျမာနိုငျငံ WLB ၊ လူ့အခှငျ့အရေးမှတျတမျး ကှနျရကျ မွနျမာနိုငျငံ ND-Burma၊ နိုငျငံရေး အကဉျြးသားမြား ကူညီ စောငျ့ရှောငျရေးအသငျး AAPP ၊ ဝိမုတ်တိအမြိုးသမီး အဖှဲ့အစညျး VWO နှငျ့ အာရှတရားမြှတမှုနှငျ့ အခှငျ့အရေးမြားဆိုငျရာအဖှဲ့ AJAR တို့က ပူးတှဲ သဘောထားထုတျပွနျခကျြ တဈစောငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ညှဉျးပမျးနှိပျစကျခံရသူ မြားကို ကူညီထောကျပံ့ရေးနတှေ့ငျ လူမှုအဖှဲ့အစညျး ၅ ဖှဲ့က တိုငျးရငျးသားဒသေတှငျ တိုးခြဲ့ထားသော တပျမတျော၏ တပျရငျးမြားကို ရပျတနျ့ရနျနှငျ့ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြား ရပျတနျ့ရနျ၊ အရပျသားပွညျသူမြားအပျေါ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုး ဖောကျမှု ညှဉျးပနျးနှိမျ့စကျမှုနှငျ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှု ကြူးလှနျသူမြားကို အစိုးရမှ ထိရောကျစှာ အပွဈပေး အရေး ယူဆောငျရှကျ ပေးရနျ အစိုးရအား တောငျးဆိုထားသညျ။ ထို့အပွငျ ညှဉျးပမျးနှိပျစကျမှု ဆနျ့ကငျြရေး ကုလသမဂ်ဂစာခြုပျ UNCAT အား လကျမှတျရေးထိုး အတညျပွုရနျနှငျ့ ဥပဒအေဖွဈ ပွဌာနျးဆောငျရှကျရနျ၊ ညှဉျးပမျးနှိပျစကျမှု ကြူးလှနျခံရသူ မြားနှငျ့ အခွားနညျးဖွငျ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရသူမြားအတှကျ အစိုးရအနဖွေငျ့ ပွနျလညျကုစားရေးနှငျ့ ပွနျလညျထူ ထောငျရေး အစီအစဉျမြားကို ရေးဆှဲအကောငျအထညျဖျောရနျ စသညျ့အခကျြမြားအပါအဝငျ အခကျြ ၈ ခကျြကို လူမှုအ သငျး အဖှဲ့အစညျး ၅ ဖှဲ့က ပူးတှဲထုတျပွနျခကျြဖွငျ့ အစိုးရအား တောငျးဆိုထားသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျအတှငျးက တပျမတျော မိသားစုဝငျ လူငယျ ၃ ဦးကို ဇှနျလ ၂၄ ရကျနေ့ မှနျးလှဲပိုငျး က ရက်ခိုငျ့စဈတပျ (AA) တပျဖှဲ့ဝငျမြားက ဖမျးဆီးသှားကွောငျး တပျမတျောမှ သတငျးထုတျပွနျထားသညျ။ ဖမျးဆီးသှားသညျ့ တပျမိသားစုဝငျ လူငယျ ၃ ဦးနှငျ့ပတျသကျပွီး တပျမတျောစဈကွောငျးမြားက လိုကျလံပွီး ရှာဖှနေကွေောငျးလညျး တပျမတျော သတငျးပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ထှနျးထှနျးညီက ပွောသညျ။
ဗိုလျခြုပျ ထှနျးထှနျးညီက “ဖမျးသှား တဲ့ တပျမိသားစုဝငျ ၃ ဦးကို အဲဒီကတညျးက ကနြျောတို့ တပျမတျောစဈကွောငျးတှကေ ပွနျလညျကယျဆယျနိုငျရေးအတှကျ လိုကျလံပွီး ရှာဖှနေတောရှိတယျ။ နောကျဆကျတှဲ အခွအေနေ ကိုတော့မသိရသေးဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
တပျမတျောစဈကွောငျးမှ အသုံးပွုသော အစ်စရေးနိုငျငံလုပျ စဈမွပွေငျသုံး Skylark l-LEX အမြိုးအစား မောငျးသူမဲ့ ကငျးထောကျ လယောဉျငယျ ၁ စီးအား ဇှနျလ ၂၄ ရကျ နေ့ သိမျးဆညျး ရမိခဲ့ကွောငျး AA အဖှဲ့က ထုတျပွနျထားသညျ။ ယငျးအပွငျ ထိုမောငျးသူမဲ့ ကငျးထောကျ လယောဉျအားလာရောကျရှာဖှသေူ ရသတေ့ောငျ အခွစေိုကျ ခမရ ( ၅၃၆ ) တပျရငျးမှ တပျမိသားစုဝငျ လူငယျ ၃ ဦးကိုလညျး ဖမျးဆီးရမိထားကွောငျး AA ထုတျ ပွနျခကျြတှငျ ရေးသားထားသညျ။ ရသတေ့ောငျ အခွစေိုကျ ခမရ ( ၅၃၆ ) တပျရငျးမှ ဖမျးဆီးရမိသညျ့ တပျမိသားစုဝငျ လူငယျ ၃ ဦးမှာ တပျကွပျကွီး အေးကြျော ၏သား အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ မောငျကြျောသူရ၊ တပျကွပျ လှရှေ၏သား အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျ မောငျနဆေနျးဦး၊ တပျကွပျကွီး စံသိနျး ၏သား အသကျ ၂၀ အရှယျ မောငျမြိုးဟိနျးစံ တို့ဖွဈကွောငျး AA ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ဓါတျပုံနှငျ့တကှ ဖျောပွ ထားသညျ။
အဆိုပါ ဖမျးဆီးထားသညျ့ တပျမိသားစုဝငျ လူငယျ ၃ ဦးကို ပွနျလှတျ၊ မလှတျဆို သညျကို AA အနဖွေငျ့ ထုတျပွနျထားခွငျး မရှိသျောလညျး တိုကျပှဲအတှငျးက ဖမျးဆီးသှားသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၏ မိသားစုမြားကိုတော့ AA တပျဖှဲ့ဝငျမြားက ပွနျလှတျ ပေးလရှေိ့သညျ။ ဇှနျလ ၂၄ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ ရသတေ့ောငျမွို့နယျအတှငျးက ပွားခြောငျးကွီး တံတားအနီးတှငျ တပျမတျောနှငျ့ AA အဖှဲ့တို့ နှဈဘကျ ထိတှတေို့ကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ရာ အနီးရှိ ရှပေါရမီကြောငျး စဈရှောငျစခနျးအနီးသို့ လကျနကျ ကွီးကရြောကျပေါကျကှဲသညျ့အတှကျ စဈရှောငျစခနျးတှငျ ဝငျရောကျခိုလှုံနသေူ အသကျ ၅၆ နှဈအရှယျ ဦးမောငျအေးညှနျ့ မှာ ပွငျးထနျ ဒဏျရာမြား ရရှိခဲ့သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/26/225338.html
ညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ United Nationalities Democracy Party –UNDP ကို စညျးလုံး ညီညှတျသောတိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားမဟာမိတျ UNA အဖှဲ့ဝငျအဖွဈ ပါဝငျခှငျ့ပွုထားကွောငျး ဇှနျလ ၂၆ ရကျနစှေဲ့ဖွငျ့ စာ ပေး ပို့ခဲ့သညျဟု UNA အတှငျးရေးမှူးအဖှဲ့ဝငျ ဦးမြိုးကြျောထံမှ သိရသညျ။“ဒီနကေ့တော့ အစညျးအဝေးတကျရောကျလာ တဲ့ အဖှဲ့ဝငျအကုနျလုံးကတော့ UNDP ဝငျတာကို သူတို့ထောကျခံတယျလေ အတညျပွုတယျ အဲတာကွောငျ့မို့ ကြှနျတျောတို့ ကတော့ အတညျပွုကွောငျ့အနဖွေငျ့ ဒီနကွေ့ညောပေးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ၊ ဝငျဖို့လြှောကျထားတာက ၆ လရှိပွီ၊ ”ဟု ဦးမြိုးကြျော ကပွောသညျ။ UNA အနဖွေငျ့ မိမိတို့၏ မူကိုလကျခံ သဘောကသြညျ့ မညျသညျ့တိုငျးရငျးသားမဆို အဖှဲ့ဝငျ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျး လကျခံပါက အတညျပွုပေးရသညျဟု ဦးမြိုးကြျောက ပွောသညျ။
ထို့အတူ UNA အနဖွေငျ့ အခွားအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့လညျး မိတျဖကျဖွဈပွီး မိမိတို့၏ ရညျရှယျခကျြတူညီသောကွောငျ့ ဝငျခှငျ့ လြှောကျခဲ့သညျဟု UNDP အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး နျောအုနျးလှက ပွောသညျ။ နျောအုနျးလှက “ကြှနျမတို့က နဂိုက တညျးက UNDP က တခွားအဖှဲ့အစညျးမှာလညျး မိတျဖကျဖွဈတယျ UNA က ဟိုအရငျကတညျးကလညျး အတူတူလုပျခဲ့တဲ့ အဖှဲ့အစညျး ဖွဈတဲ့အခါကတြော့လညျး ကြှနျမတို့ ပါတီထောငျတဲ့အခါကတြော့ UNA ရဲ့ မူတှနေဲ့ ကြှနျမတို့ရဲ့ မူတှကေ တူတူဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျမတို့ ဒီမိုကရကျတဈအငျအားစုကို တူတူဆောငျရှကျမယျဆိုပွီး ကြှနျမတို့ လြှောကျခဲ့ခွငျးဖွဈတယျ အဲတာကွောငျ့မို့လညျး သူတို့လကျခံတာ ရရှိခဲ့တာပေါ့နော့”ဟု ပွောသညျ။ UNDP ပါတီအနဖွေငျ့ အဖှဲ့ဝငျဖွဈလာသညျ့ အတှကျ UNA ၏ တိုငျးရငျးသားဒသေမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျစရာမလိုဘဲ ပွညျမရှိ ပါတီအခြို့နှငျ့ ညှိနှိုငျးဆောငျ ရှကျပွီး ရှေးကောကျပှဲ ဝငျပွိုငျသှားမညျဟု UNDP အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး နျောအုနျးလှက ပွောသညျ။
စညျးလုံးညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားမဟာမိတျအဖှဲ့တှငျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ရခိုငျဒီမိုကရေ စီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ဇိုမီးဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ရှမျးပွညျ ကိုးကနျ့ဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ ကယနျးအမြိုးသားပါတီ၊ ကခငျြအမြိုးသား ကှနျဂ ရကျပါတီ၊ ကရငျအမြိုးသားပါတီ၊ ဓနုတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ၊ ခူမီး(ခမီး)အမြိုးသားပါတီ၊ မွို အမြိုးသား ဒီမို ကရစေီပါတီ၊ ဒိုငျးနကျလူမြိုးမြားတိုးတကျရေးပါတီ၊ လူဘောငျသဈဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ ရှမျးနီ(တိုငျးလနျြ)သှေးစညျးညီညှတျ ရေးပါတီနှငျ့ ညီညှတျသောတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီအပွငျ မိတျဖကျအဖှဲ့အစညျးပေါငျး ၇၀ ခနျ့ရှိသညျ။ http://burmese.monne ws.org/2020/06/27/%e1%80%8a%e1%80%ae%e1%80%8a%e1%80%bd%e1%
၁၀။ ဖားကနျ့လုပျကှကျမြား ဇူလိုငျ ၁ ရကျမှ သုံးလ ပိတျသိမျးရနျနှငျ့ ခိုးကငျြး မတူးဖျောရနျ အပါအဝငျ အခကျြ ၁၀ ခကျြ ညှနျကွား ထား
ဖားကနျ့လုပျကှကျမြား ဇူလိုငျ ၁ ရကျမှ သုံးလ ပိတျသိမျးရနျနှငျ့ ခိုးကငျြး မတူးဖျောရနျ အပါအဝငျ အခကျြ ၁၀ ခကျြ ညှနျကွား ထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ဖားကနျ့ဒသေတှငျ ကြောကျစိမျးတူးဖျောရေးလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျရာတှငျ လကျရှိအခွေ အနအေရ နှံကနျကြိုးပေါကျခွငျး၊ မွပွေိုမှုကွောငျ့ လူသဆေုံးမှုမြား၊ စကျယန်တရားနှငျ့ လူနအေိမျ ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုမြား ဖွဈပျေါ နသေဖွငျ့ အမြိုးသားလှတျတျောနှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျော သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေး ကျောမတီက တငျပွခကျြအရ သုံးလအတှငျး လုပျငနျးမြား လုံးဝရပျနားထားရနျ၊ အန်တရာယျကွိုတငျကာကှယျမှု အစီအမံ ဆောငျရှကျထား ရနျ ညှနျကွားထားခွငျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျောအစိုးရ၊ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီးဌာန၊ စီမံခနျ့ခှဲရေးကျောမတီ၏ ဇှနျလ ၂၆ ရကျ ဆှေးနှေးဆုံးဖွတျခကျြအရ ကြောကျမကျြ တူးဖျောခွငျး လုပျငနျးမြားကို ယာယီရပျဆိုငျးရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကုမ်ပဏီမြားသညျ လုပျငနျးရပျနားစဉျ ကာလအတှငျး မလိုလားအပျသော ပွဿနာမြား မဖွဈပှားစရေေးအတှကျ အခကျြ ၁၀ ခကျြကိုလညျး လိုကျနာရနျ ထုတျပွနျခဲ့သညျကို တှရေ့သညျ။ ယငျးထုတျပွနျခကျြမြား တှငျ (က) လုပျငနျးရပျနားစဉျ ခေါငျး ပေါငျးမွစော (အပျေါယံမွလှော) ဖယျရှားခွငျး၊ ကြောကျစိမျးရိုငျးပါ မွစောပုံတှငျ ကြောကျရှာခွငျး၊ ရပေနျးထိုးရှာခွငျးမြား မပွု လုပျရနျ၊ (ခ) ကြောကျစိမျးရိုငျးပါ မွစောပုံအား ရှာဖှခွေငျးလုပျငနျး မပွီးသေးပါက ခိုငျခံသော ခွံစညျးရိုးမြားဖွငျ့ လုံခွုံစှာထား ရနျ၊ (ဂ) ယာယီရပျနားခွငျးမပွုမီ ကြောကျစိမျးရိုငျးတုံးမြားကို တနျဖိုးဖွတျ ရတာခှနျဆောငျ၍ နပွေညျတျောသို့ သယျဆောငျ ထိနျးသိမျးရနျ၊ ဆောငျရှကျလိုသညျ့ ကြောကျစိမျးရိုငျး၊ အရအေတှကျ အလေးခြိနျ (ခနျ့မှနျး) ကို လုံးခငျး-ဖားကနျ့ တူးဖျောရေး ဌာနသို့ ကွိုတငျပေးပို့တငျပွရနျ (ဃ) စကျယန်တရားမြား ကုမ်ပဏီဝငျးအတှငျး ထားရနျ၊ လုံးခငျး-ဖားကနျ့ တူးဖျောရေးဌာနသို့ ဇူလိုငျ ၁ ရကျနေ့ မတိုငျမီ စာရငျးပေးပို့ရနျ (င) ယန်တရားပွငျဆငျရေး ကုမ်ပဏီဝငျးအတှငျး လုပျဆောငျရနျ (စ) စကျယန်တရားမြား သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးလုပျငနျးအတှကျ ကခငျြပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၏ ခှငျ့ပွုခကျြမရှိဘဲ သှားလာခွငျးမပွုရနျ (ဆ) ယမျးနှငျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြား လုပျထုံးလုပျနညျးအတိုငျး သိမျးဆညျးရနျ (ဇ)လုံခွုံရေးဝနျထမျး အငျအားစာရငျးကို ဇူလိုငျ ၁ ရကျမတိုငျမီ လုံးခငျး-ဖားကနျ့ တူးဖျောရေးဌာနသို့ ပေးပို့ရနျ (ဈ) လုံခွုံရေး ခြိုးဖောကျခံရမှု၊ ထူးခွားဖွဈစဉျ ရှိလာပါက သတငျးပို့နိုငျရေးအတှကျ သတငျးပို့စနဈမြား တငျပွရနျ (ည) သကျတမျးကုနျ လုပျကှကျမြားကို တရားမဝငျ ဝငျရောကျတူး ဖျောခွငျး မပွုရနျ (ခိုးကငျြး မတူးကွရနျ) စသညျ့ အခကျြ ၁၀ ခကျြကို တိကစြှာ လိုကျနာရနျ ထုတျပွနျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖားကနျ့မွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးတငျ့စိုးက “ ထုတျပွနျခကျြတော့ လှတျတျောကနေ ညှိနှိုငျးစညျးဝေးပွီး ရပျနားဖို့ ဆုံးဖွတျတာပေါ့။ မွပွေိုဘေး၊ ရကေနျတှပေေါကျကွတဲ့ဘေးတှေ ရှိတာကွောငျ့ လူတှသေလေို့ပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အခု လူသမှေုဖွဈစဉျတှကေ ခိုးကငျြးတူးတဲ့ အခွအေနမှော ဖွဈနကွေတာ။ တရားဝငျလုပျငနျးခှငျ့မှာတှေ မဟုတျကွဘူး။ ဒီဘေး အန်တရယျဖွဈစဉျတှကေ ရှိနိုငျသေးတယျ။ တခြို့ခိုးကငျြးတှကွေတော့ စကျယန်တရား ကွီးကွီးမားမားတှေ သုံးတော့ ဒါတှကေို တားမွဈခငျြတဲ့ သဘောတှကွေောငျ့ ထုတျပွနျခကျြထုတျတာလို့ ထငျပါတယျ။ ဒီမှာက ခိုးကငျြးကိစ်စတှကေလညျး ပလူပြံနေ တာကို”ဟု ဆိုသညျ။
လကျရှိတှငျ အကြိုးတူလုပျကှကျ လေးခု၊ ပုဂ်ဂလိက လုပျကှကျ ၆၃၆ ကှကျရှိပွီး အမြားစုမှာ ခိုးတူးနကွေခွငျး ဖွဈကွောငျးသိ ရသညျ။ ဖားကနျ့ဒသေတှငျ မွနျမာနိုငျငံအရပျရပျမှ ရောကျရှိလာသညျ့ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား သုံးသိနျးဝနျးကငျြ အမွဲရှိနပွေီး ကြောကျစိမျး လုပျကှကျမြားတှငျ တရားမဝငျ တနိုငျတဈပိုငျ တူးဖျောခွငျး၊ မွစောပုံမြားတှငျ ရမေဆေးရှာခွငျး၊ ကြောကျစိမျး တူးဖျောနဆေဲ လုပျကှကျမြားတှငျ ကြောကျစိမျးရှာဖှခွေငျးစသညျ့ လုပျငနျးမြားတှငျ လုပျကိုငျနပွေီး မွပွေိုမှုကွောငျ့ လစဉျ မွပွေိုသဆေုံးမှုမြား ရှိလာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ မိုးတှငျးကာလတှငျ ကငျြးဟောငျးနှံကနျမြား ပေါကျကမြှုကွောငျး လူပေါငျး ဆယျခြီ အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီး ပွညျထောငျစု သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီးဌာနက ဇှနျလ ၁ ရကျမှ အောကျတိုဘာ ၁ ရကျအထိ ရပျနားကွရနျ ညှနျကွားခကျြထုတျပွနျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ https://news-eleven. com/article/180367
KNU –ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၏ မူတွျော (ဖာပှနျ)ခရိုငျ (တပျမဟာ ၅) ဒှယျလိုးမွို့နယျ၊ လေးဖိုးထကြေး ရှာအုပျစုရှိ ဝါသိုး ခိုကြေးရှာတှငျ တပျမတျောမှ ဖကျြဆီးလိုကျသညျ့ Covid-19 ကနျြးမာရေးစဈဆေးရေးဂိတျနရော တှငျ KNU ဘကျက တဈဖနျဂိတျပွနျဆောကျ၍ ဇှနျလ ၂၅ ရကျနတှေ့ငျ ထပျမံဖှငျ့လှဈခဲ့သညျဟု သိရသညျ။
ဖာပှနျ-ကမမောငျး ကွားရှိ ဝါသိုးခိုကြေးရှာ၌ Covid -19 ရောဂါ ကာကှယျရေးအတှကျ KNU မူတွျော ခရိုငျမှ ဖှငျ့လှဈထား သညျ့ Screening Point (ကနျြးမာရေးစဈဆေးရေးဂိတျ)ကို ပွီးခဲ့သညျ့ မလေက တပျမတျောဘကျမှ မီးရှို့ဖကျြဆီးလိုကျခွငျး ဖွဈပွီး ယခု နှဈဖကျနားလညျမှုအရ ထပျမံဖှငျ့လှဈလိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု တာဝနျရှိသူမြား က ပွောသညျ။ သို့သျော အဆိုပါ ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျကို ဇှနျလ ၂၅ရကျနေ့ တဈရကျသာ ပွနျလညျဖှငျ့ရပွီး တပျမတျောဘကျမှ လမျးကွောငျးရှိ သညျဟု လာရောကျအသိပေးလာသညျ့အတှကျ ဇှနျလ ၂၆ ရကျနတှေ့ငျ ကနျြးမာရေးစဈဆေးရေးဂိတျကို ယာယီပိတျလိုကျ ရသညျဟု နယျလှညျ့ကြောပိုးအိတျကနျြးမာရေးလုပျသားအဖှဲ့ (BPHWT) ဖာပှနျဒသေ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောသညျ။
အဆိုပါဂိတျကို ကရငျကနျြမာရေးနှငျ့ ကယျဆယျရေးဌာန- KDHW နှငျ့ BPHWT တို့ ပူးပေါငျးပွီး ကနျြးမာရေး စဈရေးလုပျငနျး မြားဆောငျရှကျကာ ဝငျထှကျသှားလာနသေညျ့ ဒသေခံလူထုမြားကို ကိုယျအပူခြိနျတိုငျးတာခွငျး၊ နှာခေါငျးစညျး (Mask) တပျခိုငျးခွငျး၊ Covid-19 ကနျြးမာရေး ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ရှောငျရနျ ၊ ဆောငျရနျမြားအတှကျ ကရငျဘာသာစကား ဖွငျ့ ရှငျးပွပေးခွငျးတို့ကို လုပျဆောငျပေးလကျြရှိသညျဟု သိရ သညျ။
ဝါသိုးခိုကြေးရှာနှငျ့ ဖားလို့လမျးခှရှိ KNU၏ ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျနှဈခုကို ပွီးခဲ့သညျ့ မလေ ၆ ရကျနေ့ တှငျ တပျမတျောက မီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့သညျ့အတှကျ KNU ၏ ကရငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရေး တပျမတျော -KNLA တပျဖှဲ့ဝငျမြား နှငျ့ တပျမတျောတို့ကွား နှဈဖကျတငျးမာမှုဖွဈပွီး ပဈခတျမှုမြားဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ထိုပဈခတျမှု မြားကွောငျ့ ဒသေခံရှာသားမြား ထိခိုကျဒဏျရာရရှိမှုရှိခဲ့သလို ရာနှငျ့ခြီသညျ့ ဒသေခံရှာသားမြားလညျး ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ရသညျဟု သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80
၁၂။ စဈတပျကနတေောငျသူတှကေို ပဈဒဏျထပျမံခမြှတျဖို့ ပွငျဆငျခကျြတကျတဲ့အပျေါ ဖွလြေော့ပေးဖို့ တောငျသူမြား တောငျးဆို
စဈတပျကနေ တောငျသူတှအေပျေါ ပဈဒဏျထပျမံခမြှတျပေးဖို့ ကယားပွညျနယျ တရားလှတျတျောရုံးသို့ ပွငျဆငျခကြ တကျ တဲ့အပျေါမှာ ပွနျလညျဖွလြေော့ပေးဖို့ စဉျးစားပေးစခေငျြတယျလို့ တောငျသူတှကေ တောငျးဆိုနကွေပါတယျ။ ကရငျနီပွညျ တောငျသူလယျသမားသမ်မဂမှ ကိုဒီးဒီက “အထူးသဖွငျ့ ခုခြိနျမှာ စိုကျပြိုးရာသီဖွဈနတေယျပေါ့နော ကိုယျ့စားဝတျနရေေး အတှကျလုံးပနျးနရေတဲ့အခြိနျမှာ ဒီလိုစိတျဒုက်ခ ကိုယျဒုက်ခရောကျစတေဲ့အရာကို ထပျလုပျတယျဆိုတာက လုံးဝမတရားဘူး လို့ပဲ ကတြျောပွောခငျြတာပေါ့နော။ တောငျသူတှဖေကျကတော့ ခံရမယျ့ဖကျကပဲပေါ့နော ဆိုတော့ အစိုးရကော တပျမတျော ဖကျကကောပေါ့နော ဒါတှကေို ပွနျလညျပွီးတော့မှ စဉျးစားစခေငျြပါတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။
အမွောကျတပျ ၃၅၆ နဲ့ ခွမွေနျတပျရငျး ၂၅၀ တို့မှ လှိုငျကျောမွို့နယျ ဒေါမူကလား၊ မွနေီကုနျး၊ သုံးမိုငျပကွဲမှ တောငျသူ (၁၉) ဦးနှငျ့ ကရငျနီပွညျတောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့ဝငျ (၃) ဦးကို တရားစှဲဆိုထားတဲ့အမှုကို ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလအတှငျးက လှိုငျကျောမွို့နယျတရားရုံးက ဒဏျငှနေဲ့ ထောငျဒဏျအသီးသီး ခမြှတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လှိုငျကျောမွို့နယျ တရားရုံးကနေ တောငျသူတှကေို ပဈဒဏျခမြှတျတာနညျးလို့ဆိုပွီး စဈတပျကမကနြေပျတဲ့အတှကျ ပွညျနယျတရားလှတျတျောရုံးကို ပွငျဆငျ ခကျြတကျပွီး ပဈဒဏျထပျတိုးပေးဖို့ ဇှနျလ ၂၅ ရကျနမှေ့ာ ပွညျနယျ တရားလှတျတျောရုံးကနေ တောငျသူတှကေို လကျမှတျ လာရောကျရေးထိုးဖို့ ချေါခဲ့ကွပါတယျ။
တရားစှဲဆိုထားတဲ့ အမှုတှထေဲက အမွငျ့ဆုံးထောငျဒဏျ ၇ နှဈခမြှတျလို့ရတဲ့ နိုငျငံတျောပိုငျပစ်စညျးဖကျြစီးမှု ပုဒျမ၆(၁) အမှု အတှကျ ထောငျဒဏျ ၆ လ သို့မဟုတျ ဒဏျငှေ ၂ သောငျး ခမြှတျခဲ့ပွီး၊ ပုဒျမ ၄၄၇ အတှကျ ဒဏျငှေ ၂ သောငျး သို့မဟုတျ ထောငျဒဏျ ၁၅ ရကျနဲ့ ကနျြပုဒျမ အမှုအတှကျ ငှဒေဏျကပျြ ၂ သောငျး ပေးဆောငျဖို့ ခမြှတျခဲ့ပွီး တောငျသူတှကေ ဒဏျငှေ ပေးဆောငျခဲ့ပွီး အမှုပွီးမွောကျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ တရားစှဲဆိုခံရတဲ့ ၂၂ ဦးထဲမှာ တောငျသူအရေးလိုကျပါ ဆောငျရှကျခဲ့ ပွီး တရားစှဲဆိုခံရတဲ့ထဲပါတဲ့ ကရငျနီပွညျတောငျသူလယျသမားသမ်မဂမှ ဘှဲမှူးက ပွငျဆငျမှုတကျတာ တရားမြှတမှုမရှိဘဲ မတရားဖိနှိပျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အမွောကျတပျ ၃၅၆ နဲ့ ခွမွေနျတပျရငျး ၂၅၀ တို့မှ အရာရှိတှကေ အဲဒီ အမှုကိုပွငျဆငျမှု တကျရောကျတာနဲ့ပတျသကျပွီး အရှပေို့ငျးတိုငျးစဈဌာနခြုပျမှ ဗိုလျမှူးကွီးခငျမောငျဝငျးကို ကန်တာရဝတီတိုငျး(မျ)မှ ဆကျသှယျ မေးမွနျရာမှာတော့ ၎င်းငျးအနနေဲ့မသိကွောငျး လှိုငျကျောမှတာဝနျရှိသူတှနေဲ့ ခြိတျဆကျပွီးမေးရနျသာ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ကယားပွညျနယျဒသေကှပျကဲရေးစဈဌာနခြုပျ (ဒကစ) ကို ဖုနျးနဲ့ဆကျသှယျမေးမွနျးပွနျသျောလညျး သကျဆိုငျရာ တပျရငျး နှငျ့သာဆိုငျတယျလို့ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။ သိမျးယူမွထေဲက ပိုနတေဲ့မွပေျေါမှာ ဒသေခံတှေ နှဈစဉျထှနျယကျစိုကျပြိုးရာမှ ပွီးခဲ့ တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာတော့ တောငျယာမွပေျေါမှာ တပျကဆကျပွီးလုပျကိုငျခှငျ့မပေးနိုငျတော့ဘူးဆိုပွီး သိမျးဆညျးထားတဲ့ တောငျယာမွပေျေါမှာ အမှတျအသားမှတျတိုငျစိုကျကာ ခွံစညျးရိုးတံတိုငျးပွုလုပျလာခဲ့အတှကျ ဒသေခံတောငျသူတှနေဲ့ ပဋိပက်ခဖွဈခဲ့ကွပွီး တပျမှတောငျသူအရေးလိုကျပါဆောငျရှကျသူ သုံးဦးအပါအဝငျ တောငျသူ ၁၉ ဦး ကို တရားစှဲဆိုခဲ့ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73864
နိုဝငျဘာလတှငျ ကငျြးပမညျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျသူ့ဆန်ဒနှငျ့ ရှေးကောကျပှဲရလဒျ တထပျတညျးဖွဈ စရေနျ အာမခံကွောငျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ (UEC) ဥက်ကဋ်ဌ ဦးလှသိနျးက ပွောကွားသညျ။ ရနျကုနျမွို့ ၌ ဇှနျလ ၂၇ ရကျတှငျ ကငျြးပသညျ့ UEC နှငျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြား တှဆေုံ့ပှဲတှငျ ကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဦးလှသိနျးက နိုငျငံရေးပါတီ မြားအား ပွောကွားလိုကျခွငျးလညျးဖွဈသညျ။
“၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲတုနျးက ပွညျသူ့ဆန်ဒနဲ့ ရှေးကောကျပှဲရလဒျ တထပျ တညျးကမြကြ ဆရာတို့သိပွီးသား။ ကနြျောမပွောဘူး။ ဒီနှဈမှာ ကနြျောကိုယျတိုငျ အာမခံတယျ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဟာ ပွညျသူ့တှရေဲ့တကယျ့ဆန်ဒနဲ့ ကနြျောတို့မှတျကြောကျတငျတာနဲ့တကယျ့ကိုတထပျတညျးကရြမယျ”ဟု၎င်းငျးကပွောဆိုသညျ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲကို လှတျလပျခွငျး၊ တရားမြှတခွငျး၊ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိခွငျး၊ အမြားယုံကွညျမှုရှိစခွေငျး၊ ပွညျသူ့ ဆန်ဒ နှငျ့ ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျတထပျတညျး ကစြခွေငျးဆိုသညျ့ စံနှုနျး ၅ ခကျြနှငျ့အညီ ကငျြးပသှားမညျဟုလညျး ၎င်းငျးက ပွောဆို သညျ။ ဆကျလကျ၍ ဦးလှသိနျးက “အမှားအယှငျးမပါစရေဘူး။ ဘကျလိုကျမှု မပါစရေဘူး။ ကနြျောတို့ ဒီစံ ၅ ခကျြနဲ့ ကိုကျညီအောငျလုပျမယျဆိုရငျ ဆရာတို့ ကနြျောတို့အပျေါမှာ ကနြေပျသငျ့ပါတယျ။ ကနြျောတို့ ဒီ ၅ ခကျြကို အာမခံပွီးလုပျ မှာပါ”ဟု ပွောကွားသညျ။ လကျရှိတှငျ နိုငျငံရေးပါတီပေါငျး ၉၇ ပါတီ ရှိနသေညျဖွဈရာ အဘယျကွောငျ့ ဤမြှအထိ နိုငျငံရေးပါတီမြား မြားပွားနရေသညျကို နိုငျငံရေးပါတီမြားက ပွနျလညျသုံးသပျသငျ့သညျဟုလညျး ၎င်းငျးက တိုကျတှနျးပွောဆို သညျ။ နိုငျငံရေး အယူအဆအမြိုးမြိုးဖွငျ့ ကှဲပွားစှာဆောငျရှကျနပေါက အဆငျပွမေညျ မဟုတျကွောငျး၊ ကျောမရှငျ၏ လုပျဆောငျမှုမြားသညျ ၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲ အကွိုကာလနှငျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲအကွိုကာလက လုပျဆောငျခဲ့သော ယခငျကျောမရှငျ၏ လုပျဆောငျမှုမြားထကျ နောကျကမြှုမရှိသေးကွောငျး ဦးလှသိနျးက ပွောဆိုခဲ့သညျ။
ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (USDP) ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒေါကျတာနန်ဒာလှမွငျ့ကမူ ကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ၏ အဖှငျ့ ပွောစကားသညျ အားရကနြေပျဖှယျမရှိကွောငျး ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။“ကျောမရှငျနဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှအေကွားမှာ ယုံကွညျမှုအားနညျးနတေဲ့အပျေါမှာ ယုံကွညျမှုကို ဘယျလိုတညျဆောကျပွီး ရှကေို့ Working Plan ဘယျလိုသှားမလဲ စဉျးစားနတောပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ကွားလိုကျရတာက ခငျဗြားတို့က ကြုပျကို မယုံဘူးပွောတယျ။ ကြုပျကို ယုံရမယျ။ ကြုပျက မှနျမှနျကနျကနျလုပျနတော။ ရှကေ့ျောမရှငျတုနျးက ဘယျလို မဟုတျတာတှလေုပျခဲ့တာ ဒါတှပွေောနတေယျ။ အမှနျတော့ ဒါတှမေလိုဘူးလေ”ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ နိုငျငံရေးကိစ်စဆောငျရှကျပါက အဝဖေနျခံရတတျပွီး ဝဖေနျခံရမှုကို လကျမခံဘဲ နိုငျငံရေးပါတီမြားအား အပွဈပွောနခွေငျးသညျ သဘာဝမကဟြုလညျး ဒေါကျတာနန်ဒာလှမွငျ့က မှတျခကျြပေးသညျ။
ရှေးကောကျပှဲ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသညျ့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ပွညျသူ့လှုပျရှားမှုအဖှဲ့ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ကိုစိုငျးရဲကြျောစှာမွငျ့ ကမူ လကျရှိရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျသညျ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို ကငျြးပပေးခဲ့သော ယခငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထကျ အရပျဘကျအဖှဲ့မြား၊ နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှု ပွုလုပျရာတှငျ နညျးပါး သညျကို တှရေ့ကွောငျးဆိုသညျ။ UEC ၏ ၂၀၂၀ ခုနှဈ မလေအတှငျး ထုတျပွနျထားသညျ့ စာရငျးမြားအရ တညျဆဲမှတျပုံ တငျထားသညျ့ ပါတီ ၉၇ ပါတီ ရှိပွီး ပွညျထောငျစု တဝနျးလုံးတှငျ စညျးရုံးမညျ့ နိုငျငံရေးပပါတီ ၇၉ ပါတီ၊ တိုငျးဒသေကွီး/ ပွညျနယျ တခုတညျးတှငျသာ စညျးရုံးမညျ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၁၈ ပါတီ၊ ယာယီရပျဆိုငျးထားသော နိုငျငံရေးပါတီ ၃ ပါတီ ရှိသညျ။ https://burma.irrawaddy.com /news/2020/06/27/225410.html
အစိုးရအခွခေံပညာရေး သတ်တမတနျး ပထဝီဘာသာရပျသငျရိုးညှနျးတမျးအသဈတှငျ ကခငျြမြိုးနှယျစုဝငျမြား၏ အမညျနာမ ကို မှားယှငျးဖျောပွထားမှုကို အမှားပွငျဆငျပေးရနျအတှကျ ကခငျြမြိုးနှယျစုဝငျအသီးသီးမှ စာပယေဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားက တောငျးဆိုသှားမညျဟု သိရသညျ။“ဒီပတျအတှငျး စာတငျသှားမှာဖွဈတယျ။ မြိုးနှယျစုဝငျအားလုံးပေါငျးပွီးတော့တငျမလား၊ ဒါမှမဟုတျ မြိုးနှယျစုဝငျတဈခုစီဘဲ တငျမလားဆိုတာတော့ အတိအကမြသိရသေးပါဘူး။” လျောဝျေါစာပယေဉျကြေးမူ ဗဟို ကျောမတီမှ ဦးဒေါငျဟောငျးက ပွောသညျ။
“ကနြျောတို့ သငျရိုးညှနျးတမျးရေးဆှဲတဲ့အဖှဲ့မှာတော့ ကခငျြ ၆ မြိုးနဲ့ ရှမျး ၅ မြိုးပါတယျ။ အဓိကတော့ တဈနိုငျငံလုံး သုံးမယျ့ ကြောငျးသငျခနျးစာ သငျရိုးညှနျးတမျးရေးဆှဲတော့ မပါဘူး။ ကနြျောတို့က ဒသေ သငျရိုးညှနျးတမျးရေးဆှဲရတာပါ။ ခု ဒီလို သငျရိုးညှနျးတမျးမှာ အမှားတှထေညျ့သှငျးရေးဆှဲတာနဲ့ ပတျသကျပွီး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမြာ အားလုံးကလညျး ကခငျြရိုးရာယဉျကြေးမူ ဗဟိုကိုဘဲပွေးမွငျကွတယျ။ မြိုးနှယျစုဝငျတိုငျးမှာစာပယေဉျကြေးမူဆိုပွီးတော့ သပျသပျစီ ခှဲထားတာ တော့ မဟုတျဘူး။ စာပနေဲ့ပတျသကျလာရငျ မြိုးနှယျစုဝငျအသီးသီး စာပယေဉျကြေးမူအဖှဲ့မှ လိုအပျသလို ယာယီကျောမတီ ဖှဲ့ပွီး ဖွရှေငျးကွတာဖွဈတယျ။ ခုလညျး အခွခေံပညာစာသငျကြောငျးမှာ သငျရိုးညှနျးတမျးရေးဆှဲဖို့ မြိုးနှယျစုဝငျမြား ကိုယျ စားတဈမြိုးနှယျက တဈဦးစီပါဝငျပွီး သငျရိုးညှနျတမျးရေးဆှဲတဲ့ထဲမှာပါဝငျရတာဖွဈတယျ။” ဟု လျောဝျေါစာပယေဉျ ကြေးမူ ဗဟိုကျောမတီမှ သိရသညျ။ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးတာ သုံးရနျတှကျ ကခငျြမြိုးနှယျစုဝငျမြား၏ အမညျနာမထညျ့သှငျး ရေးဆှဲ ထားသညျ့ သတ်တမတနျး သငျရိုးညှနျးတမျးတှကျမူ ၎င်းငျးတို့စာပအေဖှဲ့အား ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျမူ တဈစုံတဈရာမရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ကခငျြလူမြိုးမြား၏ ခေါငျးစဉျအောကျတှငျပါဝငျသော မြိုးနှယျစုအမညျမြား စာလုံးပေါငျးသတျပုံ မှားယှငျးမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ကခငျြလူမြိုးရိုးရာယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားနှငျ့ လာရောကျတိုငျပငျ အတညျပွုခကျြရယူခွငျးမရှိခဲ့သညျ့ အတှကျ ၎င်းငျးတို့တှငျ တာဝနျမရှိကွောငျး မွနျမာနိုငျငံကခငျြလူမြိုးမြားယဉျကြေးမှု ဗဟို (WHG) ကလညျး ဇှနျလ ၂၄ ရကျနေ့ တှငျ ကွငွောခကျြတဈစောငျကို ထုတျပွနျခဲ့သညျ။“သတ်တမတနျးရဲ့ ပထဝီဘာသာရပျရဲ့ ကခငျြလူမြိုးဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျ အောကျမှာ မြိုးနှယျ ၁၂ မြိုးနဲ့ဖျောပွထားတာတှပေ့ါတယျ။ စာလုံးသတျပုံမှားတယျ ရေးသားထားမှုတှေ အမညျနာမချေါဆိုမူ တှအေားလုံးမှားနတေယျ။ ဒါပမေယျ့ လူမူကှနျယကျတှမြောတော့ (WHG) မှာတာဝနျရှိတယျဆိုပွီး ပွောဆိုတာတှတှေရေ့ ပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး သငျရိုးညှနျတမျးဆှဲတဲ့ဟာတှအေားလုံးက ကနြျောတို့ (WHG) နဲ့ မသကျဆိုငျဘူးလို့ပွောခငျြပါ တယျ။” ဟု WHG ဥက်ကဌ အသဈဆရာကွီး ဦးလနူးက ပွောသညျ။
၁၉၅၅ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ ၇ ရကျနတှေ့ငျ ပွညျထောငျစု တရားရေးဝနျကွီးဌာနက ကခငျြလူမြိုးမြားဟူသညျ့ ခေါငျးစဉျ အောကျတှငျ ဂြိနျးဖေါ့(Jinghpaw)၊ အဇီး(Atsi)၊ လရှီ(Lashi)၊ မရူ(Maru)၊ ယောရငျ(Lisaw)၊ နုံ(ခနုံ-ရဝမျ) Nung (Hkanung-Rawang) စသညျ့ အမညျနာမအား တရားဝငျထုတျပွနျထားပွီးဖွဈသညျ။ သို့သျော၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈ Grade-7 သငျရိုးညှနျးတမျးတှငျ ကခငျြမြိုးနှယျစုမြားကို တဂုံ၊ ဒလောငျ၊ ဂေါရီ၊ ခခူး၊ ဒုရငျး၊ အကီး စသဖွငျ့ လှဲမှားစှာ ဖျောပွ ထားသညျ။
“ဒီသတ်တမတနျးသငျရိုးမှာ တိုငျးရငျးသာတှရေဲ့အကွောငျးအရာတှကေို ဖျောပွပေးတာ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့တညျရှိမူနဲ့ သူတို့ အကွောငျးအရာတှကေို ငယျငယျကတညျးကနေ ကြောငျးသူ/သားတှကေို သိစခေငျြလို့ ဖျောပွခငျြလို့ အဲရညျရှယျခကျြနဲ့ ကောငျးတဲ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ လုပျတာဖွဈတယျဆိုတာတော့ ကမြတို့လကျခံပါတယျ။ ဒီမှာရေးထားတဲ့အသုံးနူနျးကို ကွညျ့မယျ ဆိုရငျတော့ မှားယှငျးမူမြားကွီးတှရေ့ပါတယျ။ NLD အစိုးရလကျထကျတှငျ စတငျအကောငျထညျဖျော ဆောငျရှကျနပွေီဖွဈ သော တိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီးဌာနတှငျလညျး ယခုမှားယှငျးမှုကို အဓိကကူညီဆောငျရှကျပေးသငျ့ကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျ ပွောသညျ။ လကျရှိဝဖေနျမှုမြားပွားနသေော သတ်တမတနျး ပထဝီဘာသာရပျတှငျ ကခငျြလူမြိုးမြား၏ အချေါအဝျေါ မှားယှငျး စှာဖျောပွ ထားမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး ပညာရေးဝနျကွီးဌာနမှ တဈစုံတဈရာ တုံ့ပွနျလာခွငျးမရှိပါက မွနျမာနိုငျငံ ကခငျြလူမြိုးမြား ရိုးရာ ယဉျကြေးမူဗဟို (WHG) မှလညျး အမှားပွငျဆငျပေးရနျ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနသို့ စာဆကျတငျ သှားမညျဖွဈကွောငျး (WHG) ဥပဒအေကွံပေးတဈဦးဖွဈသညျ့ တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဒျေါဒှဲဘူက ပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews .com/2020/06/26/%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1
ပလကျဝမွို့နယျတှငျ တိုကျပှဲအခွနေကွေောငျ့ လမျးကွောငျး ပိတျဆို့ခဲ့သော နရောအခြို့ ဇှနျလ ၂၁ ရကျနမှေ့စတငျပွီး ပွနျ လညျပှငျ့လာပွီဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “ပလကျဝလမျးကွောငျး သှားလို့ရနပွေီ ဒါပမေဲ့ ကားလမျးကို အပွညျ့ဝတော့ သုံးလို့မရသေးဘူး တံတားက ပွီးနပေမေယျ့တံတားကို သုံးလို့မရသေးဘူး ရလေမျးနဲ့ ကုနျးလမျးမြှပွီး သုံးလို့ရတဲ့ အနထေားမှာရှိတယျ ရိက်ခာ ပစ်စညျးတှလေညျး ဒီရကျပိုငျးအတှငျး ပို့နိုငျနတေဲ့ အနထေားမှာရှိတယျ”ဟုပွောသညျ။ ပလကျဝမွို့မှ အခွားမွို့မြားကို ဆကျ သှယျသော လမျးမြားဖှငျ့ပွီဖွဈသျောလညျး အသှားလာ လုံခွုံမှုပိုငျးတှငျ စိုးရိမျရသော အနထေားတှငျသာ ရှိသေးကွောငျး ဒသေခံမြားကပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့နေ ဒသေခံတဈဦးက “ပလကျဝနဲ့ ကြောကျတျော လမျးကတော့ မဖှငျ့သေးဘူး ဆမီးနဲ့ ပလကျဝ လမျးကတော့ ကားနဲ့ သှားလာလို့ရပွီ ဆိုငျကယျနဲ့တော့ ခှငျ့မပွုသေးဘူး ခြောခြောမောမောနဲ့ သှားလို့ရတဲ့ အနထေားတော့ မဟုတျသေး ပမေယျ့အခွနေကွေညျ့ပွီး သှားလာလို့တော့ ရနပွေီ”ဟုပွောသညျ။ လကျရှိ ပလကျဝမွို့ပျေါတှငျ စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျ နှဈထောငျဝနျးကငျြ ရှိနပွေီး လမျးပမျးဆကျသှယျရေး အခကျခဲမြားကွောငျ့ စားနပျရိက်ခာပွတျလပျမှုမြားကိုလညျး ကွုံတှရေ့ ကွောငျး သိရသညျ။ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးမြား ကောငျးမှနျလာပါက တိုကျပှဲကွောငျ့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသော အိမျမြား ကြောငျးမြားကို ပွညျနယျ အစိုးရအနဖွေငျ့ ပွနျလညျထူထောငျရေးလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျရပိုအဆငျပွမေညျဟု ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရထံမှ သိရသညျ။ ပလကျဝမွို့ အနီးဝနျးကငျြရှိ AA အဖှဲ့တပျစှဲထားသညျ့တောငျကုနျးမြားကို တပျမတျောမှ မလေ ၃၁ မနကျပိုငျးတှငျ သိမျးပိုက နိုငျခဲ့ကွောငျး ကွညောထားသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73865
ခငျြးပွညျနယျတှငျ ရိဒျနယျစပျမှ အိန်ဒိယနိုငျငံမှပွနျလာသူ ၃၃ ဦး အနကျတီးတိနျမွို့ ဒိနျပီးကြေးရှာတှငျ Facility Quarantine ဝငျနသေူတဈဦး သဆေုံးခဲ့ပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံမှ ခငျြးပွညျနယျသို့ နောကျထပျ ဝငျရောကျမညျ့ သူ ၂၅ ဦးကိုလညျး ရိဒျနယျစပျမှ ထပျမံ ရောကျရှိလာမညျဟု ခငျြးပွညျနယျ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ ပွညျနယျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျ က ပွောကွားသညျ။
“အိန်ဒိယကပွနျလာပွီး Facility Quarantine ဝငျနတေဲ့သူတဈဦး သတေယျ ဆိုတာ မှနျပါတယျ။ သူ့ကို မနကေ့ပဲ ခကျြခငျြး မွှုပျလိုကျတယျ။ မမွှုပျခငျ Swab ယူလိုကျတယျ။ သူ့ကို နှာခေါငျး၊ အာခေါငျတို့ဖတျလညျး ယူလိုကျပွီး စဈဆေးဖို့အတှကျ ပို့လိုကျပွီလို့ သိရပါတယျ။ သူက အိန်ဒိယက ပွနျလာတာပါ။ ကြှနျတျောတို့က ၃၃ ယောကျ ပွနျလာမယျဆိုလို့ ပွညျထောငျစု ကို တငျပွတယျ။ ခှငျ့ပွုတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ ၁၆ ယောကျကို တီးတိနျမှာထားတယျ။ နောကျထပျ ဒုတိယလာတဲ့ ၁၇ ယောကျကို ဖလမျး မှာထားတယျ။ အဲဒီဟာက Quarantine ၂၁ ရကျထားတာပေါ့။ အဲဒီထဲကနေ ဖွဈတာပါ။ အခုတော့ ၂၅ ယောကျကို လကျခံဖို့ ပို့ထားသေးတယျ။ ရိချေါရျဒါမှာ လကျခံဖို့ ဒီတဈပတျအတှငျးတော့ ဖွဈမှာပါ။ အဲဒီ ၂၅ ယောကျ ပေါ့ နျော။ သူတို့ဘကျမှာ ပိတျမိနတော အမြားကွီးရှိတယျ။ သူတို့လညျးအခကျအခဲရှိတော့ပွနျလာခငျြတယျပွောပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က အခု Quarantine တဲ့သူ ( အိန်ဒိယက ပွနျလာသူ) တှကေို Swab ယူပွီး စဈဆေးဖို့ ပို့တယျ။ အဲဒီမှာ ရောဂါပိုးတှရေ့ငျ ကုသတဲ့ အပိုငျးလုပျမှာပေါ့။ ရောဂါပိုး မတှဘေူ့းဆိုရငျ ပွနျလှတျပါတယျ။ ပေါ့စတဈလူနာက တီးတိနျ မှာ တော့ ကနျြပါသေးတယျ” ဟု ဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါအမြိုးသားသညျ ဒိနျပီးကြေး ရှာတှငျ ဇှနျ ၁၀ ရကျက Facility Quarantine ဝငျရောကျပွီး ဇှနျ ၂၅ ရကျတှငျ ကိုယျပူ ခြိနျမွငျ့တကျလာသညျ့အတှကျ တီးတိနျမွို့ ပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျကာ ဇှနျ ၂၆ ရကျ နံနကျတှငျ သဆေုံးသှားခွငျးဖွဈ သညျဟု တီးတိနျမွို့ Covid-19 Emergency Committee Volunteer အဖှဲ့မှ ကိုမုနျနိုးက ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/ar
မှနျပွညျနယျ၊ ရေးမွို့ ရေး – ထားဝယျကားလမျးမှာ ဇှနျ ၂၈ ရကျနေ့ တညတညျး မျောတျောယာဉျတိုကျမှု ၃ နရော ဖွဈပှားခဲ့ ပွီး ထိခိုကျဒဏျရာရတဲ့သူတှေ ရှိတယျလို့ ယာဉျထိနျးရဲတှကေ ပွောပါတယျ။
ရေး-ထားဝယျသှားကားလမျး တနင်ျသာရီလမျးမကွီးရှိ တပ်ပလငျ နှဈဆူမီးပှိုငျ့နရောမှာ ယာဉျကွောလမျးပွ ဘလောကျတုံး မြား ကွှမှေပကျြစီးတဲ့အထိ အမညျမသိယာဉျတစီးက တိုကျပွီး မောငျးနှငျထှကျပွေးသှားကာ ယာဉျမောငျးကို စုံစမျးနတေယျလို့ ယာဉျထိနျးရဲတှကေ ပွောပါတယျ။ ရေး-ထားဝယျကား အဏ်ဏဝါတံတား ရခြေောငျးဘေးကိုလညျး လိုငျစငျမဲ့ယာဉျတစီး ထိုးကြ ပွီး ယာဉျမောငျးက တိမျးရှောငျသှားခဲ့တာကွောငျ့ လိုငျစငျမဲ့ယာဉျကို ရေးမွို့မရဲစခနျးမှာ သိမျးဆညျးထားပါတယျ။
ရနျကုနျ-မျောလမွိုငျ-ရေးပွေးဆှဲနတေဲ့ အောငျကြျောမိုး ခရီးသညျတငျ မှနျလုံယာဉျနဲ့ ကံကောငျးခွငျးရတနာထပျသားစကျရုံရဲ့ ယာဉျတို့ အဏ်ဏဝါ အဝေးပွေးယာဉျရပျနားစခနျး အနီးနားမှာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျတိုကျမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး ယာဉျနောကျလိုကျ ၁ ဦးနဲ့ အထပျသား စကျရုံ အဝယျတျောကားမှ လိုကျပါလာသူ ၂ ဦး ဒဏျရာ ရရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဆိုပါ ဖွဈစဉျတှနေဲ့အတူ ရေးမွို့မရဲစခနျးမှ ယာဉျမဆငျမခွငျမောငျးနှငျတဲ့ ယာဉျမောငျးတှကေို ဥပဒအေရ အရေးယူသှားမညျလို့ သိရပါတယျ။ http: //burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/fontconv.htm
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး မိုးနဲမွို့ကို ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုမွို့တျောအဖွဈ သတျမှတျပေးရနျနှငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျစရေနျ ရှမျးပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျထံသို့ ဒုတိယအကွိမျ ထပျမံတငျပွခဲ့သျောလညျး သတျမှတျနိုငျခွငျးမရှိသေးသဖွငျ့ နစေ့ဉျပကျြစီးယိုယှငျးမှုမြားဖွဈလာကွောငျး သိရသညျ။
“ဝနျကွီးခြုပျနဲ့တှတေ့ော့ ပွောပွသေးတယျ။ မိုးနဲမှာ တနျဖိုးရှိတာရှေးဟောငျးသမိုငျးဝငျပစ်စညျးတှပေဲ။ လောလော လတျ လတျ နမျ့ဟူးရထှေကျပေါ့နျော။ အခု ရထှေကျကလညျး ဒေါကျတာ ညီညီအောငျ ကတိကဝတျပေးထားတာ အခုထိ အကောငျအထညျမပျေါဘူး။ တဈနှဈလောကျရှိပွီလေ လှတျတျောထဲမှာ ဖွထေားတဲ့ကိစ်စလေ။ နမျ့ဟူးရထှေကျမှာ ဖယျရှား ရှငျးလငျး ထိနျးသိမျးပေးဖို့ ကိစ်စလညျး မလုပျနိုငျဘူး။ ဘာမှမလုပျသေးဘူး။ စီမံခကျြတှလေညျး ဆှဲထားတာတဈနှဈရှိနပွေီ။ မိုးနဲမွို့ ရှေးဟောငျးသမိုငျးဝငျမွို့ ပွနျလညျသတျမှတျပေးရေး၊ တဈမွို့လုံးကိုပေါ့။ အရငျကဟာပဲ ဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျက ပွနျဖွထေားတာ မဖွဈနိုငျသေးဘူးပေါ့။ ရှေးဟောငျးသုတသေန ကနေ နောကျတဈခေါကျ ထပျတငျခိုငျးတယျ။ ကြှနျတျောက ပွနျမတငျတော့ဘူး။ လှတျတျော လုပျထုံးလုပျနညျးအရ မေးခှနျးဆိုတာ တဈကွိမျပဲတငျရတယျ။
ဒါပမေယျ့ ရှေးဟောငျးသမိုငျးဝငျသတျမှတျဖို့ နရောကိုဆကျလုပျသှားဖို့ပေါ့။ ဒီလိုသတျမှတျမှပဲ မိုးနဲမွို့မှာရှိနတေဲ့ သမိုငျးဝငျ ပစ်စညျးတှကေို ပွုပွငျထိနျးသိမျးဖို့ ဘတျဂကျြထညျ့ လြာဖို့လုပျနိုငျမှာ။ ဒီတဈခေါကျ ဝနျကွီးခြုပျကို ဒါကွောငျ့ပွောတာ၊ ဝနျကွီးခြုပျနဲ့ ဒုသမ်မတ ထံတငျထားတဲ့စာက ခုခြိနျထိအကွောငျးမပွနျသေးဘူး။ နှုတျနဲ့ ထပျဆငျ့ပွောတာပေါ့ဗြာ။ ပကျြစီးမှုက နတေို့ငျးလိုလို ပကျြစီးမှုရှိလာတယျ။ သဘာဝဘေးကွောငျ့လညျး လူတှကွေောငျ့လညျး ပါတာပေါ့။ သမိုငျးဝငျတှကေ လုပျယူ လို့လညျး မရဘူးပေါ့ နျော” ဟု မိုးနဲမွို့နယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးစိုငျးမှနျးလိနျက ပွောကွားသညျ။
၂၀၁၆ ခုနှဈတှငျ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မှ မှတေျော၊ ဦးသီလကြောငျး၊ ဆငျတောငျ၊ တာခေါငျစသညျ့လေးနရောကို ရှေးဟောငျး ယဉျကြေးမှုထိနျးသိမျးရေး နရောမြားအဖွဈ သတျမှတျနိုငျခဲ့ပွီး၊ ယခုအခါ လှိုငျလနျြး ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးနှငျ့ နောကျထပျတဈနရောတို့ကို သတျမှတျနိုငျရနျ ကှငျးဆငျးစဈဆေးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိတှငျ မိုးနဲမွို့နယျ အတှငျးရှိ စတေီ ကွီးလေးဆူအပါအဝငျ မွို့တှငျးရှိ စတေီငယျမြားကိုသာ ရှာဖှထေိနျးသိမျးနိုငျသေးပွီး မွို့ ပွငျနရောမြားတှငျ ပကျြစီးပြောကျကှယျသှားသော စတေီတျောမြားစှာရှိခဲ့ကွောငျး မိုးနဲမွို့ ဝိဇ်ဇာရိယ ဘုနျးတျောကွီးသငျပညာရေးကြောငျး မှ ဦးဆောငျဆရာတျော သဒ်ဓမ်မဇောတိကဓဇ ဘှဲ့တျောရ ဆရာတျော ဘဒ်ဒန မာဃိန်ဒထံမှသိ ရသညျ။ https://news-eleven.c om/article/180474
၁၉။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာကငျြ့ဝတျ Code of Conduct တှငျ ပွညျခိုငျဖွိုးအပါအဝငျ နိုငျငံရေးပါတီအခြို့လကျမှတျ မထိုး
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ နိုငျငံရေးပါတီနှငျ့ ကိုယျစားလှယျမြားဆိုငျရာကငျြ့ဝတျ Code of Conduct ၌ မဲဆှယျစညျးရုံးရာတှငျ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရုပျပုံ အသုံးမပွုရနျဆိုသညျ့အခကျြကို သဘောတူညီ ခကျြမရ၍ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီအပါအဝငျ နိုငျငံရေးပါတီအခြို့လကျမှတျမထိုးခဲ့ကွောငျး ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီ USDP ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိ သူ ဒေါကျတာ နန်ဒာလှမွငျ့က ပွောသညျ။
အဆိုပါ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာဆိုငျရာကငျြ့ဝတျ လကျမှတျရေးထိုးပှဲကို ရနျကုနျမွို့ရှိ Melia ဟိုတယျ၌ ဇှနျ ၂၆ ရကျက ကငျြးပ ခဲ့ရာ နိုငျငံရေးပါတီ ၉၇ ရှိသညျ့အနကျ ၈၃ ပါတီတကျရောကျကာ ၆၄ ပါတီ သဘောတူ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။ “အမြိုးသားခေါငျးဆောငျရဲ့ပုံကို ဘယျနိုငျငံရေးပါတီတှမှေ ရှေးကောကျပှဲတှမှော အသုံးမပွုဖို့ဆိုပွီးတော့မှ Code of Conduct မှာ ထညျ့ပေးဖို့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှာ နိုငျငံရေးပါတီတှေ တောငျးဆိုထားတာရှိတယျ ဒါပမေဲ့ အဲနကေ့ COC လကျမှတျရေးထိုးပှဲမှာ ဝတေဲ့အခါကတြော့ အဲအခကျြမပါလာဘူး နိုငျငံရေးပါတီအမြားစု တောငျးဆိုထားတဲ့ အခကျြမပါ လာဘူး အဲဒီအတှကျ လကျမှတျ မရေးထိုးဘူးပေါ့ဗြာ” ဟု ဒေါကျတာ နန်ဒာလှမွငျ့က ဆိုသညျ။
သို့ရာတှငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရုပျပုံကိစ်စကို မိမိတို့ MUP ပါတီအနဖွေငျ့ မသိရှိထားကွောငျး၊ ကငျြ့ဝတျရေးဆှဲသညျ့ အဖှဲ့ ကလညျး မိမိတို့သိရှိအောငျ မပွောပွနိုငျခဲ့ကွောငျး မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျ နိုငျရဲဇျောက ပွော သညျ။ နိုငျရဲဇျောက “ဒီဟာအပျေါမှာ ကြှနျတျောတို့ပါတီက မသိထားခဲ့ဘူး၊ ရေးဆှဲတဲ့အဖှဲ့ကလညျး ပါတီကို မပွောပွနိုငျခဲ့ ဘူး၊ ဒီပွဿနာတှေ မသိထားခဲ့တာအခါ ကြှနျတျောတို့ ပွနျကွားလိုကျတဲ့အခါမှာ ပွငျဆငျစရာမရှိဘူးလို့ဘဲ ပွနျကွားထား တာ၊ အဲဒီအခြိနျ အဲနကေ့မြှ သိပွီးတော့မထိုးပါဘူးဆိုပွီးတော့လုပျနရေငျ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ကလေး ကလားဆနျတယျလို့ ယူဆတယျလေ”ဟု ပွောသညျ။ ယငျးကဲ့သို့ တကျရောကျလာသညျ့ပါတီအမြားစု သဘောတူ လကျမှတျရေးထိုးကွရာတှငျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရကျတဈပါတီ SNDP လညျး ပါဝငျသညျဟု သိရသညျ။
အဆိုပါ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာကငျြ့ဝတျ Code of Conduct သညျ ဥပဒအေရ ခြုပျနှောငျထားခွငျးမဟုတျသညျ့အတှကျ မလိုကျနာသညျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ လူပုဂ်ဂိုလျမြားကို အရေးယူနိုငျခွငျးမရှိသျောလညျး ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဂုဏျသိက်ခာရှိရှိ ယှဉျပွိုငျနိုငျရေးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈလိမျ့မညျဟု နိုငျငံရေးပါတီမြားက လကျခံထားသညျ။ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ ဆိုငျရာ ကငျြ့ဝတျစညျးမဉျြးမြားကို လကျရှိ နိုငျငံရေး ၊ဥပဒေ၊ လူမူရေးအခငျးအကငျြးနှငျ့ လိုကျလြောညီစရေနျ ပွနျလညျ ပွငျဆငျထားပွီး လှနျခဲ့သညျ့ ဧပွီလကတညျးက နိုငျငံရေးပါတီအသီးသီးထံ အီးမေးလျနှငျ့ စာတိုကျမြားမှ တဆငျ့ပေးပို့၍ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ယငျးစာအုပျတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/06/28 /%e1%81%82%e1%81 %80%e1%81%82%e1%81%80
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖားအံမွို့နယျရှိ ဇှဲကပငျတောငျပျေါတှငျ ပြောကျဆုံးသှားသညျ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသူတဈဦးကို ၂ နှဈရကျ နီးပါးအကွာတှငျ တောငျစောငျး၏ ခြောကျတဈနရော၌ သဆေုံးလကျြ ပွနျလညျတှရှေိ့သညျဟုသိရသညျ။ အဆိုပါကြောငျးသူ ၏ ဆိုငျကယျသော့ပွနျတှရှေိ့သညျ့ နရောသဲလှနျစမှတဈဆငျ့အောကျဆငျး၍ ရှာဖှကော မောငျးသူ မဲ့ယာဉျ(ဒရုနျး) အကူ အညီနှငျ့ ယနမေ့နကျ ၁၀ နာရီဝနျးကငျြခနျ့ အမွငျ့ပေ ၂ ထောငျကြျောရှိသညျ့ ခြောကျတဈနရောတှငျ သဆေုံးလကျြရှိသညျ့ ရုပျအလောငျး (dead body) ကို ပွနျလညျရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တာဝနျခံ ဖားအံခရိုငျ မီးသတျဦးစီးရုံး လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူး ဦးသနျ့စငျဝငျးက “တောငျပျေါက နေ ပွနျအဆငျး ခနျ့မှနျးနာရီဝကျလောကျ ဆငျးရတဲ့နရောမှာ အစှနျအထှကျ View Point လို နရောတဈခုရှိတယျ။ အဲဒီနရော က တျောတျောသှားမှရောကျတာ။ ကွားမှာ ခွုံတဈခွုံနဲ့ကှယျသေးတယျ။ ခွုံကိုပတျသှားရတယျ။ မရောကျဖူးတဲ့ လူဆိုရငျ အဲဒီ နရောကိုမသိဘူး။ အဲဒီပျေါကနေ ပွုတျကရြငျ အောကျပေ ၂၀ လောကျမှာ ပွနျ့တဈခုရှိတယျ။ အဲဒီပွနျ့ကနတေဈဆငျ့မှ အောကျကိုထပျပွီး ပွုတျကတြဲ့သဘောဖွဈတယျ။ ဒီအပျေါမှာတော့ စဉျးစားတှေး တောစရာတှေ အမြားကွီးရှိတယျ”ဟု ပွနျလညျတှရှေိ့သညျ့အခွအေနနှေငျ့ ပတျသကျ၍ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါတက်ကသိုလျကြောငျးသူသညျ ဇှနျလ ၂၅ရကျနေ့၊ မှနျးလှဲ ၁နာရီကြျောတှငျ ဇှဲကပငျတောငျပျေါသို့ တဈဦးတညျး တကျ ရောကျခဲ့သလို ထိုနေ့ ညနေ ၅ နာရီကြျောအခြိနျခနျ့တှငျ တောငျပျေါရှိ ဆရာတျောတဈပါးက ရငျပွငျတျော၌ သူမကို တှရှေိ့ခဲ့ သေးသညျဟု သိရသညျ။ သူမ၏ ဆိုငျကယျသညျ တောငျခွတှေငျကနျြရှိခဲ့သလို ဖိနပျကိုလညျး အထကျရတေံခှနျ အနားရှိ တောငျတကျလမျး တဈနရောတှငျ ပွနျလညျတှရှေိ့သညျ့အပွငျ ဆိုငျကယျသော့ကိုလညျး အမွငျ့ပေ ၂ ထောငျခနျ့ရှိသညျ့ နရောတှငျ တှရှေိ့ခဲ့သူမြားက တောငျခွေ၌ ပွနျလညျပေးအပျခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ သဆေုံးသှားခဲ့သညျ့ ကြောငျးသူလေး သညျ မွဝတီမွို့မှဖွဈပွီး ဖားအံမွို့ရှိ အဆောငျတဈခုတှငျ နထေိုငျရငျး သငျတနျးတဈခု တကျရောကျနသေူဖွဈသညျဟု ဖားအံတက်ကသိုလျမှ ကြောငျးဆရာတဈဦး၏ ပွောဆိုခကျြအရ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%87 %e1%80%bc%e1% 80%b2%e1%80%80%e1%80%95%e1%
၂၁။ လူသားခွငျးစာနာထောကျထားမှုနှငျ့လုံခွုံရေးမြားအတှကျ အလှနျအမငျးစိုးရိမျကွောငျး သံရုံးအဖှဲ့အစညျးမြားထုတျပွနျ
ရခိုငျပွညျနယျ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊ ကြောကျတနျးကြေးရှာအုပျစုတလြှောကျရှိ မွနျမာတပျမတျော၏ နယျမွရှေငျးလငျးရေး လုပျငနျးမြားနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျးရှိ ပိုမိုဆိုးရှားလာသညျ့ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားမှုနှငျ့
လုံခွုံရေးဆိုငျရာ အခွအေနမြေားနှငျ့ပတျသကျသညျ့ အစီရငျခံစာမြားအပျေါ အလှနျအမငျးစိုးရိမျပူပနျကွောငျး သံရုံးအဖှဲ့အ စညျးမြားက ကွညောခကျြထုတျခဲ့ကွသညျ။ ကြောကျတနျးကြေးရှာအုပျစုတလြှောကျ ရှာသားမြား ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနေ ရခွငျးသညျ ရခိုငျပွညျနယျ၏ နရေပျစှနျ့ခှာနထေိုငျသူဦးရကေို သိသာထငျရှားစှာ ပိုမိုမြားပွားလာစပေါလိမျ့မညျဟု မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးရှိ ဩစတွေးလြ၊ ကနဒေါ၊ ယူကနှေငျ့ အမရေိကနျသံရုံးမြား စုပေါငျးထုတျပွနျသညျ့ ကွညောခကျြ တှငျပါဝငျသညျ။
အထူးသဖွငျ့ ကိုဗဈ- ၁၉ နှငျ့မုတျသုနျရာသီနဲ့ ပတျသကျပွီး ရပျရှာအဖှဲ့အစညျးမြားက တုံ့ပွနျဆောငျရှကျသကဲ့သို့ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားမှုဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြားကိုလညျး သငျ့တျောသညျ့ အကူအညီပေးနိုငျရေးအတှကျ အတားအဆီးမရှိ သှား ရောကျနိုငျရေးကိုလညျး ခှငျ့ပွုပေးစလေိုတဲ့သဘောထား သံရုံးအဖှဲ့အစညျးမြားတှငျရှိနကွေသညျ။ ပစ်စညျးဥစ်စာပိုငျဆိုငျမှုကို မီးရှို့ခွငျး၊ လကျနကျကွီးပဈခတျခွငျး၊ ရှာသားမြားအားဖမျးဆီးခွငျးနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ အစီရငျခံစာမြားရှိနသေောကွောငျ့ မိမိ နရေပျကိုစှနျ့ခှာပွီး အခွားနရောတှငျ ခိုလှုံရနျမဖွဈနိုငျသညျ့ ပွညျသူမြားကို ယငျးတို့နထေိုငျရာဒသေမြားတှငျသာ နထေိုငျ ခှငျ့ပွုရနျ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားအားလုံးကို တိုကျတှနျးထားသညျ။
အရပျသားမြားသညျ ရခိုငျနှငျ့ခငျြးပွညျနယျတို့တှငျဖွဈပှားနသေော ပဋိပက်ခဒဏျမြားကို ဆိုးရှားစှာ ဆကျလကျခံစားနကွေရ သောကွောငျ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားအကွား တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုသညျ အရေးတကွီးလို အပျနပေါသညျ။ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာ တရားဥပဒအေတိုငျးလိုကျနာရနျနှငျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာတရားရုံး (ICJ) ၏ ကွားဖွတျစီမံဆောငျရှကျခကျြမြားကို အကောငျအထညျဖျောလုပျဆောငျရနျ မွနျမာတပျမတျောတှငျ တာဝနျရှိသညျဟုလညျး ယငျးကွညောခကျြတှငျထညျ့သှငျး ဖျောပွထားသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/71062
မှနျပွညျနယျမှာ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ ဖွဈပှားသူ ၃၀ဝ နီးပါးအထိ ရှိလာတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါနညျးတူ မပေါ့ဆကွဖို့ မှနျပွညျနယျ ကုသရေးနဲ့ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနက ထပျမံသတိပေးလိုကျပါတယျ။
သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါဟာ ရကွေညျရသေနျ့မှာ ပေါကျဖှားတဲ့ ခွငျကြား ကိုကျခံရတာကတဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ ရောဂါတခု ဖွဈပါတယျ။ မှနျပွညျနယျမှာတော့ အခုနှဈ ဇှနျလ အတှငျး သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ ဖွဈပှားသူ ၃၀ဝ နီးပါးအထိ ရှိလာပွီး အဲဒီထဲမှာ ကလေးငယျ ၂ ဦး သဆေုံးထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သှေးလှနျးတုပျကှေး ရောဂါကို ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ နညျးတူ မပေါ့ကွဖို့ မှနျပွညျနယျ ကုသရေးနဲ့ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနက ပွညျနယျဦးစီးမှူး ဒေါကျတာထှနျးအောငျကွညျ က သတိပေး ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ ပွညျနယျအတှငျး သှေးလှနျတုပျကှေး ဖွဈပှားမှုအရ မျောလမွိုငျမွို့နယျနဲ့ ပေါငျမွို့နယျဟာ ရောဂါ ဖွဈပှားမှုရဲ့ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးနီးပါး ဖွဈပှားနတောပါ။ သဆေုံးမှုအနနေဲ့ ပေါငျမွို့နယျ တခုတညျးမှာပဲ ကလေးငယျ ၂ ဦး အထိ သဆေုံးထားပါတယျ။
သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါကို ကွိုတငျကာကှယျရာမှာ ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ဖုံး၊ သှနျး၊ လဲ၊ စဈ ပုံမှနျ ဆောငျရှကျပေးကွဖို့ မှနျပွညျနယျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနက တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါနဲ့ ပတျသကျပွီး ကလေး ငယျတှေ ဖြားတာ၊ အနျတာအပွငျ မှိနျးတဲ့ လက်ခဏာတှေ ဖွဈပျေါလာရငျ အမွနျးဆုံး ကနျြးမာရေးဌာနကို လာရောကျ ပွသ ပေးကွဖို့လညျး တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ မှနျပွညျနယျမှာတော့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ ဖွဈပှားသူ ၁၁၆၂ ဦး အထိ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး ကလေးသူ ၄ ဦး သဆေုံးထားတာပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/396625
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့က မွို့မရဲစခနျးအခြုပျကိုဖောကျကာ အခြုပျသား ၃ ဦးထှကျပွေးမှု ဇှနျလ ၂၇ ရကျနေ့ နံနကျ ၄ နာရီကြျောအခြိနျက ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးနခြေိနျ ၎င်းငျးအခြုပျသား (၃)ဦးသညျ အခြုပျခနျးရှိ ရခြေိုးခနျးနှငျ့ အိမျသာခနျးရှိ ခေါငျမိုးကို ဖောကျပွီး ထှကျပွေးသှားခွငျးဖွဈကွောငျး ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခငျစောဝကေ DMG သို့ပွော သညျ။“သူတို့ကတော့ ရကျအကွာကွီးကတညျးက ကွိုတငျလုပျထားပုံရတယျ။ ခေါငျမိုးကို ဖောကျပွီးပွေးသှားတာ ဆိုတော့ လုံခွုံရေးက အပွငျက၊ အတှငျးကနရှေိနတေဲ့ကွားထဲက ထှကျပွေးသှားတာ”ဟု ၎င်းငျးကဆိုသညျ။
ထိုသို့ထှကျပွေးသှားသညျ့ အခြုပျသားမြားမှာ ခငျြးပွညျနယျ မတူပီမွို့နယျဘကျမှ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒဖွေငျ့ တရားစှဲဆိုခံထားရသူ တဈဦးနှငျ့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျအတှငျးမှ ဖုနျးခိုးမှုဖွငျ့ အခြုပျကနြသေူ နှဈဦးတို့ဖွဈကွောငျး ဒျေါခငျစောဝေ က ရှငျးပွသညျ။ ရသတေ့ောငျမွို့မရဲစခနျးမှ တပျကွပျကွီးလှရှကေ အခြုပျသားမြားထှကျပွေးသှား သညျဆို သောဖွဈစဉျမှာ မှနျကနျသျောလညျး အသေးစိတျကို ပွောခှငျ့မရှိဟုဆိုသညျ။ မွို့မရဲစခနျးသညျ ရသတေ့ောငျမွို့၊ ခြောငျးဝ ရပျကှကျတှငျရှိကာ မွို့အဝငျခြောငျးနှငျ့ နီးကပျစှာရှိနသေညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73876
ကရငျလူမြိုးတို့၏ အမြိုးသားဒွပျမဲ့ယဉျကြေးမှု အမှအေနှဈ တဈခုဖွဈသညျ့ ရိုးရာဒုံးအကကို ကုလသမဂ်ဂ၏ ပညာရေး၊ သိပ်ပံနှငျ့ ယဉျကြေးမှုဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျး (UNESCO) မှ အသိအမှတျပွုနိုငျရနျအတှကျ စာရငျးတငျသှငျးသှားမညျဟု သိရသညျ။ UNESCO သို့ တငျသှငျးရနျ ကရငျပွညျနယျမှ အဆိုပွုထားသညျ့ ကရငျကောကျသဈစားပှဲနှငျ့ ဒုံးအက ၂ ခုထဲမှ ဒုံးအက ကိုသာ ကနဦးတငျသှငျးသှားရနျ ယနေ့(ဇှနျ ၂၆ ရကျ)၊ ဖားအံမွို့၊ ဇှဲကပငျခနျးမ၌ ပွုလုပျသော အစညျးအဝေးအပွီး ဆုံးဖွတျ လိုကျကွခွငျးဖွဈသညျ။
ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဦးဘိုဘိုဝမေောငျက “ဒွပျမဲ့ယဉျကြေးမှု အမှအေနှဈ UNESCO မှာ register လုပျဖို့ ပွညျနယျ နဲ့တိုငျးအသီးသီးက ခေါငျးစဉျတှကေို ရှေးခယျြပွီးတော့ ပွညျထောငျစုမှာတငျပွီး ဆှေးနှေးမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ ကရငျပွညျနယျအနနေဲ့ ဒုံးအကကို တငျသှငျးဖို့ ဒီကနအေ့စညျးအဝေးမှာ အဖွတေဈခုထှကျလာပါတယျ။” ဟု ပွောသညျ။ ထို့အပွငျ ကရငျဒုံးအကသညျ နိုငျငံတကာတှငျလညျး လူသိမြားသလို အမြားနှငျ့မတူ Unique (ထူးခွား)ပွီး ကရငျအမြိုး သားမြား၏ စိတျဓာတျ၊ ဒသေနှငျ့ပတျဝနျးကငျြမြားကို ထငျစပျစသေောကွောငျ့ အာရုံစိုကျကာ တငျ သှငျးသှားမညျဖွဈ ကွောငျး ဦးဘိုဘိုဝမေောငျက ဆကျပွောသညျ။ ဒုံးအကဆိုငျရာ အဓိပ်ပါယျ၊ ကကွိုးကကှကျ၊ ဝတျစားဆငျယငျမှု၊ ဂီတတူရိယာ ပစ်စညျး၊ အငှအေ့သကျမြား အားလုံးကို အသေးစိတျ စနဈတကလြလေ့ာ မှတျတမျးတငျ သုတသေနလုပျနိုငျရနျ working committee (အလုပျအဖှဲ့) ကို ယနေ့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျပွုလုပျသော ပဏာမအစညျးအဝေးတှငျ စတငျ ဖှဲ့စညျးထားခဲ့ပွီ လညျးဖွဈသညျ။
Working committee တှငျ ပါဝငျသူ ဒုံးအကပညာရှငျ စောမွငျ့သူက “ဒုံးနဲ့ပတျသတျပွီး ထဲထဲဝငျဝငျ လှုပျရှား လာခဲ့ ပမေယျ့ ဒီလို အခှငျ့အရေးမြိုးတဈခါမှ မကွုံ၊ မကွားခဲ့ဖူးဘူး။ အခုမှ ကနြျောတို့ရဲ့ ကရငျ ရိုးရာဒုံးအကကို ကမ်ဘာ့ ရှေးဟောငျး အမှေ အနှဈတဈခုအဖွဈ အသိအမှတျပွုခဲ့မယျဆိုရငျတော့ ကရငျအတှကျ သမိုငျးတဈခုကနျြ ခဲ့မယျ။ အတိုငျးမသိဝမျးသာမိမယျ။” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
ပွညျနယျ ရှေးဟောငျး၊ သုတသေန ပွတိုကျမှ ဦးဆောငျပွုလုပျသော အစညျးအဝေးသို့ ကရငျ ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈ မြားကို ထိနျးသိမျးနသေော ဆရာတျော သံဃာတျောမြား၊ ပွညျနယျ စာပေ/ယဉျကြေးမှု အဖှဲ့ အစညျးနှငျ့ အစိုးရဌာန ဆိုငျရာမြားမှ တာဝနျရှိသူမြား၊ ဒုံးအကပညာရှငျ၊ ဒုံးဆရာမြား၊ စိတျပါဝငျစားသူမြား စုစုပေါငျး ၄၀ ဦးကြျော တကျရာကျခဲ့သညျ။ ကရငျ ပွညျနယျမှ ဒုံးအကကို တငျသှငျးသှားမညျဖွဈသလို သကျဆိုငျရာပွညျနယျ၊တိုငျးအသီးသီးမှရှေးခယျြလိုကျသညျ့ ခေါငျးစဉျ မြားထဲကမှ ခနျ့မှနျးခဆြေနျ ကာတငျခေါငျးစဉျ ၅ ခုခနျ့အား မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ UNESCO သို့ ၂၀၂၁ ခုနှဈတှငျ တငျသှငျး သှားမညျဖွဈကွောငျးလညျး သိရသညျ။ ကုလသမဂ်ဂ၏ ပညာရေး၊ သိပ်ပံနှငျ့ယဉျကြေးမှုဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျး (UNESCO)မှ အမြိုးသားဒွပျမဲ့ ယဉျကြေးမှု အ မှအေနှဈမြားကို အသိအမှတျပွုခဲ့သညျ့ စာရငျးမြားထဲတှငျ မွနျမာနိုငျငံမှ ပါဝငျခဲ့ဖူးခွငျး မရှိသေးကွောငျး လညျးသိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e
၂၅။ အမျးမွို့နယျတှငျ ရကျပိုငျးအတှငျး စဈဘေးရှောငျလူဦးရေ ၂ ဆကြျော မွငျ့တကျလာ
ရခိုငျပွညျနယျ၊ အမျးမွို့နယျ၌ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ စဈဘေးရှောငျစခနျး ၂ ခုတှငျ လူဦးရေ တဈထောငျခနျ့ရှိလာပွီး လကျရှိ မိုးရာသီကွောငျ့ စားဝတျနရေေးနှငျ့ နထေိုငျရေးအခကျခဲမြားဖွဈပျေါနကွေောငျး အမှတျ(၁)စဈဘေးရှောငျစခနျးမှ ဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈသူ ဦးသနျးခြို က မဇ်ဈိမသတငျးဌာနသို့ အတညျပွုပွောကွားသညျ။“ဒီမှာရောကျနတေဲ့လူတှေ ပွောတာက နယျမွရှေငျး လငျးရေးလုပျမယျ။ နီးစပျရာ ရှာတှမှေစုပွီးနကွေပါပွောတယျ။ ဒါးလကျမှာ စားနပျရိပျက်ခာပွတျလတျတာက ၃ လကြျောသှား ပါပွီ။ စားနပျရိပျက်ခာကုနျတော့ မွို့ပျေါပဲတတျလာကွတာ။ အမျးမှာက စဈရှောငျစခနျး (၁) နဲ့ (၂) ရှိတယျ။ အဲတုနျးက လူဦးရေ က ၄၀ဝ ကြျောလောကျပဲ ရှိတာ။ အခုက ၁၀ဝဝ ပွညျ့တော့မယျ။ ထကျဝကျကြျောကြျောလောကျ မွငျ့တတျလာပါ တယျ။ ဒီရကျပိုငျးမှပဲမွငျ့တတျလာတာပါ “ ဟု အမှတျ(၁)စဈဘေးရှောငျစခနျးမှာ ဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈသူ ဦးသနျးခြို က ပွောသညျ။
တပျမတျောမှစဈဆငျရေးလုပျဆောငျမညျ့ ကြေးရှာဘကျသညျ လုံခွုံရေးအရ စိုးရိမျရသညျ့အတှကျ လှတျတျောကိုယျစား လှယျပငျ သှားလာ၍မရကွောငျး အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါထုမကေ ပွောသညျ။“ ဒါးလကျအုပျစုဘကျကို လှတျတျောကိုယျစားလှယျကိုယျတိုငျ သှားလို့မရတာ ၁ နှဈ နီးပါးရှိနပေါပွီ၊ ဒါးလကျဘကျ က လုံခွုံရေးကိုစိုးရိမျရတဲ့ အခွေ အနရှေိတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကိုယျတိုငျတောငျသှားလို့မရတဲ့ အခွအေနပေါ။ အစားသောကျ၊ ရိက်ခာလမျးကွောငျးတှေ ဖွတျ တောကျထားတဲ့အတှကျ အစားသောကျနဲ့ ပတျသကျပွီး စဈဘေးရှောငျဒသေနဲ့ ဒါးလကျအထကျဘကျက ရှာတှမှော ရငျဆိုငျ နရေတဲ့ အခွအေနတေဈခု တော့ရှိတယျ “ ဟု အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါထုမကေ ပွောကွားသညျ။
လကျရှိတှငျလညျး အမျးမွို့နယျတှငျရှိသညျ့ ပဲပဒုံကယျဆယျရေးစခနျးကို ရှာပေါငျး ၁၂ ရှာ၊ အိမျထောငျစု ၁၁၉ စု တို့ နရေပျ စှနျ့ခှာလာကွကွောငျး သိရှိရသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/71100
၂၆။ မိုးကောငျးမွို့ နနျ့ရငျး ရပျကှကျတှငျ လမျး၊ တံတား ရမွေောငျးတူးဖျောရာမှ ကြောကျစိမျး အပိုငျးအစမြား တှရှေိ့သဖွငျ့ ရှာဖှသေူ မြားပွားနေ
ကခငျြပွညျနယျ မိုးကောငျးမွို့တှငျ လမျး၊ တံတား ရမွေောငျးတူးဖျောရာမှ ကြောကျစိမျး အပိုငျးအစမြားတှရှေိ့သဖွငျ့ ရှာဖှသေူ မြားနကွေောငျး သတငျးရရှိသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ လပိုငျးမှစတငျကာ နနျ့ရငျး ရပျကှကျအတှငျးရှိ ဦးဖိုးစောလမျးမှ ဆမားဒူဝါ ခှနျဆိုငျးနျော လမျးကွားရှိ တံတားနှဈခုနှငျ့ လမျးဘေးရမွေောငျးလုပျကိုငျရာမှ ကြောကျစိမျးအပိုငျးအစမြားတှရှေိ့မှုကွောငျ့ ရှာဖှသေူမြားလာခွငျးဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောကွားသညျ။
မိုးကောငျးမွို့မှ ဒသေခံ ဦးဆရေိနျရိနျက “အရငျခတျေတှကေတညျးက ကြောကျစိမျးရာဖွတျရုံးစိုကျတဲ့နရောပေါ့။ အခု အထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူးအိမျရာပေါ့။ အရငျက ဖွတျစကျမရှိတော့ ရိုကျခှဲတာ၊ ဖွတျပိုငျးတှကေို အိမျရှမွေ့ောငျးထဲပဈတယျ။ ကြောကျစိမျးအရိုငျး မကောငျးရငျလညျး အိမျရှမှေ့ာ ဖှကျကွရတာကို။ နနျ့ရငျးနဲ့ အလယျရပျကှကျက ရမွေောငျးတှကေ ဘယျ နရောမဆို ကြောကျထှကျတယျ။ အရငျက ပဈထားတာ အခုက သောငျးကြောကျ၊ သိနျးကြောကျ ဖွဈတော့ လူတှကေ ဝိုငျးရှာကွတာပေါ့။ မွစောတောငျ ဘကျဟိုး တဈကျော သောငျးဂဏနျးဈေးပေါကျတယျ။ တနျဖိုးကွီးတော့ မထှကျပါဘူး။ သိနျးဂဏနျးပါပဲ။ လူတှကေ ကပျြတညျးတော့ လုပျစားကွတာပေါ့” ဟု ပွောကွားသညျ။
လမျးဦးစီးဌာန တာဝနျရှိသူတဈဦးက “ကြောကျစိမျးအပိုငျးအစတှေ ထှကျတာပေါ့။ အရငျက စှနျ့ထားတဲ့ဟာက အခုတနျဖိုးအ သငျ့အတငျ့ရှိတာပေါ့။ လမျးလုပျငနျးကိုတော့ အနှောငျ့အယှကျတော့ ဖွဈတာပေါ့။ လုပျငနျးလညျး ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးပွီးပါပွီ။ ခိုးပွီးလမျးလုပျငနျးအရှမှေ့ာ ကွိုတငျတူးတဲ့သူတှရှေိတာကွောငျ့ ရဲအစောငျ့တှလေညျး ခထြားပါတယျ”ဟု ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/180477
၂၇။ တာခြီလိတျတှငျ ငှကေပျြ ၂၇ ဘီလီယံနီးပါးတနျဖိုးရှိ မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့လကျနကျမြား သိမျးဆညျးရမိ
ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျး) တာခြီလိတျမွို့နယျ၊ ရပေူစမျးကြေးရှာ အနောကျမွောကျဘကျ မီတာ ၄၀ဝဝ ခနျ့အကှာမှာ ငှကေပျြ ၂၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံလောကျ တနျဖိုးရှိ ယဈဆေးဝါးနဲ့ လကျနကျ၊ ခဲယမျးတှေ သိမျးဆညျးရမိတယျလို့ သိရပါတယျ။
လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှကေ ဒီနမေ့နကျ ၄ နာရီခှဲလောကျက သတငျးအရ ရပေူစမျးကြေးရှာရဲ့ အနောကျမွောကျဘကျမီတာ ၄၀ဝဝ ခနျ့အကှာရှိ ဝါးရုံပငျအနီး ရှာဖှစေဈဆေးရာ မသင်ျကာဖှယျရာ မိုးကာပလတျစတဈ အိတျအစအား တှရှေိ့ပွီး တူးဖျောရာ မှ ဖမျးဆီးမိခဲ့တာလို့ တပျမတျောက သတငျးထုတျပွနျပါတယျ။
မွကွေီးအတှငျး မွှုပျနှံထားတဲ့ ဆာလာအိတျ အလုံး ၆၀ အတှငျးမှာ ခနျ့မှနျးတနျဖိုး ငှကေပျြ ၂၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ လောကျ တနျဖိုးရှိ WY စာတနျးပါ စိတျကွှဆေးပွား ၆,၄၈၀,ဝဝဝ ပွားခနျ့၊ စိတျကွှဆေးပွားအကွေ (ရစေိုပုံစံပကျြ) ၁၁၄၈ ကီလိုဂရမျ ခနျ့၊ AK မောငျးပွနျရိုငျဖယျ ၁ လကျ၊ ကညျြအိမျ ၁ ခုနဲ့ ကညျြ ၂၅ တောငျ့၊ ပှိုငျ့-၂၂ သနေတျ ၂ လကျ၊ ၂ လုံးပွူးသနေတျ ၁ လကျ၊ ကညျြ ၅ တောငျ့၊ ၁ လုံးထိုး သနေတျ ၂ လကျတို့အား တှရှေိ့သိမျးဆညျးရမိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သိမျးဆညျးရမိ လကျနကျ၊ ခဲယမျးတှနေဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတှကေို သကျဆိုငျရာကို လှဲပွောငျးအပျနှံသှားမယျလို့ တပျမတျောက ထုတျပွနျထား ပါတယျ။ http://burm ese.dvb.no/archives/396814
၂၈။ မယျလဒုက်ခသညျစခနျးတှငျ မူးယဈဆေးဝါး ထပျမံတှရှေိ့၊ တရားခံပွေးကို ဖမျးဆီးရမိခွငျးမရှိသေးဟု ဆို
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျရှိ မယျလဒုက်ခသညျစခနျးတှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျသတ်တပတျက ထိုငျးအာဏာပိုငျမြားမှ မူးယဈဆေးဝါး ဝငျ ရောကျစဈဆေး ဖမျးဆီးရမိမှုအပွီး ဇှနျလ ၂၇ ရကျနတှေ့ငျ စိတျကွှဆေးပွားမြား ထပျမံ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ရာ လကျသညျ တရားခံ ပွေးကို လကျရှိ အခြိနျထိ ဖမျးဆီးရမိခွငျးမရှိသေးကွောငျး စခနျးတာ ဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။ ဇှနျလ ၂၃ ရကျ နကေ့ ထိုငျးစဈတပျ၊ ရဲ နှငျ့ စခနျး လုံခွုံရေးမြားသညျ မယျလဒုက်ခသညျစခနျး၏ ဇုနျ (B-5B) ရှိ အိမျတဈအိမျကို အနံ့ခံ ခှေး မြားဖွငျ့ ရှောငျတခငျဝငျရောကျ စဈဆေးရာတှငျ စိတျကွှဆေးပွား (၃, ဝ၀ဝ) ကြျော ဖမျးဆီးရ မိခဲ့ပွီးနောကျ ဇှနျလ ၂၇ ရကျနတှေ့ငျ ၎င်းငျးနအေိမျ၌ စိတျကွှဆေးပွားအလုံးရေ (၁,၆၀ဝ) ကြျော ထပျမံတှရှေိ့ခဲ့သညျဟု စခနျး ဥက်ကဋ်ဌ စောအောနကျက ပွောသညျ။
၎င်းငျးက “ဖွဈစဉျက တရားခံရဲ့ အပေါငျးအသငျးတှကေော အမြိုးသမီးနဲ့ သမီးကို ချေါစဈလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ထိုငျးစခနျးလုံခွုံရေးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ သူတို့ကို စခနျးမှာပေးမနတေော့ဘူးဆိုပွီးတော့ သူတို့အိမျကို သှားဖွို လိုကျတဲ့အခါမှာ ထပျပွီးတော့ အလုံးရေ (၁,၆၀ဝ)ကြျောလောကျ သှားတှတေ့ယျလို့ သိရတယျ။ တရားခံ ပွေး ကိုတော့ အခုထိ မဖမျးမိသေးဘူး။ ဘယျနရော၊ ရောကျနမှေနျးလညျးမသိဘူး”ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
လကျရှိ ထှကျပွေးလှတျမွောကျသူ တရားခံပွေးမှာ အသကျ ၂၇နှဈအရှယျ စောအဲငဲဆိုသူဖွဈပွီး ယခု အခြိနျထိ ဖမျးဆီးရမိ ခွငျးမရှိသေးဘဲ လတျတလော အခြိနျကာလတှငျလညျး စခနျးတှငျး ဝငျထှကျသှားလာမှုမြားကို တငျးကွပျထားကွောငျး စခနျးတှငျးနထေိုငျသူမြားက ဆိုသညျ။ လူဦးရေ ၃ သောငျးကြျော နထေိုငျသညျ့ မယျလ ဒုက်ခသညျစခနျးတှငျ ထိုငျးအာဏာ ပိုငျမြားမှ မူးယဈဆေးဝါး ဝငျရောကျစဈဆေးဖမျးဆီးမှုမြား မကွာခဏ လုပျဆောငျလရှေိ့သညျ။ http://kicnews.org/2020 /06/%e1%80%99%e1%80 %9a%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%92%e1%